(No. 22, May 1, 2020)
၁။ ရသေ့တောင်မြို့ပေါ်မှာ စစ်ရှောင်စခန်းဆောက်လုပ်မှု ပြည်နယ်အစိုးရ တားမြစ်
၂။ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းအပေါ် တိုင်းရင်းသားလက်နက် ကိုင်အဖွဲ့ များ ကြိုဆို
၃။ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ ကာလအတွင်း စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲရှိသူများကို DKBA ထောက်ပံ့မှုပြုလုပ်
၄။ ရခိုင်နဲ့ချင်းပြည်နယ်က တိုက်ပွဲတွေကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးသူ ဦးရေတိုး
၅။ မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တချို့အပေါ် အရေးယူပိတ်ဆို့မှု ဗြိတိန် သက်တမ်းတိုး
၆။ မြောက်ဦးနဲ့ ဘူးသီးတောင်မှာ ၂ ရက်အတွင်း ကျောင်းသူတစ်ဦးအပါအဝင် အရပ်သား ၅ ဦး ဒဏ်ရာရ
၇။ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲကို နိုဝင်ဘာလအတွင်း ကျင်းပနိုင်ဖွယ်ရှိဟု ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ပြော
၈။ မြောက်ဦးတွင် နယ်မြေခံ ရဲတပ်သား ၁ ဦး ဖမ်းဆီးခံရ
၉။ လွိုင်လင် တရုတ်ပြည်တော်ပြန် ၉၇ ဦး အစားအသောက် ကိုယ်တိုင်စီစဉ်ရ
၁၀။ တပ်မတော် ဖိအားပေးမှုများကြောင့် KNU ၏ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်ခု ဖြုတ်ပိတ်လိုက်ရ
၁၁။ ကျောက်ဖြူမြို့နယ် ထွေအုပ်ခြံဝင်းအတွင်း အဝေးထိန်းရီမုမိုင်း ၁ လုံးတွေ့ရှိ
၁၂။ ပလက်ဝဒေသသို့ ဆန်အိတ်နှင့်စားနပ်ရိက္ခာများ ထပ်မံရောက်ရှိ
၁၃။ လွယ်ဂျယ်နယ်စပ်ဂိတ်မှဝင်လာသော တရုတ်ပြည်တော်ပြန် ၄ ထောင် နီးပါးရှိလာ
၁၄။ ထောက်ပံ့ ရိက္ခာရရန် အိမ်ထောင်စု ၅,၀၀၀ ကျော်ကျန်ခဲ့၍ လူစုလူ ဝေးဖြစ်
၁၅။ ဝိုင်းမော် ဒိန်ဂျန်ယန်ရှိ ငှက်ပျော်ခြံလုပ်သားများ လုပ်ခလစာနှင့်ပတ်သက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာသို့တိုင်ကြားမည်ဟုဆို
၁၆။ နာဂ ခေါင်းဆောင်ဟောင်းများက ကိုဗစ်အရေး လိုအပ်လျှင် အစိုးရကို ကူညီမည်ဟု ဆို
၁၇။ Covid-19 ပညာပေးပန်းချီရေးဆွဲမှုကြောင့် တရားစွဲခံရသူ ၃ ဦးအာမခံရရှိ
၁၈။ ကပ်တဲလ်ကျေးရွာ ဝင်ထွက်သွားလာမှု ကန့်သတ်၍ အနီးဝန်းကျင်ရွာ စားသောက်ပြတ်လပ်မည့် အနေအထားဖြစ်
၁၉။ ချင်းပြည်နယ် တီးတိန်မြို့နယ် ကပ်တဲလ်ကျေးရွာကို Lockdown ဖြေရန် ပြည်ထောင်စုသို့
၂၀။ ဒုက္ခသည်စခန်း ၁၇၀ ကျော်မှာ ဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ရေးအတွက် အစိုးရ ပြင်ဆင်
၂၁။ ထိုင်းပြန်များကို မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ထိန်းချုပ်နယ်မြေ ဝင်ခွင့်မပြု
၂၂။ ရခိုင်နဲ့ ချင်းမှာ ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေ စုံစမ်းဖို့ ယန်ဟီးလီတောင်းဆို
၂၃။ မင်းပြားတိုက်ပွဲတွင် တပ်မတော် ကြည်း၊ ရေ၊ လေ ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်
၂၄။ ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေ မြို့သစ် ၃ မြို့ တည်ဆောက်နေ
၂၅။ Covid-19 ကာကွယ်ရေးအတွက် အရေးယူမှု ဟားခါးတွင် စတင်
၂၆။ ညွှန်ကြားချက်များလိုက်နာမှုရှိမရှိ စိစစ်နေစဉ် မြဝတီမြို့ရှိ စက်ရုံအလုပ်ရုံများလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုယာယီ ရပ်ဆိုင်းထား
၂၇။ ပလက်ဝမှ စစ်ဘေးရှောင်များ ကျောက်တော် ဘက်သို့ ပြေးရ
၂၈။ မိုးညှင်းက ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၁၈ ဦးတွင် COVID-19 ရောဂါပိုးမတွေ့
၂၉။ မူဆယ်မြို့တွင် တရုတ်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူ မြန်မာလုပ်သား နေ့စဉ် ၁၀ဝ ကျော်ရှိ
၃၀။ တောင်ကြီး သံသယစောင့်ကြည့်လူနာ တဦးသေဆုံး
ရခိုင်မြောက်ပိုင်းက အစိုးရနဲ့ ရခိုင်လက်နက်ကိုင် AA အဖွဲ့တို့ကြား တိုက်ပွဲတွေကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးလာကြတဲ့ စစ်ရှောင်တွေဟာ ရသေ့တောင်မြို့ပေါ်မှာ ၃၀,၀၀၀ နီးပါးရှိတယ်လို့ စစ်ရှောင်ကူညီသူတွေက ပြောဆိုကြပါတယ်။ လက်ရှိ အချိန်မှာ ရသေ့တောင်မြို့ပေါ်မှာ စစ်ရှောင်တွေ များလာတာကြောင့် စားဝတ်နေရေးတွေ ခက်ခဲလာသလို စစ်ရှောင်တွေ နေထိုင်ဖို့အတွက် အဆောက်အဦးတွေ မလုံလောက်တာကြောင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဦးဆောင်ပြီးတော့ အဆောင် တွေ ဆောက်လုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စောဝေက ပြောပါတယ်။ “အိမ်ခြေကတော့ ၁၀၀၊ ၂၀၀ လောက်နီးပါး နေဖို့လောက်တော့ ရနေပြီ။ ၁၀ ပေကို တစ်ခန်းလုပ်တာကို အဲတော့ တစ်အိမ်နဲ့ တစ်အိမ်ခြား တာတော့ မရှိဘူး။ အမိုး မိုးပြီးပြီ၊ အဲလိုအကာလုပ်ဖို့ပဲ ကျန်တော့တာ။ တကယ်လို့ နေမယ်ဆိုရင်တော့ နေလို့ရတဲ့ အနေ အထားရှိနေပါပြီ။” စစ်ရှောင်တွေအတွက် ဆောက်လုပ်နေတာကို တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ဖြစ်စေ ဆက်မဆောက် လုပ်ဖို့အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က ဒီကနေ့မှာပဲ စာထုတ်ပြီးတော့ တားမြစ်လိုက်တယ်လို့ ဒေါ်ခင်စောဝေက ဆက် ပြောပါတယ်။
ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးလာကြသူတွေအတွက် ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့ မြို့နယ် ခြောက် ခုမှာ စစ်ရှောင်စခန်း ခုနစ်ခု တည်ဆောက်ထားပေးပြီးဖြစ်သလို လိုအပ်တဲ့ စစ်ရှောင်စခန်းတွေ ထပ်ဆောက်ပေးဖို့ စီစဉ်နေ တယ်လို့လည်း အဲဒီတားမြစ်စာထဲမှာ ဖော်ပြထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ရှောင်စခန်းတွေ ဆောက်လုပ်နေတာကို တားမြစ် တာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြောခွင့် ရသူတွေကို ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း တုံ့ပြန်ဖြေကြားမှု မရှိပါဘူး။ အစိုးရက ဆောက်လုပ်ပေးထားတဲ့ စစ်ရှောင်စခန်းတွေဟာ မြို့ပေါ်နဲ့ ဝေးလွန်းသလို နယ်မြေအနေအထားကို လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဒေသခံတွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီးဆောက်လုပ်ထားတာ မဟုတ်တာကြောင့် စစ်ရှောင်တွေအနေနဲ့ အဲဒီ စခန်းတွေ မှာ နေထိုင်ဖို့အဆင်မပြေဘူးလို့လည်း စစ်ရှောင်တွေနဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက ပြောဆိုကြပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာ ရသေ့တောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ စစ်ရှောင်တွေဟာ မြေကြီးပေါ်မှာ ကပ်ထူးစက္ကူလေးတွေ ခင်းပြီးနေထိုင်နေကြ ရပြီး ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ မိုးရွာသွန်းမှုတွေ ရှိနေတာကြောင့် သူတို့အနေနဲ့ စားဝတ်နေရေးအပြင် ကျန်းမာရေးအတွက်ပါ စိုးရိမ် ရတယ်လို့ စစ်ရှောင်ကူညီသူတွေက ပြောဆိုကြပါတယ်။ https://burmese.voanews.com/a/rakhineidpcamp/5398701
၂။ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းအပေါ် တိုင်းရင်းသားလက်နက် ကိုင်အဖွဲ့များ ကြိုဆို
COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းပူး ပေါင်းရေး ကော်မတီဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်း ဧပြီလ ၂၇ နေ့စွဲဖြင့် သမ္မတရုံး၏ ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်း အပေါ် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစည်းများ(EAOs)က ကြိုဆိုလိုက်သည်။
လက်ရှိကပ်ရောဂါ ဖြစ်စဉ်သည် အားလုံးပါဝင်၍ ဝိုင်းဝန်းကာကွယ်တားဆီးရမည့် ကိစ္စရပ်ဖြစ်သည်နှင့်အညီ ယခုလို သမ္မတရုံးမှ တရားဝင် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းအပေါ် ကြိုဆိုကြောင်း ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး-KNU အတွင်းရေးမှူး (၁) ပဒိုစောဆဲပွယ်က ပြောသည်။ ၎င်းက“ဒီလိုမျိုး ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ ဝိုင်းဝန်းပြီး တားဆီးရေးလုပ်တဲ့ ကိစ္စရပ်အပေါ်မှာတော့ ကြိုဆို ရမယ့် ကိစ္စဖြစ် တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အဓိကက ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ညှိနှိုင်းကြမလဲ ဘယ်လို သဘောတူညီချက်အပေါ်မှ ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတာတော့ ဒါကတော့ ကျနော်တို့ စောင့်ကြည့်ရမယ် ကိစ္စတော့ ဖြစ်တာပေါ့”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးကို တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ အခြေပြုရာ နေရာဒေသများ တွင် ထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး COVID-19 ကာကွယ် ထိန်းချုပ် ကုသရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းရေးကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်း ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးက အမိန့်ကြောငြာစာထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ကော်မတီထဲတွင် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဗဟိုဌာန၏ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ တင်မျိုးဝင်း၊ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ဇော်ဦး(ငြိမ်း) ၊ အ တွင်းရေးမှူး တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများရေးရာ ဝန်ကြီး၏ ဒု-ဝန်ကြီး ဦးလှမော်ဦးနှင့် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ငြိမ်းချမ်းရေး ကော်မရှင် အကြံပေးအဖွဲ့ဝင် ဦးမိုးဇော်ဦး စသည်ဖြင့် အသီးသီးပါဝင်သည်။ သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကောင်စီ/သျှမ်းပြည်တပ်မတော်(RCSS/SSA)၏ အကြံ ပေး ဦးခွန်စိုင်းက “ ဒီ ကိစ္စကို RCSS ဘက်က တာဝန်ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို မေးပါတယ်။ သူတို့က ဒီကိစ္စကို ကြိုဆိုပါတယ်ပေါ့။ ကျနော် တို့ လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ EAO ဘက်ကလည်း ဧပြီလ ၁၇ ရက်နေ့မှ အစည်းအဝေး လုပ်ပြီးတော့မှ EAO တွေအနေနဲ့ ပူးတွဲပြီးတော့မှ COVID-19 ကို ဘယ်လိုလုပ်ကိုင်သွားမလဲဆိုတာကိုလည်း ဆွေးနွေးသွားခဲ့ပါတယ်တဲ့။ ဒီကော်မတီကို ဖွဲ့ဖို့ဆို တာလည်း ကျနော်တို့သဘောရတယ်။ အခုဆိုရင်လည်း ကျနော်တို့အထက် မှာရှိတဲ့ PPST ခေါင်းဆောင်တွေကို တင်ပြထား ပါတယ်တဲ့။ မကြာခင်မှာ ဖွဲ့ဖြစ်မှာပါ။ ဖွဲ့ဖြစ်ရင်လည်း ဘယ်နည်း နဲ့မဆို အစိုးရဖွဲ့ထားတာနဲ့ပူးတွဲ လုပ်သွားမှာပါ လေတဲ့” ဟု ကေအိုင်စီသို့ပြောသည်။http://kicnews.org/2020/04/covid19%e1%80%b1%e1%80% 9b%e1%80%ac%e1%80%82%e1%80%ab%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19 ) ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေသည့်ကာလအတွင်း စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲရှိသည့် ဒေသခံပြည် သူများအား ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြု ကရင့်တပ်မတော် (DKBA-NCA)အဖွဲ့က အခြေခံစားနပ်ရိက္ခာနှင့် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများ ပြု လုပ်ခဲ့သည် သိရသည်။ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြိုနယ် လေးဖာထောကျေးရွာတွင် ဧပြီ ၂၇ ရက်နေ့က အိမ်ထောင်စု ၄ဝဝ ကျော် အား အိမ်ထောင်စု တစ်စုလျှင် ဆန် ၁ အိတ်၊ ဆီ ၂ ဗူး၊ ဆား၊ ငါးပိ၊ ကြက်သွန်၊ ငရုပ်ခြောက်နှင့် အချိုမှုန့်စသည့်အခြေခံ စားနပ် ရိက္ခာများအပြင် အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကျပ်ငွေ ၂၀,၀၀၀ စီ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်ဟု DKBA အမှတ် ၉၀၃ တပ်ရင်းမှူး ဒုဗိုလ်မှူးကြီး စောအေဝမ်းက ကေအိုင်စီ သို့ ပြောသည်။
“ စစ်ပြေးရှောင်တွေ ဒုက္ခသည်ကနေပြည်လာနေထိုင်တဲ့လူတွေ တော်တော်များ အခက်အခဲအများကြီးရှိတယ်။ ခုရောဂါဖြစ် တဲ့ကာလမှာ ပိုပြီးဒုက္ခရောက်တယ်။ တစ်ချို့ထမင်းပြုတ်စာနေရတယ်။ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကုန်တယ်။ ဆန်အိတ် ၆ ထောင် လောက် ဝယ်ထားတယ်။ နောက်လာမယ့် ဒီဇင်ဘာလအထိ နိုင်သလောက်ကူညီသွားမယ်”ဟု DKBA အမှတ် ၉ဝ၃ တပ်ရင်းမှူး ဒုဗိုလ်မှူးကြီး စောအေဝမ်းက ပြောသည်။ ထို့အပြင် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် ဘုရားသုံးဆူ၊ လေးဖာထော၊ မဲ့တဖွိး၊ ကြိမ်ချောင်း၊ ကျွန်းချောင်း၊ ပြောင်မထိန် ကျေးရွာ များနှင့် အနန်းကွင်းတိုက်နယ်ရှိ ကျေးရွာအုပ်စုများကိုလည်း စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲသူများအား အခြေခံစားနပ်ရိက္ခာများနှင့် ငွေ ကြေးထောက်ပံ့မှုများကို အစိုးရ၊ KNU -ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးတို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုလည်း DKBA က ပြောသည်။
လေးဖာထောရွာနေ စောအုန်းရှင်က “ ဒီမှာက စစ်ပြေးရှောင်နဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းကနေ ပြန်ရောက်လာသူတွေများတယ်။ ရောဂါ ကာလမှာ စားဝတ်နေရေး အရမ်းခက်ခဲတယ်။ ဒီမှာက ရာသီအပင်တွေစိုက်တယ်။ တစ်ရာသီစာပဲ ဖူလှုံတယ်။ အပြင်မှာလည်း အလုပ်ထွက်လုပ်လို့ မရဘူး။ အလုပ်တွေကလည်း ပိတ်ထားကြတယ်။ နိုင်ငံတော်က ထောက်ပံ့တဲ့ဆန်တွေ ကျနော်တို့ မရခဲ့ ပါဘူး။ DKBA အဖွဲ့က ဆန်တွေ၊ ဆီတွေ လာထောက်ပံ့ပေးတော့ ဝမ်းသာပါတယ်”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။ http://kicne ws.org/2020/04/%e1%80%80%e 1%80%af%e1%80%ad%e1%80%97%e1%80%85%e1%80
လက်ရှိအချိန်ထိ စစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့ ရခိုင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်တွေမှာ တစ်နေ့တစ်ခြား နေရပ် စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရတဲ့ စစ်ရှောင်ဦးရေဟာလည်း ပိုမို များပြားလာပြီးစားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေမှုတွေကို ပိုမိုရင်ဆိုင်နေ ကြရတယ်လို့ စစ်ရှောင်စခန်း တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောဆိုကြပါတယ်။ ရခိုင်မြောက်ပိုင်းက ကျောက်တော်မြို့နယ်အတွင်းမှာ ထပ်တိုးလာတဲ့ စစ်ရှောင်တွေကို လက်ခံဖို့ နေရာမရှိ တော့သလို စစ်ရှောင်ဦးရေ ၂၀,၀၀၀ နီးပါးအထိ ရှိနေတယ်လို့ ကျောက်တော်မြို့မိမြို့ဖ ဒေါက်တာ ထွန်းအေးက ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ ကျောက်တော်မြို့နယ်မှာ မြို့ပေါ်မှာ စစ်ရှောင်စခန်းစုစုပေါင်း ၁၅ နေရာလောက်ရှိတယ်။ လူဦးရေကတော့ ၇,၀၀၀ နီးပါးလောက်ရှိတယ်။ ထပ်တိုးလာတဲ့ သူတွေကို လက်ရှိအချိန်မှာ မြို့ပေါ်က စခန်းတွေမှာ လက်ခံနိုင်တဲ့ အနေအထား မရှိတော့လို့ ဆွေမျိုးတွေ အိမ်မှာ ခိုကပ်ပြီးနေတဲ့ သူရှိတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကျောက်တော်မြို့နယ်အတွင်းက တစ်ခြား ကျေးရွာတွေမှာလည်း နေကြတယ်။ အကုန်လုံး ပေါင်းလိုက် မယ်ဆိုရင်တော့ တိုက်ပွဲဖြစ်ကတည်းကဆိုရင် စစ်ရှောင် ၂၀,၀၀၀ လောက်ရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းရတယ်။” ကျောက်တော်မြို့နယ်အတွင်းက ညောင်ချောင်း စစ်ရှောင်စခန်းမှာလည်း ဒီကနေ့ အထိ စစ်ရှောင် ထပ်တိုးနေတယ်လို့ ညောင်ချောင်းစစ်ရှောင်စခန်း တာဝန်ခံက ပြောပါတယ်။
ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်နေကြသူတွေကတော့ ရသေ့တောင်မြို့နယ်မှာ အများဆုံးရှိနေတာ ဖြစ်ပြီး လူဦးရေအားဖြင့် ၃၀,၀၀၀ နီးပါးရှိနေပါတယ်။ အဲဒီစစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာ နေရာထိုင်ခင်းတွေ မလုံလောက်တဲ့ အပြင် အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ မိုးရွာသွန်းမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့် စစ်ရှောင်တွေအတွက် အခက်တွေ့နေရတယ်လို့ စစ်ရှောင် တွေကို ကူညီပေးနေတဲ့ ကိုဘက္ကာက ပြောပါတယ်။
ရခိုင်မြောက်ပိုင်းအပြင် ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်ဘက်မှာလည်း တိုက်ပွဲတွေ ဆက်လက်ပြင်းထန်နေသလို စစ်ရှောင်တွေ ဟာလည်း တနေ့တခြား များပြားလာနေပြီး စားဝတ်နေရေး ကိစ္စရပ်တွေကို ဖြေရှင်းဖို့ ခက်ခဲ့နေကြတယ်လို့ ပလက်ဝ စစ်ရှောင် ကူညီ သူတွေက ပြောဆိုကြပါတယ်။ COVID-19 ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါအကြပ်အတည်းအချိန်မှာ ရခိုင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်တွေမှာ တိုက်ပွဲတွေရပ်ဖို့ ကုလသမဂ္ဂအပါဝင် မြန်မာ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေက တောင်းဆိုးထားပေမဲ့လည်း ဒီကနေ့အထိ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်လက်ပြင်းထန်နေသလို ဖမ်းဆီးခံရသူတွေ နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူတွေနဲ့ ထိခိုက် ဒဏ်ရာရသူတွေဟာလည်း နေ့စဉ်နဲ့အမျှရှိနေပါတယ်။ https://burmese.voanews.com/a/rakhine-chin-people-flee-/5395318.html
မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့သော လူမျိုးစုသုတ်သင်ရှင်းလင်းမှုနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ် တွေမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေမှာ ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်ထိပ်တန်းအရာရှိ ၈ ယောက် အပါအဝင် အရာရှိနဲ့ အခြားအဆင့် စုစုပေါင်း ၁၄ ဦးကို ဘဏ္ဍာရေးအရ အရေးယူ ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ စာရင်းကို ဗြိတိန်နိုင်ငံ အစိုးရက ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ဧပြီလ ၂၈ ရက်နေ့ ရက်စွဲနဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံ ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်တဲ့ စာရင်းမှာ မြန်မာ့တပ်မတော်က ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အဆင့် ၁ ဦး၊ ဗိုလ်ချုပ်အဆင့် ၂ ဦးနဲ့ ဗိုလ်မှူးချုပ် အဆင့် ၅ ဦး ပါဝင်ပါတယ်။ သူတို့အားလုံးကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်ကစပြီး ဘဏ္ဍာရေးအရ ပိတ်ဆို့ အရေးယူထားတာဖြစ်ပြီး အခုနှစ် ဧပြီလမှာ ထပ်မံ စာရင်းပြုစု ထုတ်ပြန်ခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပိတ်ဆို့အရေးယူခံရတဲ့ စာရင်းထဲ ပါဝင်သူ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အောင်ကျော်ဇောဟာ ၂၀၁၅ က ၂၀၁၇ ခုနှစ် အတွင်း အမှတ် (၃) စစ်ဆင်ရေး အထူးအဖွဲ့မှူး အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူ ဖြစ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်စိုးက ၂၀၁၆ က ၂၀၁၇ ခုနှစ် အတွင်း အနောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ အနောက်တောင်ပိုင်း စစ်ဌာန ချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် ညီညီဆွေက အရင် မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့် အရာရှိတွေ ထဲ တော့ အမှတ်(၃၃)ခြေမြန်တပ်မ၊ တပ်မမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်အောင်၊ အမှတ် (၉၉) တပ်မမှူးဖြစ်ခဲ့ဖူးသူ လက်ရှိ အရှေ့မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ခင်လှိုင်၊ နယ်ခြားစောင့် ရဲ တပ်ဖွဲ့ ရဲမှူးချုပ်အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သူ ဗိုလ်မှူးချုပ် သူရ ဆန်းလွင်၊ အမှတ် (၉၉) ခြေမြန်တပ် တပ်မမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် သန်းဦး၊ အမှတ် (၁၅) စစ်ဆင်ရေးဆိုင်ရာ ကွပ်ကဲ ရေးဌာန တပ်မှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ခင်စိုး တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အလားတူပဲ အဲဒီ တပ်မတော်ထိပ်တန်း အရာရှိကြီးတွေကို အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားပိုင် ပစ္စည်း ထိန်းချုပ် ရေးရုံး (OFAC) ကလည်း ၂၀၁၈ ကတည်းက အရေးယူ ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြုလုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။ https://burmese.v oanews .com/a/myanmar-sanction-britain-/5396077.html
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ တပ်မတော်နဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်တော်(AA)တို့ တိုက်ပွဲတွေ ဒီနေ့အထိ ဆက်လက် ပြင်းထန်နေဆဲ ဖြစ်ပြီး ဧပြီလ ၂၆ နဲ့ ၂၇ ရက်နေ့တွေမှာ ကျောင်းသူတစ်ဦးအပါအဝင် အရပ်သား ၅ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးမြို့မှာ မနေ့ ညနေ ၄ နာရီကျော်အချိန်က တပ်မတော်စစ်ကြောင်းတစ်ခု မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက် အဲဒီ တပ်မတော် စစ်ကြောင်းက ပစ်ခတ်လို့ ထမင်းဆိုင်မှာရှိနေတဲ့ အရပ်သား ၄ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ မြို့ခံ တွေကပြော ပါတယ်။
မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာဟာ အလယ်ဈေးတံတားနဲ့ Prince ဟိုတယ်ကြားမှာဖြစ်ပြီး အခင်းဖြစ်နေရာနဲ့ မီတာ ၉၀ဝ ကျော် ဝေးတဲ့ မြောက်ဦးစာတိုက်ဘေး မြဝါတောင်ခြေရင်းက ထမင်းဆိုင်ကို လက်နက်ကြီးကျည်ကျရောက်ခဲ့တာပါ။ အခင်းဖြစ်နေရာ အနီးမှာနေထိုင်တဲ့ လုံခြုံရေးအရ အမည်မဖော်လိုတဲ့ မြို့ခံတစ်ဦးက တပ်မတော်စစ်ကြောင်းကို မိုင်းခွဲသံထွက်ပေါ်လာပြီး နောက် တပ်မတော်က မြို့တွင်းထဲကို အချိန် ၁ နာရီနီးပါးလောက် ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ လက်နက်ကြီးကြောင့် ထမင်းဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ် မမိငယ်၊ အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ် မမြမြအေး၊ ဆိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ အသက် ၄၃ နှစ်အရွယ် ဦးညီညီမောင်နဲ့ အသက် ၆၅ နှစ်အရွယ် အဖွားတစ်ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြပါတယ်။ ဒဏ်ရာရသူ ဦးညီညီမောင်က တပ်မတော်က မြို့ထဲဘက်ကို ပစ်ခတ်နေချိန်မှာပဲ သူ့ရဲ့ထမင်းဆိုင်ကို ထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါ တယ်။
မနေ့က မြောက်ဦးမှာ တပ်မတော်စစ်ကြောင်းကို မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်တဲ့ကိစ္စအပြင် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ကံ့ကော်မြိုင်ကျေးရွာက ကျောင်းသူ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရက္ခိုင့်တပ်တော် (AA) ရဲ့ပြောခွင့်ရသူ ခိုင်သုခကို RFA က မေးမြန်းရာမှာ – မြောက်ဦးဘက်မှာ မနေ့က တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိခဲ့ကြောင်း၊ ဘူးသီးတောင်ဘက်မှာ နှစ်ဖက် ထိတွေ့မှုတွေရှိခဲ့သလို ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝနဲ့ ဆမီးအကြားမှာလည်း AA တပ်ရှိရာကို တပ်မတော်ဘက်က ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက် အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့ကြောင်း RFA ကို ပြောပါတယ်။ မြောက်ဦးက ပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ တိုက်ပွဲမရှိဘဲ အကြောင်းမဲ့ အရပ်သားတွေအပေါ် လူမျိုးရေးအရ အငြိုးအတေးနဲ့ ပစ်ခတ်နေတာဖြစ်ပြီး ဒါဟာစစ်ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်နေတာသာဖြစ်တယ် လို့ ခိုင်သုခက ပြောပါတယ်။
RFA က ရရှိထားတဲ့ အချက်အလက်တွေအရ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်တွေမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ကနေ မနေ့က ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့အထိ အချိန် ၂ လတာ ကာလမှာ သေဆုံးတဲ့ အရပ်သား ၁၀ဝ ခန့် ရှိနေ သလို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဟာလည်း ၂၂၀ ကျော်အထိရှိနေပါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/news/rakhine-aa-army-civilian-deaths-04282020100612.html
၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို လာမယ့်နိုဝင်ဘာလထဲမှာ ကျင်းပနိုင်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးမြင့်နိုင်က ခန့်မှန်းပြောပါတယ်။ မြန်မာ့အသံက မေးမြန်းတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဘယ်တော့ ကျင်းပမလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆွေးနွေးခန်းမှာဖြေဆိုထားတာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်နဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွေမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွေအတိုင်း လာမယ့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်း နိုဝင်ဘာ ၈ ရက် ဒါမှမဟုတ် ၇ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပနိုင်ဖွယ် ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
လွှတ်တော်သက်တမ်း ၅ နှစ်ပြည့်ရင် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ ၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအ‌ခြေခံဥပဒေမှာ ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ အတိုင်း ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင် နိုဝင်ဘာလလောက်မှာ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ဖွယ်ရှိနေတာပါ။ ၂၀၂၀ အထွေအထွေ ရွေး ကောက်ပွဲ ရက်ကိုတော့ အရင် ၂၀၁၀ နဲ့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ကြေညာခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်း ရွေးကောက်ပွဲ ရက်မတိုင်ခင် နှစ်လအလို ဒါမှမဟုတ် လေးလအလိုမှာ ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမယ်လို့လည်း ဦးမြင့်နိုင်ကပြောပါတယ်။
အခုကာလဟာ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက် ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူတွေနဲ့ ပြည်သူတွေအကြားမှာ ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်ဖြစ်မှာ စိုးရိမ်သူတွေ ရှိနေသလို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလည်း ကျင်းပမယ့်ရက်ကို တိတိ ကျကျ မကြေညာသေးတာကြောင့် ခန့်မှန်းတာတွေ အမျိုးမျိုးထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားတာ ဒီထက်ပိုမို ကျယ်ပြန့်လာမယ်ဆိုရင် လာမယ့် ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို ရွှေ့ဆိုင်းရမယ့် အနေအထားမှာ ရှိတယ်လို့ နိုင်ငံရေးအသိုင်းအဝိုင်းက သုံးသပ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/384996
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြောက်ဦးမြို့ရှိ နယ်မြေခံရဲတပ်ရင်းမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ရဲတပ်သား တဦးကို တုတ်၊ ဓား ကိုင်ဆောင် ထားသူတွေက ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးက သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဧပြီ ၂၆ ရက် မနက် ၁၀ နာရီခွဲလောက်က မြောက်ဦးမြို့ နယ်မြေခံရဲတပ်ရင်းက ရဲဒုတပ်ကြပ်တဦးနဲ့ ရဲတပ်သားနှစ်ဦးတို့ဟာ မြောက်ဦးမြို့သို့ ဈေးသွားဝယ်ပြီးအပြန် ရတနာ့မာန်အောင်ဘုရားလမ်းရှိ သီဟိုဠ်ခြံအနီး အရောက်မှာ တုတ်၊ ဓား ကိုင်ဆောင် ထားတဲ့ အရပ်ဝတ်နဲ့ အေအေ ၈ ဦးက ဝန်းရံဖမ်းဆီးခဲ့လို့ ရဲတပ်သားတစ်ဦး ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ တပ်မတော်သတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရတဲ့ ရဲတပ်သား ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ဧပြီ ၂၇ ရက် ညပိုင်းကလည်း မြောက်ဦးမြို့၊ ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးအနီးရှိ စစ်ဆေး ရေး ဂိတ်ဟောင်း အဆောင်ကို အေအေအဖွဲ့က ခြင်ဆေးဘူးတွေနဲ့ ၆၀ မမ ဗုံးသီး ၁ လုံးတို့ကို အသုံးပြုပြီး မီးရှို့ဖောက်ခွဲ ဖျက်ဆီးခဲ့လို့ ပျက်စီးမှုရှိခဲ့တယ်လို့လည်း တပ်မတော်က သတင်း ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရက္ခိုင့်တပ်မတော် အေအေဘက်ကတော့ ပြန်လည် သတင်းထုတ်ပြန်တာ မတွေ့ရ သေးပါဘူး။ http://burmese.dvb.no/archives/384998
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း လွိုင်လင်မြို့နယ်တွင် တရုတ်ပြည်တော်ပြန် ၉၇ ဦးရှိပြီး အစားအသောက်ပိုင်းကို ကိုယ်တိုင်စီမံရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ အဆိုပါ တရုတ်ပြည်တော်ပြန်များသည် မူဆယ် – တရုတ်နယ်စပ် ဂိတ်မှ ဧပြီ ၂၄ ရက်နေ့က ထွက်လာ ကြသူများဖြစ်ပြီး ထိုသူများကို Quarantine ၂၁ ရက် ထားရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း လွိုင်လင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) လွှတ်တော်အမတ် နန်းမြထွေးက သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကိုပြောသည်။
“ခု ပြည်တော်ပြန်တွေကို အစိုးရကတော့ နေဖို့ နေရာတွေပဲ စီစဉ်ထားပေးတယ်။ စားသောက်ရေးပိုင်းကိုတော့ သူတို့ တတ်နိုင်သလောက် နည်းများမဆို ပြန်ကူညီနေပါတယ်။ ဒီက သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေ ဘက်ကလည်း အလှူရှင်တွေ စု ပြီး တတ်နိုင်သလောက် ကူညီသွားမှာပါ” ဟု နန်းမြထွေး ကပြောသည်။ လက်ရှိမှာ ပြည်တော်ပြန် ၉၇ ဦး ကို လွိုင်လင်မြို့ နယ်ရှိ အစိုးရ နည်းပညာ အထက်တန်းကျောင်း နှင့် ပင်လုံမြို့ရှိ နတလ ကျောင်း တွေမှာ ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ဧပြီ ၂၆ ရက်နေ့က အရှေ့အလယ်ပိုင်း တိုင်းမှူးမှလည်း လွိုင်လင်မြို့နယ်ရှိ တရုတ်ပြည်တော်ပြန်များကို ဆန်၊ ဆီ နှင့် ပဲ တို့ လည်းလာရောက်လှူဒါန်းသွားကြောင်း သိရသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/16325
၁၀။ တပ်မတော် ဖိအားပေးမှုများကြောင့် KNU ၏ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်ခု ဖြုတ် လိုက်ရ
KNU-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ထိန်းချုပ်နယ်မြေ သထုံခရိုင် (တပ်မဟာ ၁) မော်စကိုဒေသ ထောင်မှူးကျေးရွာအုပ်စု ဈေးမသွယ်ရွာတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် Covid -19 ရောဂါကာကွယ်ရေး ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်ခုအား အရှေ့တောင် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်(ရတခ)မှ ဖိအားပေးမှုများကြောင့်ဖျက်သိမ်းလိုက်ရကြောင်း KNU သထုံခရိုင်တာဝန်ရှိသူများထံမှ သိရသည်။
နှစ်ဖက်ရောနှောအုပ်ချုပ်သည့် ဒေသတွင် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးရေးဂိတ်မထားရှိရေး ရတခတိုင်းမှူး၏ ညွန်ကြားမှုအရ ဟု ဆိုကာ ၎င်းဒေသရှိ အမြောက်တပ် ၅၀၂ ဒုတပ်ရင်းမှူး ဗိုလ်မှူးအောင်ကိုကိုက ဧပြီလ ၂၅ရက်မှ ၂၇ ရက်နေ့များတွင် အကြိမ် ကြိမ် လာရောက်ပြောဆိုမှုများကြောင့် ယခုလိုဖျက်သိမ်းလိုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း KNU သထုံခရိုင် အတွင်းရေးမှူး ပဒိုစောစိုးမြင့် က ပြောသည်။ ၎င်းက“ဒုတပ်ရင်းမှူးပြောတာက ဒီဟာလုပ်ရင် ပြည်နယ်၊ တိုင်းခွင့်ပြုချက်ရမှ လုပ်ရမယ်တဲ့၊ အဲဒီနေရာက အစိုးရဘက် ဘာမှမလုပ်တော့ ပြည်သူတွေတောင်းဆိုလို့ ကျနော်တို့လုပ်တာပဲ။ အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့လည်း ပေါင်းပြီး ညှိနှိုင်းတာအပြင် လွှတ်တော်အမတ်တွေလည်း သိတယ်။ လုပ်သင့်ပါတယ်လို့လည်း သူတို့ပြောခဲ့တာရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် တပ်ဘက်က ခဏခဏလာပြောတော့ အစကဆက်လုပ်မယ်လို့ စဉ်းစားသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆက်လုပ်ရင် နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာဖြစ်လာမှာ ကျနော်တို့ မလိုလားဘူး ။ ကျနော်တို့ ဒါလုပ်တာ အရေးယူလို့တောင်ရတယ်လို့ တပ်ဘက်က အဲလောက် ထိပြေ တယ်”ဟု ကေအိုင်စီသို့ပြောသည်။
“အစိုးဘက်က လုပ်တာရှိရင် ကျနော်တို့ကလည်း မလုပ်ပါဘူး။ အခုက ဘယ်သူမှမလုပ်လို့ ကျနော်တို့ လုပ်တာ အမှန်ဆိုရင် ကျနော်တို့နဲ့ညှိနှိုင်းလို့ရတာပဲ။ ဒီရောဂါကို ကာကွယ်ဖို့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက လုပ်ဆောင်နေတာပဲ နိုင်ငံ ရေးအမြတ်ထုတ်ဖို့လို့ ကျနော်တို့မှာ စိတ်ဆန္ဒမရှိဘူး။ ကျနော်တို့ ဒီလိုလုပ်တာ မကြိုက်တာဟာ အဲဒီက ကျနော်တို့ ကရင်လူထုတွေကို ရောဂါကူး စေတာလားလို့ ကျနော်တို့က သံသယဖြစ်မိတယ်” ဟု ခရိုင်အတွင်း ရေးမှူး စောစိုးမြင့်က ဖြည့်စွက်ပြောသည်။ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသည့် အဆိုပါကန့်ကွက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် ပြောခွင့်ရ ဗိုလ်မှူးကြီး မောင်မောင်လတ်ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ၌ “ အဲဒီနေရာကို လက်နက်ကိုင်ပြီးဝင်လို့မရဘူး။ ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီး ဝင်လို့မရ ဘူး။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် ကန့်ကွက်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ယနေ့တွင် ပြန်လည်ပြောဆိုသည်။
ထို့အပြင် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစည်းများ အခြေစိုက်ရာဒေသများတွင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီး “Covid -19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းရင်း သားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ”ကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်း မြန်မာအစိုးရ သမ္မတရုံးက ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သေးသည်။ http://kicnews.org/2020/04/%e1 %80%90%e1%80%95%e1%8 0%b9%e1 %80%99%e1%80%b1%e1%80
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခြံဝင်းအတွင်းရှိ ခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးအနီးမှာ ဧပြီ ၂၈ ရက် မနက်က အဝေးထိန်းရီမုမိုင်း တလုံးတွေ့ရှိလို့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့က ရှင်းလင်းခဲ့ရပါတယ်။ ကျောက်ဖြူမြို့ အထွေထွေအုပ်ချုပ် ရေးမှူးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတဦးက “တွေ့တာကတော့ မနက် ၁၁ နာရီခွဲမှာပါ။ အဲဒီဟာကို ကျောက်ဖြူမြို့မှာရှိတဲ့ လုံခြုံရေး ဆောင် ရွက်နေတဲ့ တပ်ကနေပြီးတော့ ၁၂ နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာ လာပြီးတော့ရှင်းလင်းရေးလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ သူတို့ ပြောတာက တော့ အဝေးထိန်းရီမုမိုင်းအမျိုးအစားဖြစ်တယ် လို့ပြောတယ်။ PPC ပိုက်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ အချင်း ၅ လက္မ၊ အရှည် ၆ လက္မ လောက်တော့ရှိတယ်”လို့ ပြောပါတယ်။
ဒီကိစ္စအသေးစိတ်သိရှိနိုင်ဖို့ ကျောက်ဖြူမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးအောင်မော်ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ ဖုန်းကိုင်ဖြေဆိုခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ ကျောက်ဖြူမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးခြံဝင်းအတွင်းမှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်ကလည်း အမှိုက်ပုံးမီးရှို့ရာက ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကာ ဝန်ထမ်း ၈ ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ အလားတူ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့ ကလည်း ဒုခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ်အနီးမှာ ထောင်ထားတဲ့ရီမုမိုင်း ၁ လုံး တွေ့ရှိခဲ့ပြီး မိုင်းရှင်းလင်းရေးအဖွဲ့က လာရောက် ရှင်းလင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/385002
စစ်ဘေးရှောင်များနှင့် ပလက်ဝဒေသခံများအတွက် အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများအဖြစ် ဆန်အိတ်နှင့် အခြားစားသောက်ကုန် ပစ္စည်းများ ပလက်ဝမြို့သို့ ဧပြီ ၂၈ ရက်နေ့က ထပ်မံရောက်ရှိသွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ အဆိုပါရောက်ရှိလာသည့် ပစ္စည်းများမှာ ဆန်အိတ် ၂၀ဝ၀ နှင့် အခြားစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ယင်းနေ့တွင်ပင် တပ်မတော်ရဟတ်ယာဉ်နှင့် ကြက်ဥနှင့်ကြက်သွန်နီများကို ပလက်ဝသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်ဟု တပ်မတော် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်း က ပြောသည်။“နောက်ထပ်ပို့ဖို့လည်းရှိသေးတယ်။ WFP ရဲ့ဟာတွေထပ်ပို့မယ်။ မနေ့က ညနေက ပို့ရင်းတောင်မှပဲ WFP ကား အပစ်ခံရ တာရှိသေးတယ်။ ယာဉ်တန်းနဲ့ပို့တာမှာ WFP ကားတွေလည်းပါတယ်” ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ယခု ရိက္ခာနှင့်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများတင်ဆောင်လာသော ယာဉ်တန်းသည် ဧပြီလ ၂၅ ရက်နေ့က မတူပီမြို့မှ စတင် ထွက်ခွာလာရာ ဆမီးသို့ ရောက်ရှိပြီးနောက် ရာသီဥတုဆိုးရွားပြီး မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှု အခြေအနေများအပြင် ပစ်ခတ်မှု များလည်း ဖြစ်ခဲ့ပေါ်ခဲ့၍ ဆမီးတွင် ရပ်နားနေခဲ့ရသေးသည်။ ပလက်ဝမြို့အနီးတဝိုက်တွင် တပ်မတော်နှင့် AA တို့ ဖြစ်ပွား သောတိုက်ပွဲများကြောင့်လည်း ကုန်စည်စီးဆင်းမှုမရှိသဖြင့် ဈေးနှုန်းများ အဆမတန်မြင့်တက်ပြီး ဒေသခံပြည်သူ၊ အစိုးရ ဝန်ထမ်းများနှင့် စစ်ဘေးရှောင်များမှာ စားသောက်ရေး အခက်အခဲများကြုံတွေ့နေရသည်မှာ လအတန်ကြာပြီဖြစ်သည်။
ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ဦးစိုးထက်က “အခုက အားလုံးက ဝယ်စရာလည်းမရှိ၊ စားစရာလည်း မရှိ ဖြစ်နေတာ လေ၊ အဲတာကြောင့် ကျနော်တို့က IDP Camp မှာတင်ရှိတဲ့သူတွေတင် အဆင်မပြေတော့ဘူး။ မြို့ပေါ် ရပ်ကွက်လေးခုရှိတယ်၊ နောက်တခါ ဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်။ အဲဒါတွေကိုပါ ဒီတခေါက်ပို့တဲ့ဟာကတော့ ပြည်သူတွေ လှူဒါန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် အခမဲ့ တပတ်စာပေးခိုင်းထားပါတယ်။ ဒီနေ့စပေးနေပြီခင်ဗျ”ဟုပြောသည်။
ပလက်ဝမြို့နယ်သည် ရပ်ကွက်နှင့်ကျေးရွာပေါင်း ၄၀ဝ ကျော်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ချင်းတိုင်းရင်းသားများအပြင် ရခိုင်တိုင်းရင်း သားများအချို့ပါ နေထိုင်ပြီး လူဦးရေ ၁ သိန်းကျော်ရှိကြောင်း သိရသည်။ တပ်မတော်နှင့် AA တို့အကြား တိုက်ပွဲများကြောင့် ပလက်ဝမြို့ပေါ်တွင် လာရောက်ခိုလှုံနေသော စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ ၃၆၀ဝ ခန့်ရှိကြောင်း သိရသည်။ https://burma.irraw addy.com/news/2020/ 04/30/221771.html
တရုတ်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားအရေအတွက်သည် ဧပြီ ၁၆ မှ ၂၇ နေ့ထိ စုစုပေါင်း ၃၇၉၁ ဦးရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ကချင်ပြည်နယ်လူဝင်မူကြီးကြပ်ရေးနှင့်လူ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီး ဦးဇော်ဝင်းထံမှ သိရသည်။ လွယ်ဂျယ်နှင့် ကန်ပိုင်တီ နယ်စပ်ဂိတ်များမှ ဝင်ရောက်လာသော အဆိုပါ ပြည်တော်ပြန်များတွင် ကချင်ပြည်နယ် ဒေသခံဦးရေ ၂၈၉၇ ဦးဖြစ်ပြီး ကချင်ပြည်နယ် ပြင်ပဦးရေ ၈၉၄ ဦးဖြစ်ကြောင်း ကချင်ပြည်နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားဝန်ကြီး ဦးဇော်ဝင်း ပြောသည်။
“ကချင်ပြည်နယ်ပြင်ပကလူတွေကိုတော့ လွယ်ဂျယ်မှာဘဲ Q လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။ အဲလိုလုပ်ထားတဲ့နေရာမှာ ၂ ပိုင်းရှိ တယ်။ လွယ်ဂျယ်မှာတော့ လွယ်ဂျယ်ဒေသခံတွေ နောက်ပြီးတော့ ကချင်ပြည်နယ်ပြင်ပကလူတွေကို လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် လွယ်ဂျယ်မှာလုပ်ထားတဲ့ Q နေရာကလည်း အများဆုံး လူဦးရေ ၅၀၀ လောက်ဘဲဆန့်တယ်။” ဟု ပြောသည်။
သို့သော်လည်း စစ်ကိုင်းတိုင်းအစိုးရ၏ဆက်သွယ်လာမှုကြောင့် လူဦးရေ ၂၀၀ ခန့်ကို ပြည်နယ်ကျော်ကာ ပို့ဆောင်လိုက်ပြီဟု သိရသည်။ လွယ်ဂျယ်တွင် Q နေရာမလောက်မည်ကို စိုးရိမ်သဖြင့် ဗန်းမော်ခရိုင်မှ အခြားနေရာတွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်နေ သည်ဟုလည်း သိရသည်။ ကချင်ပြည်နယ် နယ်စပ်ဂိတ်များဖြစ်သည့် လွယ်ဂျယ် နှင့် ကန်ပိုင်တီဂိတ်များတွင် ဧပြီလ ၁၆ ရက် နေ့မှ ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့ထိ လွယ်ဂျယ်ဂိတ်မှဝင်ရောက်လာသူ ကချင်ပြည်နယ် ပြင်ပ စုစုပေါင်း ၈၃၄ ဦး၊ ကချင်ပြည်နယ် ပြည်တွင်း ၂၆၈၅၊ စုစုပေါင်း ၃၅၁၉ ရှိပြီး၊ ကန်ပိုင်တီဂိတ်မှ ဝင်လာသူ ကချင်ပြည်နယ်ပြင်ပ ၆၂ ဦး၊ ကချင်ပြည်နယ် ပြည်တွင်း ၂၁၂ ဦး စုစုပေါင်း၂၇၄ ဦးရှိကြောင်း သက်ဆိုင်ရာဌာနမှသိရသည်။
“ကျနော်တို့ Covid-19 နှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စကျတော့သင်္ကြန်ကာလအတွင်း Home Stay လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာ ပြည်ထောင်စုကနေညွှန်ကြားလာတဲ့တိုင်း မိသားစုကိုဘယ်လောက်ထောက်ပံ့ပါဆိုပြီး ပြောလာတဲ့ခါမှာ ကချင်ပြည်နယ် တစ်ခုလုံးမှာတော့ သိန်းပေါင်း ၁ သောင်း ၆ ထောင်လောက်ကူညီခဲ့တယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း Covid-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကုသရေးမှာကောထိန်းချုပ်ရေးမှာကော ကာကွယ်ရေးမှာကော ကျနော်တို့ ပြည်နယ်အတွင်းမှာ ကျောက်မျက်အဖွဲ့ကလည်း
သိန်း ၂ ထောင် လှူထားတာလည်းရှိပါတယ်။ နောက်ထပ်လှူတဲ့သူတွေလည်း ရှိတော့ ပြည်ထောင်စုက နေညွှန်ကြားလာလို့ ရှိရင်တော့ ဆက်ပြီးစီမံဆောင်ရွက်သွားဖို့တွေရှိပါတယ်။” ၎င်းကဆိုသည်။ https://burmese.kachinnews.com/2020/04 /28/%e1%80% 9c%e1%80%bd%e1%80%9a%e1%80%ba%e1%
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီ မြို့အမှတ် ၅ ရပ်ကွက်တွင် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ အခြေခံလူ တန်းစားများအတွက် ထောက်ပံ့သည့် ဆန်အပါအဝင် စားနပ်ရိက္ခာ ၅ မျိုးမရရှိသူ အိမ်ထောင် ၅,၀၀၀ ကျော်ကျန်ရစ်ခဲ့သဖြင့် ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ် ရေးမှူးရုံးရှေ့တွင် ယမန်နေ့ (ဧပြီ ၂၉ ရက်)က လူဦးရေ ၂၀၀ ခန့် လူစုလူဝေးဖြင့်ရောက်ရှိလာပြီး ရပ်ကွက်တာဝန်ရှိသူထံ လာရောက်အသိပေးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ Covid -19 အရေးပေါ်ကာလ သင်္ကြန်ပိတ်ရက်အတွင်း ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသူ အခြေခံလူတန်းစားများအား နိုင်ငံတော်မှ ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ၊ ကြက်သွန် စသည့် စားနပ်ရိက္ခာများပေးနိုင်ရန်အတွက် ရာအိမ်မှူး ၊ ဆယ်အိမ်မှူးများက ရပ်ကွက်အလိုက် စာရင်းကောက်ယူကြရာ မြဝတီမြို့ အမှတ် ၅ ရပ်ကွက်အတွင်း အိမ်ထောင်စု ၇,၂၀၂ စာရင်းကောက်ယူရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သို့သော်လည်း နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ထောက်ပံ့မှုများ ရောက်ရှိပြီး ဖြန့်ဝေသောအခါ အိမ်ထောင်စု ၁,၂၀၀ အတွက်သာပါဝင်ပြီး ကျန်အိမ်ထောင်စုများမှာ မရရှိကြသည့်အတွက် ရပ်ကွက်ရုံးသို့ ယခုလို လာရောက် တင်ပြကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထောက်ပံ့မှု ရိက္ခာမရရှိသည့် အိမ်ထောင်စုများက ပြောသည်။ အမှတ် ၅ ရပ်ကွက် ဆင်းရွှေလီလမ်းတွင်နေထိုင်ပြီး မုန့်ဟင်းခါးရောင်းချ နေသူ မဖြူဝင်းက “အစိုးရက ပေးတာတော့ လိုချင်တာပေ့ါ။ ယောက်ျား အလုပ်ရပ်နားထားရ လို့ဝင်ငွေမရှိချိန်မှာ အထောက် အကူဖြစ်တာပေါ့။ ခုတော့ မိသားစုတွေအခက်အခဲဖြစ်နေရပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
ယခုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အမှတ် ၅ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦး အောင်ဝင်းက“ကျနော်တို့ ရပ်ကွက် ရာ အိမ်မှူးတွေကို ဧပြီ ၇ ရက်နေ့က ညတွင်းချင်းစာရင်းကောက်ခိုင်းပါတယ်။ ၈ ရက်နေ့ မနက် ၅နာ ရီထိ စာရင်းလက်ခံ၊ အပြီးသတ်ပြီးမှရုံး စာရေး ကိုအပ်ကာ အိမ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ၈ ရက်နေ့မနက် ၁၁ နာရီခွဲ အမှီ ရုံးစာရေးက ဒီစာရင်းတွေကို မြို့နယ်ကိုတင်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ခဲ့တာပါ။ အခုတော့ စာရေး က မြို့နယ်ကို မတင်ထားတော့ တကယ့်တကယ်မှာ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ခန့်မှန်း တင်လိုက်တဲ့ စာရင်း အရသာ ရရှိခဲ့တာပါ။ ကျနော်တို့ကောက်ယူထားတဲ့ စာရင်းတွေက ပြည်ထောင်စုအဆင့်ကို မရောက်သွား ဘူး လို့သိရပါတယ်” ဟု ပြောသည်။ http://kicnews.org/2020/04/%e1%80%b1%e1%80%91%e1%80%ac%e 1%80%80%e1%80%b9%e1%80
ကချင်ပြည်နယ် တရုတ်တစ်သျှူးငှက်ပျောခြံတစ်ခုတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည့်အလုပ်သမားအချို့ လုပ်ခလစာ ရရှိရန် သက်ဆိုင်ရာသို့ တိုင်ကြားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အလုပ်သမားများထံမှ သိရသည်။
ကချင်ပြည်နယ် ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊ ဒိန်ဂျန်ယန်အတွင်းရှိ ပါဝါဖိုက်စတားကုမ္မဏီတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည့် အလုပ်သမား အချို့ တစ်သျှူးငှက်ပျောခုတ်ပြီးသွားသော်လည်း ကုမ္မဏီများနှင့် လုပ်ခလစာညှိနှိုင်းရာတွင် ယနေ့ချိန်ထိ အဆင်မပြေသည့် တွက် လုပ်ခလစာရရှိရန် ဝိုင်းမော် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးသို့ စာတင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အလုပ်သမားများအဖွဲ့မှ ဦးဆန်းထွေး က ပြောသည်။
“ကျင်စားသမားတွေက ကျင်နဲ့လိုချင်တယ် လောပန်းတွေကတော့ ကီလိုနဲ့ပေးမယ်ဆိုကြတော့ လုပ်ခလစာညှိပေးနေတာ ခုချိန်ထိတော့အဆင်မပြေဘူး။ လောပန်းတွေက ခုဆိုပြန်တော့မယ်ပြောလို့ ကျနော်တို့ဒါဆိုရင်မဖြစ်ဘူး ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေး မှဘဲဖြစ်တော့မယ်လို့ ညှိပေးနေတာအဆင်မပြေဘူး။ လောပန်းတွေကိုလည်းပြောထားတယ် ခင်များတို့လုပ်အားခတွေကို ရှင်းပေးပြီးမှပြန်ကြပါလို့ပြောတော့ သူတို့က ကျနော်တို့လည်း ကိုယ့်လမ်းကိုပြန်ရမှာဘဲ မရှင်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ ရှင်းပေး တာကို သူတို့လက်မခံမှတော့ ကျနော်တို့က ပြန်စရာရှိတာပြန်ရမှာဘဲဆိုပြီး ပြန်ပြောလာကြတယ်။” ဟု ဒိန်ဂျန်ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးမှူး ဦးနော်ဆန့် ပြောသည်။
အဆိုပါလုပ်ခလစာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒိန်ဂျန်အုပ်ချုပ်ရေးဘက်မှ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးနေသည်မှာ သုံးကြိမ် တိုင်တိုင်ညှိနှိုင်းပေးပြီးဖြစ်သော်လည်း ဆက်လက် ညှိနှိုင်းမည့်အကြိမ်တွင် အဆင်ပြေမူမရှိပါက အုပ်ချုပ်ရေးဘက်မှ သက်ဆိုင် ရာ ဝိုင်းမော်မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနသို့သာ လွှဲပြောင်းပေးတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ဒိန်ဂျန်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးနော်ဆန့်ကပြောသည်။
ဒိန်ဂျန်ကျေးရွာတွင်း တရုတ်တစ်သျှူးငှက်ပျောစိုက်သည့် ကုမ္မဏီစုစုပေါင်း ၄ ခုရှိပြီး စိုက်ပျိုးထားသည့်မြေဧက ၇၀၀၀ ကျော် ခန့်ရှိသည်။ https://burmese.kachinnews.com/2020/04/29/%e1%80%9d%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80
သမ္မတ၏ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် မကြာသေးခင်က လွတ်မြောက်လာသည့် နာဂ အမျိုးသား ဆိုရှယ်လစ် ကောင်စီ-ကပ္ပလန် (NSCN-K) အဖွဲ့မှ ခေါင်းဆောင်ဟောင်းများက COVID-19 ကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး လိုအပ်ပါက အစိုးရကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသော NSCN-K အဖွဲ့မှ ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ၅ ဦးအနက် တဦးဖြစ်သူ ဦးကျော်ဝမ့်စိန်က ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းက“အရပ်သားပြည်သူလူထု တယောက်အနေနဲ့ ပြောရ မယ်ဆိုရင်တော့ အစိုးရကနေ ဘယ်လိုလမ်းညွန်ပေးလဲ။ အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ ကိုဗစ် ကာကွယ်ရေးအတွက် လိုက်နာရမှာပဲ။ လိုအပ် ရင်တော့ ကူညီပေးမှာပေါ့။ ကိုဗစ် ကာလအတွင်းမှာ အခုအချိန်အထိတော့ အခက်အခဲက မရှိသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နောက် ကြာလာရင်တော့ မပြောတတ်ဘူး”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
အဆိုပါ ၅ ဦးကို မတရားအသင်း အဖွဲ့ပုဒ်မ ၁၇(၁)ဖြင့် ခနီး္တမြို့နယ်တရားရုံးက ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၆ ရက်နေ့က ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်စီ ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဧပြီလ ၁၇ ရက်တွင် ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ထို NSCN-K အဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင် ဟောင်းများမှာ သာသနာရေး ဝန်ကြီးဟောင်း ဦးကျော်ဝမ့်စိန်၊ သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဟောင်း ဦးအန့်ကန်၊ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဟောင်း ဦးအောင်မိုင်း၊ NSCN-K အဖွဲ့ဝင် ဒုဗိုလ်မှူးကြီး အောင်စိုင်းနှင့် ဦးစောထိန် တို့ဖြစ်သည်။ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာသူများတွင် အထက်ပါ ခေါင်းဆောင် ၅ ဦးနှင့် အတူ ဗိုလ်မှူး ကျွားရန်၊ ဒုဗိုလ် စိုင်းအောင်၊ အရာခံ ဗိုလ် ဝမ်းလတ်၊ တပ်ကြပ် ထွန်းမြင့်၊ တပ်ကြပ် စိုင်းဝမ်၊ တပ်သား လန်ကော် တို့လည်း ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
NSCN-K အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း တဦးဖြစ်ခဲ့သည့် ဦးစောထိန်ကလည်း“ဘာမှလုပ်လို့ မရတော့ဘူးလေ။ အဖွဲ့အစည်းကလည်း ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ထောင်လည်းကျတယ် ဆိုတော့။ ကျနော်တို့က ပြီးသွားပြီလေ။ ကျနော်တို့က ငြိမ်းချမ်းရေး သွားချင်တာ။ သူတို့ကမှ မသွားချင်တာဆိုတော့ အဖွဲ့တွေကွဲ။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ကို အဖွဲ့အစည်းကို ဆန့်ကျင်တယ်ဆိုပြီး ထုတ်ပစ် လိုက်တယ်”ဟု ပြောသည်။ နာဂ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဦးစီးဥက္ကဋ္ဌ ဦးကေဆိုင်က“Quarntine ၄၄ ယောက်ရှိတယ်။ အများအားဖြင့်ကတော့ အိန္ဒိယ ဘက်က လာတာများပါတယ်။ ပြည်တွင်းကလည်းရှိပါတယ်။ လေရှီးနဲ့ နန်းယွန်းမှာရှိတဲ့ ကျောင်းတွေမှာ Quarantine ထားပါတယ်။ လပာယ်မှာတော့ ကျောင်းတွေလည်း ရှိတယ်။ ဆေးရုံမှာလည်း ရှိတယ်”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/30/221775.html
သာသနာညှိးနွမ်းစေမှုပုဒ်မ ၂၉၅(က)ဖြင့် တရားစွဲဆိုခံထားရသော မြစ်ကြီးနားမြို့ ဘူတာတိုက်တန်းတွင် Covid-19 ပညာပေး ပန်ချီရေးဆွဲခဲ့ကြသည့် လူငယ်သုံးဦး၏အမှု ပထမဆုံးရုံးချိန်းတွင် တစ်ဦးလျှင်ငွေကျပ်သိန်း (၁၀၀)စီဖြင့် အာမခံရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါအမူတွင် ပြည်နယ်သာသနာရေးဦးစီးဌာနမှ ဒုညွှန်ကြားရေးမှူး တရားလိုပြုလုပ်ကာ Covid-19ကာကွယ်ရေး စုပေါင်း ပညာပေးအဖွဲ့မှ မစီစီလျာဂျာဆိုင်း၊ ကိုနော်ထွန်းအောင်နှင့် ပန်းချီရေးဆွဲသူ ကိုဇေယျာနောင်တို့ သုံးဦးအား စွဲဆိုထားခြင်းဖြစ် သည်။ “ဒီနေ့ကတော့ ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကျင့်ထုံးနဲ့အညီ အာမခံလျှောက်တာဖြစ်တယ်။ အမှုကတော့ ပြစ်မူဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ ၂၉၅(က)နဲ့ စွဲထားတာဖြစ်တယ်။ ၂၉၅(က)ကတော့ အမှုရုပ်သိမ်းလို့မရဘူး။ ကျေအေးလို့မရဘူး ရုတ်သိမ်းလို့မရဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျမတို့က ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပဒေကျင့်ထုံးဥပဒေ ၄၉၇(၁)အရကတော့ အာမခံလျှောက်ထားလို့ရတယ်။ ကျမတို့ အပိုင်း ကလည်း မဂျာဆိုင်း ဆိုလို့ရှိရင် ငယ်ရွယ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်တယ်။ မိခင်အို၊ဖခင်အိုကို ပြုစုနေရတဲ့သူဖြစ်တယ်။ ဇေယျာနောင်လည်း အစာအိမ်ရောဂါခံစားနေရသူဖြစ်တယ် ဆေးစာတွေလည်း တင်ပြထားတယ်။ နောက်တစ်ခါ နော်ထွန်းအောင်ကလည်း သူငယ်ငယ်ကတည်းကနေ ရင်ကျပ်ရောဂါရှိတယ် လက်ရှိလည်း ဆေးရုံနဲ့ကုသနေရတာဖြစ်တယ်။ သူတို့ဘက်ကလည်း အထောက်အထားအပြည့်အစုံတင်ပေးတယ်။ တစ်ဖက်ကလည်း ကျမတိုိ့ကို ဒီအာမခံနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဥပဒေအရာရှိ ဆုံးဖြတ်ချက်ဘဲလို့ပြောတယ်။ ဥပဒေအရာရှိဘက်ကလည်း ဒီပုဒ်မက သေဒဏ်၊ တစ်သက်တစ်ကျွန်း ချမှတ် လို့ရတဲ့ ဥပဒေမဟုတ်ဘူး။ သက်သေအထောက်ထားခိုင်လုံတဲ့တွက် အာမခံပေးခြင်းဖြစ်တယ်။” ဟု တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဒေါ်ဒွဲဘူက ပြောသည်။
အဆိုပါအမှုသည် ဧပြီလ ၃ရက်နေ့ Covid-19 အန္တာရယ်ကာကွယ်ရေးတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မြစ်ကြီးနား ဘူတာတိုက်တန်းတွင် ပန်းချီရေးဆွဲခဲ့ရာ ပန်းချီတွင် သေမင်းတမန်ပုံရေးဆွဲရာတွင် သေမင်းတမန်၏ဝတ်ရုံသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်း၏ သင်္ကန်းနဲ့တူညီမှုရှိသည်ဟုဝေဖန်မူများစွာ ရှိခဲ့ပြီးနောက် ပြည်နယ်သာသနာရေးဦးစီးဌာနမှ ဒုညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးထွန်းမြင့်မှ တရားလိုပြုလုပ်ကာ စွဲဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သာသာနာညိုးနွမ်းစေမူပုဒ်မ ၂၉၅(က)ပြစ်မှုသည် ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်စလုံးဖြစ်စေ ချမှတ်နိုင်ကြောင်း ဥပဒေတွင် ဖော်ပြထားသည်။ https://burmese.kachinn ews.com/2020/04/30/covid19%e1%80%95 %e1%80%8a%e1%80%ac%e1%80%9
Covid – 19 လူနာ စတင်တွေ့ရှိရာ တီးတိန်မြို့နယ် ကပ်တဲလ်ကျေးရွာကို သွားလာမှု ကန့်သတ် (Lock Down ချ)လိုက်သဖြင့် ယင်းရွာမှ စားသောက်ကုန် ဝယ်ယူနေရသည့် ဟီးရန်အွယ်ကျေးရွာအဖို့ ကုန်ပြတ်လပ်မည့် အနေအထားဖြစ်နေကြောင်း သိရ သည်။ ကပ်တဲလ်တွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ရောက်ရှိနေသူ ဒေါက်တာ ဘွေလျန်မာန်က“ဒီရွာလေးက လော့ဒေါင်းချ ထားတဲ့ ကပ်တဲလ်ကနေ နှစ်မိုင်သာ သာပဲ ဝေးပါတယ်။ ရွာကို အဓိကသွားတဲ့လမ်း နှစ်ကြောင်းရှိပါတယ်။ တစ်ခုက တီးတိန် ကနေ ကပ်တဲလ်ကို ဖြတ်ပြီးသွားတဲ့ကားလမ်း၊ နောက်တစ်ခုက တီးတိန်ကနေ လိုင်တွီး (၁၆ မိုင်ခန့်)၊ ပြီးတော့ လိုင်တွီး ဆိုတဲ့ ရွာကြီးကနေဆို ၁၂ မိုင်လောက် ထပ်သွားရပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ ဒီဟီးရန်အွန်ရွာရဲ့ အဓိက ကုန်စည်က ကပ်တဲလ်က ဝယ်ယူရတာပါ” ဟု ဆိုသည်။
ယခုအခါ ဟီးရန်အွယ်ကျေးရွာ စားသောက်ကုန်ပြတ်လပ်မှုမှာ နှစ်ပတ်ကျော်ကြာရှိပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာဘွေလျန်မာန်က ပြောသည်။ “သူတို့စားသောက်ကုန် ပြတ်လပ်တာက အရင်နှစ်ပတ်တည်းက၊ဆိုတော့ သူတို့က ကပ်တဲလ်ရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ကို ပစ္စည်းလာဝယ်မယ်ဆိုပြီး ဖုန်းဆက်လာတယ်။ သူတို့က ရွာဆိုင်တွေနဲ့ နီးကပ်ပြီးလာဝယ်မှာဆိုတော့ မဖြစ်ဘူး။ ဒီကိုလှူတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ခွဲပေးလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် လော့ဒေါင်းပြီးခါနီးဆိုတော့ အပိုထည့်ပေးတာပေါ့။ အခု လော့ဒေါင်း ရက်တိုးလိုက် တော့ စားသောက်ကုန်တွေ ပြတ်လောက်ပြီ” ဟုပြောသည်။
ဟီးရန်အွယ်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဒိုခန်တွောင်က “ကပ်တဲလ်ကို လာဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်း လော့ဒေါင်းဆိုတော့ အတား အဆီး တွေရှိတယ်၊ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ သွားလို့မရဘူး၊ အခက်အခဲတွေရှိတယ်။ ပြီးတော့ ကျေးရွာပြည်သူတွေကလည်း အစိုးရ ကို အကြောင်းကြားတဲ့အပိုင်းမှာ အားနည်းတယ်ထင်တယ်၊ တာဝန်ရှိတဲ့လူကြီးတွေကလည်း ဂရုမစိုက်တာတော့ မဟုတ်ပေမဲ့ အလေးမထားဘူးဖြစ်နေတယ်၊ ဒီချိန်ဆိုတောင်ပေါ်မှာက ငွေကြေးပြတ်လပ်တဲ့အ ချိန်လည်းဖြစ်တယ်၊ ကျွန်တော်တို့ရွာက ကပ်တဲလ်ရွာကို ကုန်စည်ဝယ်လေ့ရှိတယ်။ ခုက ငွေရှိရင်တောင် ဖြတ်သွားလို့မရဘူးဆိုတော့ အခက်အခဲအများကြီး ကြုံနေ ကြတယ်” ဟု ပြောသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-72470
၁၉။ ချင်းပြည်နယ် တီးတိန်မြို့နယ် ကပ်တဲလ်ကျေးရွာကို Lockdown ဖြေရန် ပြည်ထောင်စုသို့ တင်ပြထားပြီး Case 1 လူနာ မှာ လည်း ယနေ့ ဆေးရုံမှ ဆင်းမည်
ချင်းပြည်နယ် တီးတိန်မြို့နယ်ကပ်တဲလ် ကျေးရွာကို Lockdown ဖြေရန် ပြည်ထောင်စုသို့ တင်ပြထားပြီး Case 1 လူနာမှာ လည်း ယနေ့ဆေးရုံမှ ဆင်းမည်ဟု ချင်းပြည်နယ် လူမှုရေးဝန်ကြီး ပေါင်လွန်မင့်ထန်က ပြောကြားသည်။
“ အခုလည်း ရွာမှာ ကန့်သတ်ပြီးနေတာပါ။ တစ်ရွာလုံးပိတ်တာက တစ်ပိုင်းပါ။ Poairicw တွေ့တဲ့အိမ်က သူ့အိမ်နဲ့သူပေါ့။ တစ်ရွာလုံး ဖြေလျှော့ လိုက်တော့မယ်။ အမျိုးသားကော်မတီက အကြောင်းပြန်မှပဲ အဖြေရမယ်။ ပြည်ထောင်စုကို တင်ပြထားတယ်။ Case 1 က နှစ်ခါ Negative ဆိုရင် ထွက်လို့ ရပြီလေ။ ထွက်ပြီးရင် Home Qaurantine အနေနဲ့ တစ်ပတ်လောက်နေရင်နေပေါ့။ သူ ကတော့ ပြီးသွားပြီ။ သူက Negative က နှစ် ကြိမ်ရှိသွားပါပြီ။
“ဟားခါးမှာ တွေ့တဲ့တစ်ယောက်ကလည်း ကျန်းမာရေးကောင်းပါတယ်။ ဟားခါး က တစ်ယောက်ကိုလည်း အခန်းမှာပဲ ထား လိုက်ပါတယ်။ သူနဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ထိတွေ့ခဲ့တဲ့ ရှစ်ယောက်လောက်တော့ရ ထားတယ်။ အဲဒီ ရှစ်ယောက်ကို Quarantine ထားဖို့လုပ်ထားတယ်။ တီးတိန်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗဟုသုတရသွာတာပေါ့။ Case 1 က ခြောက်ကြိမ်မြောက်အထိ ဘာမှ မဖြစ်ဘဲ ဖျားလည်းမဖျားနာဘဲနဲ့ Positive ဖြစ်တယ်။ https://news-eleven.com/article/171425
တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်အပါအဝင် ပြည်နယ် ငါးခုက ဒုက္ခသည်စခန်း ၁၇၀ ကျော်မှာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် အသိ ပညာပေးရေးနဲ့ ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က ငွေကျပ် ၂ ဒဿမ ၄ ဘီလီယံ သုံးစွဲဖို့ စီစဉ် ထားပါတယ်။ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ကချင်၊ ကရင်နဲ့ ချင်း ပြည်နယ်က စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အသိပညာပေး ရေးနဲ့ ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့ အစိုးရက ကနဦး ကျပ် ၂.၄ ဘီလီယံ ချထားပေးတယ်လို့ လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဝင်းမြတ်အေးက RFA ကိုပြောပါ တယ်။
ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအန္တရာယ် ကာကွယ်ဖို့ လက်မကြာခဏ ဆေးဖို့လိုအပ်တာကြောင့် ဒီငွေတွေနဲ့ ရေအခက်အခဲရှိနေတဲ့ စခန်းတွေမှာ ရေရှိရေးကို အထူး ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး က ပြောပါတယ်။“စီမံချက်ထဲမှာ ရေ က အရေးကြီးဆုံးပဲ ဒီကိစ္စက လက်ဆေးရမှာလေ။ တကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေး အရေးကြီးတယ်။ အဲဒါကြောင့် ရေရရှိရေးကို ဒီစီမံ ချက်ထဲမှာအဓိကပါတယ်။ အကောင်အထည်စဖော်နေပြီ ရေအတွက်လုပ်နေပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ သတင်းစကား အတွက်လည်း Hand Speaker တွေနဲ့ရအောင် လိုက်အော်နေတယ်။”ရခိုင်ပြည်နယ်က ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာဆိုရင် ရေရှားပါးနေလို့ လက်မကြာခဏဆေးဖို့ ခက်ခဲနေတာကြောင့် ရောဂါပိုး ကူးစက်ပြန့်ပွားမှာကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ အရပ်ဘက်အဖွဲ့ တွေက စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။
ဒီနည်းလမ်းတွေက အင်တာနက် ပြန်ဖွင့်ပေးတာလောက် ထိရောက်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပုဏ္ဏားကျွန်းနဲ့ ရသေ့တောင်မြို့နယ် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်မောင်လတ်က ပြောပါတယ်။“စာများများရိုက်လို့ ရတာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဆန့် တာလည်း မဟုတ်ဘူး။ အင်တာနက်နဲ့ ဆိုတော့ လူတိုင်းဆီကို ရောက်တယ်လေ။ အင်တာနက်က အထိရောက်ဆုံးပဲ။ အစိုးရ က ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေ မပြောနဲ့ အရပ်သား အချင်းချင်းတောင် တချို့နေရာတွေသွားလို့ လာလို့မရဘူး။”အစိုးရက သုံးစွဲ မယ့် ၂.၄ ဘီလီယံဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၇ သိန်းနီးပါး ရှိပါတယ်။ ဒီငွေဟာ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို အသိပညာပေးရေးနဲ့ ရေ ရရှိရေးအပါအဝင် ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် လုံလောက်တဲ့ ပမာဏ မဟုတ်ဘူးလို့ ဦးခင်မောင်လတ်က ထောက်ပြပါတယ်။
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတော့ တိုက်ပွဲတွေ ငြိမ်နေတာကြောင့် ဒုက္ခသည်စခန်းတွေ ပိတ်သိမ်းထားလို့ ခွဲတမ်းရတဲ့ အသုံး စရိတ်နဲ့ ဒေသခံတွေကို နှာခေါင်းစည်းတွေ ဈေးပေါပေါနဲ့ ပေးတာမျိုးတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ တိုက်တွန်းတယ်လို့ ဇီဝိတ လူမှုကူညီ ရေးအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မောင်သိန်းက ပြောပါတယ်။ အစိုးရက ချထားပေးတဲ့ ငွေနဲ့ဆောင်ရွက်မယ့် လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ပြည်နယ်အသီးသီးက ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို အမြန်ဆုံးရောက်ရှိနိုင်ရေးနဲ့ ထိရောက်တဲ့ အစီအမံတွေဖြစ်ရေး လိုတယ်လို့ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်အရေး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသူတွေက တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/news/ covid-19-donate-refugees-camps-04282020035346.
Covid-19 ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ထိုင်းပြန် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများကို ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ဘုရားသုံးဆူရှိ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ထိန်းချုပ်နယ်မြေသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်မပြုကြောင်း မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဗဟို ဌာနချုပ်က ဧပြီလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားသည်။ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ပြည်တွင်းရေးရာဌာနတာဝန်ခံ နိုင်ဗညားလယ်က “အစိုးရက ကျနော်တို့ကို အသိပေးလာတယ်၊ ဧပြီ ၃၀ လကုန်ပြီးရင် နေရပ်ပြန်လာမယ့် ရွှေ့ပြောင်း အလုပ် သမားတွေကို မြဝတီလမ်းကြောင်းကနေကြိုဖို့ အစိုးရအစီအစဉ်တွေ ချမှတ်ထားပြီးပြီ၊ အဲဒါကြောင့် ဘုရားသုံးဆူ လမ်းဘက် ကနေ ပြန်မလာကဖို့၊ ကျနော်တို့ပါတီကိုလည်း ဝိုင်းဝန်းတားမြစ်ပေးဖို့ အကြောင်းကြားလာတယ်၊ အကယ်၍ နယ်စပ် နေရာ အနှံ့ကနေ သူ့ပုံစံနဲ့သူ ဝင်လာခဲ့ရင် ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် ထိရောက်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ထိန်းရလည်း ခက်ပါလိမ့်မယ်”ဟု မွန်ပြည်သစ် Facebook လူမှုကွန်ရက်တွင် မွန်ဘာသာဖြင့် ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။
မွန်ပြည်နယ်မှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ဆက်သွယ်သွားလာရာတွင် ခရီးအကွာအဝေး အတိုဆုံးလမ်းဖြစ်သည့် ဘုရားသုံးဆူနယ်စပ်သည် တရားမဝင် လမ်းကြောင်းဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားမဲ့သူများက ပွဲစားဖြင့် ဝင်ထွက်သွားရာ လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်နေကြောင်း သိရသည်။ “ဒါကြောင့် မြဝတီလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကနေပဲ ပြန်လာကြဖို့၊ မြဝတီ ရောက်ရင် အစိုးရအစီအစဉ်နဲ့ ကြိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်၊ ပြီးတော့ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်တိုင်းတွေမှာရှိတဲ့ Quarantine စခန်း တွေကို ဆက်လက်ပို့ပေးမယ်” ဟု နိုင်ဗညားလယ်က ဆက်ပြောသည်။
ဘုရားသုံးဆူနယ်စပ်ဂိတ်မှပြန်လည်ဝင်ရောက်ပါကလည်း တရားဝင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြစ်စေရေးအတွက် မြဝတီ နယ်စပ် ဂိတ်မှသာ ဝင်/ထွက်စေရေး ပူးပေါင်း ကူညီဆောင်ရွက်သွားရန် မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးနေထွဋ်ဦးက ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်စား လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ဧပြီလ(၂၁) ရက်စွဲဖြင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီသို့ အကြောင်းကြားစာပေးပိုခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လိုသည့် ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအနေဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ အလုပ်သမားသံအရာရှိရုံး၏ Website ပေါ်တွင် တရားဝင်စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားမရှိသူများ လည်း စာရင်းပေးသွင်းထားနိုင်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-72519
မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ ချင်းပြည်နယ်တွေမှာ ဆက်ဖြစ်နေတဲ့ စစ်ရာဇ၀တ်မှုတွေနဲ့ လူသားထုအပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ စွပ်စွဲချက်တွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် ယန်ဟီးလီက တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ တကမ္ဘာလုံး COVID-19 ကပ်ရောဂါဘေး ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရချိန်မှာ မြန်မာစစ်တပ်ကတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက အရပ်သား တွေအပေါ် ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေ တိုးလုပ်လာနေတယ်လို့ မစ္စယန်ဟီးလီက ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့မှာပဲ ပြောဆိုခဲ့တာပါ။
မြန်မာ့ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးသူအဖြစ် သူ့ရဲ့တာဝန် ပြီးဆုံးတော့မှာဖြစ်တဲ့ ပါမောက္ခယန်ဟီးလီက ရခိုင့်တပ်မတော် AA အပါအ၀င် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး တောင်းဆို ချက်ကိုလည်း အလေးမထားကြတဲ့အပြင် မြန်မာတပ်မတော်ရဲ့  လက်ချက်ကြောင့် ရခိုင်နဲ့ ချင်းပြည်နယ်ထဲက ပြည်သူတွေ အကြီးအကျယ် ထိခိုက်နေရတယ်လို့လည်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ လူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာက စောင့်ထိန်း ရမယ့် အခြေခံပြဌာန်းချက်တွေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေကို တပ်မတော်က စနစ်တကျ ချိုးဖောက်နေတဲ့အတွက် ရခိုင်နဲ့ ချင်းပြည်နယ်ထဲက အရပ်သားတွေအပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ စစ်ရာဇ၀တ်မှုတွေနဲ့ လူသားထုအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇ၀တ်မှုတွေ တိုးလာနေတယ်လို့လည်း အထူးကိုယ်စားလှယ် ယန်ဟီးလီက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
AA အပါအ၀င် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အားလုံး အရပ်သားတွေကို ကာကွယ်ပေးဖို့လည်း သူက တိုက်တွန်းသွားပါတယ်။ ပဋိပက္ခ အဆုံးသတ်ရေးအတွက် တာဝန်ခံမှု တာဝန်ယူမှုရှိဖို့ အလွန်အရေးကြီးတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ တာဝန်ခံမှု၊ တာဝန်ယူမှု မရှိတဲ့ မြန်မာတပ်မတော်အနေနဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကနေ ကင်းလွတ်ခွင့်ရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်း မြန်မာအရပ်သားတွေအနေနဲ့ တပ်မတော်ရဲ့  ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇ၀တ်မှုတွေကို ဆယ်စုနှစ်တွေနဲ့ချီ ရင်ဆိုင်ခံစားနေရတယ်လိုလည်း ပါမောက္ခ ယန်ဟီးလီရဲ့  ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ ရခိုင်နဲ့ ချင်းပြည်နယ်ထဲက အရပ်သားတွေကို အကာအကွယ်တိုးပေးဖို့လည်း မစ္စယန်ဟီးလီက တိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ https://burmese .voanews.com/a/myanmar-un/5397045.html
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မင်းပြားမြို့နယ်မှာ တပ်မတော်နဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်တော် (အေအေ)တို့ ဧပြီ ၂၈ ရက်နေ့မှာ တိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ပွား ပြီးနောက် တပ်မတော်က တိုက်လေယာဉ်နဲ့ရော ရေတပ်သင်္ဘောနဲ့ပါ ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံတွေနဲ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်က ပြောပါတယ်။ မင်းပြားပြားမြို့နယ် တောင်ပုတ်ကေကျေးရွာအနား ဖုံသာချောင်းမှာ ဧပြီ ၂၈ ရက် နေ့လယ် ပိုင်းက တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနောက်ပိုင်းမှာ တပ်မတော်က င/စိုင်းရိုင်းတောင်တန်း တလျှောက် တိုက်လေယာဉ် ၂ စီးနဲ့ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သလို ရေတပ်ကလည်း မင်းပြားမြို့ ကျိန်းတောင်တန်းကနေ အမြောက်နဲ့ ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ အမ်းသားရွာက ကိုအမ်းသားကြီးက ပြောပါတယ်။
“တိုက်ပွဲဖြစ်တာက ဖုံသာချောင်းထဲက တောင်ပုတ်ကေကျေးရွာအနားမှာဖြစ်တာ။ မနေ့က နေ့လယ် ၂ နာရီ လောက်မှာဖြစ် တယ်။ တိုက်ပွဲဖြစ်လို့အပြီးမှာ ဖိုက်တာဂျက်တွေနဲ့ ဟတ်စကီးတွေနဲ့ပစ်တယ်။ ပြီးတော့ ရာမောင်တံတား အနားက ရေတပ်ကနေပြီးတော့လည်း ပစ်ခတ်တယ်။ မင်းပြား ကျိန်းတောင်တန်းကနေပြီးတော့ အမြောက်ကြီးတွေနဲ့ ဆက်တိုက်ပစ်ခတ်မှုတွေ လုပ်တယ်။ အဲဒီမှာ မနေ့က ကားသမား တယောက် လက်နက်ကျည်ကျလို့ ဒဏ်ရာရတယ်” လို့ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဧပြီ ၂၁ ရက်နေ့က မင်းပြားမြို့နယ် ရာမောင်တံတားနားမှာ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်လို့ CPS ပိုးသတ်ဆေးကုမ္ပဏီက ဆေး ပစ္စည်းတွေ သယ်ဆောင်လာတဲ့ မော်တော်ယာဉ်တစီး ပစ်ခတ်ခံရပြီး ယာဉ်မောင်းတဦး သေဆုံးခဲ့ကာ တဦးကတော့ စစ်တွေ ဆေးရုံမှာ သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/385109
နောက်ကြှေင်ရှင်းတဲ့ တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေက ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း ရွှေကုက္ကိုမြို့သစ်အပြင် နောက်ထပ် အလားတူ မြို့သစ် ၂ ခုကို တည်ဆောက်နေတဲ့အတွက် စိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ စမ်းစစ်ချက် စာတမ်းတစောင်ကို USIP လို့ခေါ်တဲ့ အမေရိကန် ငြိမ်းချမ်းရေး အင်စတီကျူက ဧပြီလ ၂၀ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ မကြာသေးခင် ကာလအထိ မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရနဲ့ ကရင်အမျိုးသားလက်နက်ကိုင် အင်အားစုတို့အကြား တိုက်ပွဲ ပြင်းထန်တဲ့ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် သောင်းရင်းမြစ် တလျှောက်မှာ အခုအခါ ဟိုတယ်တွေ၊ ကာစီနို လောင်းကစားတွေ၊ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတွေ အပြိုင်အဆိုင်ပေါ်ထွက်လာနေပါ တယ်။ ဒီနေရာတွေဟာ ရာဇ၀တ်နောက်ကျောင်းမကင်းတဲ့ တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေက အဓိက ပါဝင်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ လုပ်ငန်း တွေဖြစ်ပြီး နယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့အဖြစ် မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ လက်အောက်ခံဖြစ်နေတဲ့ ယခင် DKBA နဲ့လည်း ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် နေတာလို့လည်း ဆိုပါတယ်။
စိုးရိမ်စရာကောင်းတာက ဒီမြို့သစ် တည်ဆောက်နေတဲ့ တရုတ်လူမျိုးတွေဟာ ဥပဒေနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့ လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့ လူဆိုးဂိုဏ်းတွေ ဖြစ်နေပြီး အဲဒီအထဲက အကြီးအကဲ တဦးရဲ့ နောက်ကျောင်းကိုတော့ စာတမ်းပါဝင် ရေးသားသူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် အကြီးတန်း သံတမန်ဟောင်း တဦးဖြစ်တဲ့ Priscilla Clapp က VOA ကို အခုလို ရှင်းပြပါတယ်။ “ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာ သီဟာနုမြို့သစ်ထောင်တုန်းက သူခေါင်းဆောင်ပြီး ရာဇဝတ်မှုမျိုးစုံ ကျူးလွန်ခဲ့ဖူးပါ တယ်။ နောက်ဆုံး ဝန်ကြီးချုပ် ဟွန်ဆန်က တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့အကူအညီနဲ့ နှိမ်နင်း ခဲ့ရတဲ့အထိပါဘဲ။ တရုတ်ရာဇဝတ်ဂိုဏ်းတွေ လက်ချက်နဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားရဲတွေ လမ်းမတွေပေါ်မှာ သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ပုံတွေ အင်တာနက် မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘောဒီးယား ကနေ တပ်ခေါက်ပြေးလာတဲ့ တရုတ်တွေက အခု ကရင်ပြည်နယ်မှာ မြို့သစ်ထောင်နေကြတာပေါ့။” ဒီအထဲက မြို့သစ်တခု ဟာဆိုရင် မြ၀တီမြို့နယ်က KNU ထိန်းချုပ်တဲ့ နယ်မြေထဲမှာ ရှိပေမယ့် KNU က ဘာကြောင့် ဒါကို မဟန့်တားရသလဲဆိုတာ ဟာ ဝေစုရနေလို့လား စတဲ့ မေးခွန်းတွေအများကြီး မေးစရာရှိနေသလို တရုတ်စီးပွားရေး သမားတွေနောက်ကြောင်းကို KNU မသိလို့လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ရေးထားပါတယ်။
“ ဒီစီမံကိန်းတွေဟာ နိုင်ငံတည်ငြိမ်ရေးအတွက် အကျိုးမရှိသလို ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်လည်း အသုံးမကျပါဘူး။ လက်နက်နဲ့ ဗိုလ်ကျစိုးမိုးတဲ့ အာဏာရှင်စနစ်ကို အားဖြည့်ပေးနေတဲ့ သဘောပါဘဲ။ အမေရိကန်အနေနဲ့လည်း ဒီကိစ္စကို သူ့အကျိုးစီးပွားလို့ သဘောထားစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ နောက်တချက်က မြန်မာပြည်ထဲမှာ တရုတ်ရာဇဝတ်ဂိုဏ်းတွေ အခြေစိုက်ပြီး လှုပ်ရှား မှာကို အမေရိကန်က စိုးရိမ်နေတာပါ။ အဲဒီလို တရုတ်ရာဇဝတ်ဂိုဏ်း လှုပ်ရှားမှုတွေက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မှာလည်း ရှိနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာ ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇဝတ်မှု တော်တော်များများဟာ သူတို့လက်ချက်ပါ။” တရုတ်တို့က ဒီ မြို့သစ်တွေဟာ တရုတ်ပြည်ရဲ့ ခါးပတ်လမ်း စီမံကိန်းနဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်လို့ ပြောထားပြီး ဒီလုပ်ရပ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာမှာပါ တရုတ်အစိုးရရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်တို့ရဲ့ BRI ခါးပတ်လမ်း စီမံကိန်းအပေါ် ရာဇ၀တ်မှုအရိပ် ထင်ဟပ်လာနိုင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံက ဒီစီမံကိန်းတွေကို အခု မဟန့်တားနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ တရုတ်အစိုးရသည် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အနောက်နိုင်ငံတွေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မလုပ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေ မျိုးဖြစ်အောင် တမင်ဖန်တီးနေတယ်လို့ ယူဆစရာဖြစ်နေကြောင်း အစီရင်ခံစာမှာ ရေးသားထားပါတယ်။ https://burmese. voanews.com/a/chinese-building-up-new-town-in-karen/5398492.html
April 28, 202၀
ချင်းပြည်နယ်၏ မြို့တော် ဟားခါးမြို့တွင် ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ Covid-19 ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်အဖြစ် နှာခေါင်းစည်း (Mask) မတပ်ဘဲ အပြင်ထွက်သူများကို ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်မှု ဧပြီ (၂၇) ရက်တွင် စတင်လိုက်ပြီဟုသိရသည်။
ချင်းပြည်နယ် Covid-19 ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ်တုန့်ပြန်ရေးကော်မတီ၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် မြို့တွင်းနေရာ(၆)ခုတွင် အဖွဲ့ခွဲ၍ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရ အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်အတိုင်း အိမ်ပြင်သို့ မလိုအပ်ဘဲ မထွက်ကြရန်၊ မဖြစ်မနေထွက်မည်ဆိုပါက နှာခေါင်းစည်း (Mask) တပ်ရန် အသိပေးထားသည်။ မလိုက်နာသူများကို ကူးစက်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေဖြင့် အရေးယူသွားမည်ဟု ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ လမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးရွှေထီးအိုကပြောသည်။
ဟားခါးလူငယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဆလိုင်းဗန်ကျင်းထန်က “သူတို့ ကြိုတင်လည်းလုပ်တာဆိုတော့လေ၊ အခုအစိုးရဖက်က ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်တာကလည်း ကြိုပြီးတော့ (၂) ရက်ကို အသိပညာပေးမှုတွေလုပ်ပြီးမှ အရေးယူရမယ့်အပိုင်းမျိုးနဲ့ ဆောင် ရွက်တဲ့အခါကျတော့ ပြည်သူအတွက်က အဲလောက်ထိ အခက်အခဲမဖြစ်လောက်ပါဘူးလို့။ ကောင်းပါတယ်’’ဟုပြောသည်။ မည်သူမဆို ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ညွန်ကြားချက်များ လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားပါက ၁၉၉၅ ခုနှစ် ကူးစက်ရောဂါများကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး ဥပဒေအရအရေးယူခံရမည်ဖြစ်ပြီး ထောင်ဒဏ် (၆)လ ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်ငွေ (၅၀ဝ၀ဝ) ထိဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်နိုင်သည်ဟုသိရသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-72473
၂၆။ ညွှန်ကြားချက်များ လိုက်နာမှုရှိမရှိ စိစစ်နေစဉ် မြဝတီမြို့ရှိ စက်ရုံအလုပ်ရုံများ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ယာယီ ရပ်ဆိုင်းထား
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့တွင် အသေးစား၊ အလတ်စားစက်ရုံအလုပ်ရုံများကို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်များအား လိုက်နာမှုရှိမရှိ စိစစ်ဆောင်ရွက်နေစဉ်ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ယာယီရပ်ဆိုင်းထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ စက်ရုံအလုပ်ရုံများတွင် Covid-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးကာလ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြား ချက်များ အတိုင်း လိုက်နာမှုရှိစေရန် မြဝတီမြို့နယ် ကျန်မာရေးဦးစီးဌာနနှင့် မြို့နယ်အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာနတို့မှ ပူးပေါင်း ၍ လိုက်လံစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်လျက်ရှိရာ ထိုသို့ စစ်ဆေးနေစဉ်ကာလအတွင်း ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့ထိ အဆိုပါ စက်ရုံအလုပ်ရုံ များအား ယာယီပိတ်ထားခိုင်းသည်ဟု မြဝတီမြို့နယ်အလုပ်သမားညွှန် ကြားရေးဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရှိ ဦးနိုင်ဝင်းထွန်း က ပြောသည်။
ယခုလိုစစ်ဆေးရာတွင် အပူချိန်တိုင်းကိရိယာများဖြင့် တိုင်းတာ၍ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ လက် ဆေးခြင်း ၊ Mask များတပ်ဆင်ခြင်း၊ အလုပ်သမားများ၏ အမည်စာရင်းနှင့် နေရပ်လိပ်စာကို မှတ်တမ်း ထားရှိ ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် Covid-19 အသိပညာပေး ဗီနိုင်းပိုစတာများကို လုပ်ငန်းခွင် နှင့် အများမြင်သာသည့်နေရာတွင် ထားရှိခြင်းအစရှိသည့် စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက် ထားမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးထားမှုအပြင် အလုပ်သမားများ ဖျားနာ ပါက ပြင်ပဆေးခန်းများတွင် မပြဘဲဆေးရုံသို့တက် ရောက်၍ ဆေးဝါးကုသမှုခံယူရန်နှင့် လိုအပ်သည်များကိုမှာကြားခဲ့သည် ဟုလည်း ဦးနိုင်ဝင်းထွန်း က ဆက်ပြောသည်။
၎င်းအပြင် ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကုမ္ပဏီမှအထည်အော်ဒါကိုယူပြီး ချုပ်နေရသည့်အတွက် ယခုလို စက်ရုံ ပိတ်ထားရ၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း အထည်များမအပ်နိုင်ရင် တဖက်က ယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘဲ လုပ်ငန်းအတွက် ထိခိုက်လာမည်ကို စိုးရိမ်မှု ရှိနေကြောင်းလည်း အထည်ချုပ်စက်ရုံ လုပ်ငန်းရှင် မနှင်းသီတာက ဖြည့်စွက်ပြောသည်။ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မြို့တစ်မြို့ဖြစ်သော မြဝတီမြို့တွင် လုပ်ငန်းလိုင်စင်တင်၍ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော အသေးစား၊ အလတ်စား စက်ရုံအလုပ်ရုံ ၁၀၀ ကျော်ရှိသည်ဟု သိရသည်။ http://kicnews.org/2020/04/%e1%81%ab%e1%82%8a%e1%80%94%e1%80%b 9%e1%81%be%e1%80
ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်၌ တပ်မတော်နှင့် ရက္ခိုင် စစ်တပ် (AA) တို့ တိုက်ပွဲကြောင့် ထွက်ပြေးလာသော စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်များ ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့ရှိ အစိုးရ အသိအမှတ်ပြု ဒုက္ခသည်စခန်းသို့ လာရောက်လျက်ရှိကြောင်း အဆိုပါ ဒုက္ခသည်များထံမှ သိရသည်။ ပလက်ဝမြို့နယ် မွန်ထောင်းရွာဘက်မှ အများစုဖြစ်ပြီး ကျောက်တော်မြို့နယ် ကန်စောက်ရွာရှိ ဒုက္ခသည် စခန်းသို့ ရောက်ရှိ လာသည့်လူဦးရေ ၁၂ဝ ကျော်ရှိနေကာ လက်ရှိအချိန်အထိ လူဦးရေ ရာနှင့်ချီ ဆက်လက်လာရောက်နေကြောင်း၊ လေယာဉ်များဖြင့် နေအိမ်များကို ပစ်ခတ်မှုများ ပြုလုပ်နေ၍ ယခုကဲ့သို့ တိမ်းရှောင် ထွက်ပြေးလာရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်ဖြစ်သူ ပလက်ဝမြို့နယ် စိမ်းစမ်းရွာမှ ဦးဇော်ဇော်က ပြောသည်။ ဦးဇော်ဇော်က“ကျနော်တို့ရွာမှာတော့ အိမ်တွေကို လေယာဉ်တွေနဲ့ ပစ်နေတာ။ အိမ်တော်တော်များများက မီးလောင်ကုန်ပြီ။ ရှိတဲ့ အိမ်တွေပေါ်လည်း တပ်မတော်သားတွေက တက်နေတော့ ကျနော်တို့ ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်တော့ဘူး။ ပထမ ဗုံးကျဲတုန်း က အိမ်က ၉ လုံး။ နောက်ထပ်လည်း စစ်ဖြစ်နေတော့ ကျနော်တို့ ပြေးလာတာ”ဟု ပြောပြသည်။
ထို့ပြင် ပလက်ဝမြို့နယ် မွန်ထောင်းရွာ၊ စိမ်းစမ်းရွာအနီးဝန်းကျင်ရှိ ကျေးရွာများမှ စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည် ၄ဝဝ ကျော် လည်း လမ်းတွင်ပင် ရှိနေသေးကြောင်း စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်များက ပြောသည်။ ထိုသို့ ကျောက်တော်မြို့နယ် အပေါက်ဝရွာရှိ ဒုက္ခသည်များခိုလှုံရာ စခန်းများကို မည်သည့် အတွက်ကြောင့် ပြည်နယ်အစိုးရအနေဖြင့် ဒုက္ခသည်စခန်းအဖြစ် အသိအမှတ် မပြုရခြင်း အကြောင်းရင်းကို ရခိုင်ပြည်နယ် နယ်စပ်ရေးရာနှင့် လုံခြုံရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး မင်းသိုက်ထံသို့ အကြိမ်ကြိမ် ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့သော်လည်း ပြန်လည် ဖြေကြားခြင်း မရှိပေ။
ထို့ပြင် တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်း ထံသို့လည်း ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်စခန်းများကို အသိအမှတ်မပြုရခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ၂ ရက်ဆက်၍ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ် မေးမြန်း သော်လည်း လက်ခံဖြေကြားခြင်း မရှိပေ။ ထိုကဲ့သို့ အစိုးရအဖွဲ့မှ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုထားခြင်းမရှိသည့် ဒုက္ခသည်စခန်း များရှိနေသည့်အတွက် စစ်ဘေးရှောင်များကို အစိုးရ၏အထောက်အပံ့များ၊ လူမှုရေးအဖွဲ့၏ အကူအညီများနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ NGO အဖွဲ့အစည်းများ၏ အကူအညီများပေးရန် အခက်အခဲရှိကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များက ပြော သည်။
၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ်အတွင်း နှစ်ဆန်းပိုင်းမှစတင်ပြီး ယခုလအထိ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ စစ်ဘေးရှောင် လာ သော ဒုက္ခသည်များ ၁ သိန်း ၇ သောင်းကျော်အထိ ရောက်ရှိလာနေပြီဖြစ်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းအတွင်း ဒုက္ခသည် စခန်းပေါင်း ၁၄ဝ ကျော်အထိရှိနေသည်ဟု ရခိုင်တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုအစည်းအရုံး (Rakhine Ethnic Congress ) ၏ စာရင်းများအရ သိရသည်။ တပ်မတော်နှင့် AA တို့၏ တိုက်ပွဲများကြောင့် ပလက်ဝမြို့ပေါ်တွင် လာရောက် ခိုလှုံနေသည့် စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည် စုစုပေါင်း ၃ သောင်း ၆ ထောင်ကျော် ရှိနေသည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020 /04/29/221696.html
COVID-19 အတည်ပြုလူနာ နံပတ် ၁၄၄ နဲ့ ထိတွေ့ခဲ့တဲ့ ကချင်ပြည်နယ် မိုးညှင်းဆေးရုံက ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေ စုစုပေါင်း ၁၈ ဦးစလုံးမှာ COVID-19 ရောဂါပိုး မတွေ့ရှိရဘူးလို့ မိုးညှင်းဆေးရုံမှ ဆရာဝန်တဦးက ပြော ပါတယ်။ မိုးညှင်းမြို့ quaratine စင်တာမှတဆင့် မိုးညှင်းခရိုင်ဆေးရုံကြီး ကြပ်မတ်ဆောင်သို့ ပြောင်းရွှေ့ကုသခဲ့တဲ့ လူနာ အမှတ် ၁၄၄ နဲ့ ထိတွေ့ခဲ့သူတွေကို ဧပြီ ၂၇ ရက်က နှာခေါင်း အာခေါင်တို့ဖတ် ပေးပို့စစ်ဆေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
မိုးညှင်းဆေးရုံမှ ဆရာဝန် ဒေါက်တာဖြူလေးဝေက “၁၈ ဦးစလုံး ပိုးမတွေ့ အဖြေရပါတယ်။ ဒုတိယအကြိမ် မေလ ၄ ရက်နေ့ ပြန်စစ်ဆေးဖို့ တို့ဖတ်ပြန်ယူမှာပါ။ ဒုတိယအကြိမ်စစ်ဆေးလို့ ပိုးမတွေ့ Negative အဖြေထွက်လာရင် ၂၁ ရက် quarantine စောင့်ကြည့်ခံရတဲ့ နေအိမ် ၃၈ လုံးနဲ့ မိသားစုတွေ ထွက်လို့ရပါပြီ”လို့ ပြောပါတယ်။ COVID-19 လူနာ ၁၄၄ ကတော့ “ကျနော်နဲ့ထိတွေ့ခဲ့သူ ရန်ကုန်ချန်းရိစက်ရုံကရော မိုးညှင်းကတွေရော အားလုံးပိုးမတွေ့လို့ ဝမ်းသာပါတယ်။ ကျနော် မြစ်ကြီးနား ဆေးရုံမှာပဲ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ တဖြည်းဖြည်း ကောင်းလာပါပြီ”လို့ ဖုန်းနဲ့ဖြေကြားပါတယ်။ http://burme se.dvb.no/archives/385294
မူဆယ်မြို့တွင် တရုတ်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူ မြန်မာလုပ်သား နေ့စဉ် ၁၀ဝ ကျော်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ “ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ကလည်း လမ်းညွှန်ထားတာဆိုတော့ ဒီအဖွဲ့တွေ စာရင်းရတာနဲ့ ထိန်းချုပ်ဗဟိုကို ပို့ မယ်။ ပြီးတော့ ရှမ်းမြောက်အဆုံး ဧရိယာဖြစ်တဲ့ နောင်ချိုမြို့နယ် ဘန့်ဘွေးမှာရှိတဲ့ ခြေမြစ်ပင် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးအစပ် ပြင်ဦးလွင် ဝက်ဝံကြားမှာ Lockdown လုပ်ထားတဲ့ အနေအထားမှာ တရုတ်နိုင်ငံက ပြန်လာတဲ့ နိုင်ငံသားတွေကို သက်ဆိုင် ရာနေရာသွားနိုင်အောင် ကျွန်တော်တို့စီမံ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်”ဟု ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ဒုတိယပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေး မှူး ဦးကျော်သူဇော်က ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ တရုတ်နိုင်ငံမှ ပြန်လည် ဝင်ရောက်လာသူ မြန်မာနိုင်ငံသားများအား နေရပ်ဒေသသို့ ပြန်လည်စေလွှတ် လျက်ရှိရာ ၎င်းတို့ကို ပြင်ဦးလွင်ရှိ COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ် ကုသရေးကော်မတီမှ ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးမှ ကြီးကြပ်၍ ယာဉ်တန်းဖြင့် မန္တလေးတိုင်းနှင့် အခြားဒေသ အသီးသီးသို့ သွားနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ ယင်းအပြင် ပြန်လည်ဝင်ရောက် လာသူများအား သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးနေသော ယာဉ်မောင်းများ အနေဖြင့် ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ သက်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ တင်ဆောင်ပို့ဆောင်ပြီး ယာဉ်မောင်သူများ COVID-19 ရောဂါ သယ်ယူသူများ မဖြစ်ရေး အသိပညာများ ရရှိထားရန်လိုအပ်‌နေသေးကြောင်း ဒေသခံများက ပြောကြားသည်။
မူဆယ်မြို့တွင် တရုတ်နိုင်ငံ အကျဉ်းထောင်အသီးသီးက လွှဲပြောင်းလာသူများ အပါအဝင် စုစုပေါင်း ၉၆ ဦးအား မူဆယ်မြို့ရှိ တရုတ်စာသင်ကျောင်း၌ ၂၁ ရက် Facility Quarantine ထားရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ https://newseleven.com/articl e/171253
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း တောင်ကြီး စဝ်စံထွန်းဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေသည့် Covid-19 သံသယလူနာအမျိုးသမီးတစ်ဦး သေဆုံးသွားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အဆိုပါ စောင့်ကြည့်လူနာသည် ယမန်နေ့ (ဧပြီ ၂၈) ရက်မနက်ပိုင်းက စဝ်စံထွန်းဆေးရုံတွင် ဆေးကုသခံယူနေဆဲလူနာဖြစ် ပြီး၊ ထိုလူနာ၏ ဓာတ်ခွဲခန်းကို ရန်ကုန်အမျိုးသား ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ပို့ဆောင်နေစဉ် သေဆုံးသွားကြောင်း ပြည်နယ် အထူးရောဂါနိမ်နင်းရေးဌာန လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာ နှင်းအိဖြူက သျှမ်းသံတော်ဆင့်သို့ ပြောသည်။ သေဆုံးသွားသည် စောင့်ကြည့်သူသည် သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ရပ်စောက်မြို့နယ်(အင်တော) က အသက် ၅၀ အမျိုးသမီး ဖြစ်ပြီး၊ ဧပြီ ၂၃ ရက်နေ့ က စဝ်စံထွန်းဆေးရုံ မှာ Covid-19 စောင့်ကြည့်လူနာအဖြစ် တက်ရောက် ဆေးကုသမှု ခံယူခဲ့ကြောင်း ဒေါက်တာနှင်းအိဖြူက ပြောသည်။
“ပြင်းထန် အဆုတ်ရောင် လက္ခဏာ နဲ့ ဆေးရုံတက်နေတာ။ သံသယ လူနာ အနေနဲ့ကုထားတာ။ သူ့ရဲ့ ဓါတ်ခွဲနမူနာကိုတော့ ၂၇ ရက်နေ့က NHL ကိုတော့ ပို့ထားတယ်။ ဓါတ်ခွဲ အဖြေတော့ မရသေးဘူး” ဟု ဒေါက်တာနှင်းအိဖြူ က ဆိုသည်။ ၎င်း အမျိုးသမီးသည် ရောဂါပိုး ရှိသူနှင့် ထိတွေ့မှု မရှိ၊ နိုင်ငံခြားခရီးသွား ရာဇဝင်မရှိ။ သို့သော်သားဖြစ်သူမှာ မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံမှ ပြန်လာသူ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“သူ့ ဓါတ်ခွဲအဖြေ မထွက်သေးတော့ Covid-19 ပိုးရှိသူလို့တော့ ပြောလို့မရသေးဘူး။ ဓါတ်ခွဲ အဖြေက ၃ ရက်လောက်ထပ် စောင့်ရမယ်။ သူက နိုင်ငံခြားသွားထားတဲ့ ရာဇဝင် တော့မရှိဘူး” ဟု ဒေါက်တာနှင်းအိဖြူ ကပြောသည်။ https://burmese.shanews.or/archiv s/16336
၁။ ရသတေ့ောငျမွို့ပျေါမှာ စဈရှောငျစခနျးဆောကျလုပျမှု ပွညျနယျအစိုးရ တားမွဈ
၂။ COVID-19 ရောဂါကာကှယျထိနျးခြုပျရေး ညှိနှိုငျးရေးကျောမတီဖှဲ့စညျးခွငျးအပျေါ တိုငျးရငျးသားလကျနကျ ကိုငျအဖှဲ့ မြား ကွိုဆို
၃။ ကိုဗဈကပျရောဂါ ကာလအတှငျး စားဝတျနရေေးအခကျအခဲရှိသူမြားကို DKBA ထောကျပံ့မှုပွုလုပျ
၄။ ရခိုငျနဲ့ခငျြးပွညျနယျက တိုကျပှဲတှကွေောငျ့ နရေပျစှနျ့ခှာထှကျပွေးသူ ဦးရတေိုး
၅။ မွနျမာစဈခေါငျးဆောငျတခြို့အပျေါ အရေးယူပိတျဆို့မှု ဗွိတိနျ သကျတမျးတိုး
၆။ မွောကျဦးနဲ့ ဘူးသီးတောငျမှာ ၂ ရကျအတှငျး ကြောငျးသူတဈဦးအပါအဝငျ အရပျသား ၅ ဦး ဒဏျရာရ
၇။ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲကို နိုဝငျဘာလအတှငျး ကငျြးပနိုငျဖှယျရှိဟု ကျောမရှငျအဖှဲ့ဝငျ ပွော
၈။ မွောကျဦးတှငျ နယျမွခေံ ရဲတပျသား ၁ ဦး ဖမျးဆီးခံရ
၉။ လှိုငျလငျ တရုတျပွညျတျောပွနျ ၉၇ ဦး အစားအသောကျ ကိုယျတိုငျစီစဉျရ
၁၀။ တပျမတျော ဖိအားပေးမှုမြားကွောငျ့ KNU ၏ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကနျြးမာရေးစဈဆေးရေးဂိတျတဈခု ဖွုတျပိတျလိုကျရ
၁၁။ ကြောကျဖွူမွို့နယျ ထှအေုပျခွံဝငျးအတှငျး အဝေးထိနျးရီမုမိုငျး ၁ လုံးတှရှေိ့
၁၂။ ပလကျဝဒသေသို့ ဆနျအိတျနှငျ့စားနပျရိက်ခာမြား ထပျမံရောကျရှိ
၁၃။ လှယျဂယျြနယျစပျဂိတျမှဝငျလာသော တရုတျပွညျတျောပွနျ ၄ ထောငျ နီးပါးရှိလာ
၁၄။ ထောကျပံ့ ရိက်ခာရရနျ အိမျထောငျစု ၅,ဝ၀ဝ ကြျောကနျြခဲ့၍ လူစုလူ ဝေးဖွဈ
၁၅။ ဝိုငျးမျော ဒိနျဂနျြယနျရှိ ငှကျပြျောခွံလုပျသားမြား လုပျခလစာနှငျ့ပတျသကျပွီး သကျဆိုငျရာသို့တိုငျကွားမညျဟုဆို
၁၆။ နာဂ ခေါငျးဆောငျဟောငျးမြားက ကိုဗဈအရေး လိုအပျလြှငျ အစိုးရကို ကူညီမညျဟု ဆို
၁၇။ Covid-19 ပညာပေးပနျးခြီရေးဆှဲမှုကွောငျ့ တရားစှဲခံရသူ ၃ ဦးအာမခံရရှိ
၁၈။ ကပျတဲလျကြေးရှာ ဝငျထှကျသှားလာမှု ကနျ့သတျ၍ အနီးဝနျးကငျြရှာ စားသောကျပွတျလပျမညျ့ အနအေထားဖွဈ
၁၉။ ခငျြးပွညျနယျ တီးတိနျမွို့နယျ ကပျတဲလျကြေးရှာကို Lockdown ဖွရေနျ ပွညျထောငျစုသို့
၂၀။ ဒုက်ခသညျစခနျး ၁၇၀ ကြျောမှာ ဗိုငျးရပျဈ ကာကှယျရေးအတှကျ အစိုးရ ပွငျဆငျ
၂၁။ ထိုငျးပွနျမြားကို မှနျပွညျသဈပါတီ ထိနျးခြုပျနယျမွေ ဝငျခှငျ့မပွု
၂၂။ ရခိုငျနဲ့ ခငျြးမှာ ရာဇဝတျမှုကြူးလှနျတဲ့ စှပျစှဲခကျြတှေ စုံစမျးဖို့ ယနျဟီးလီတောငျးဆို
၂၃။ မငျးပွားတိုကျပှဲတှငျ တပျမတျော ကွညျး၊ ရေ၊ လေ ပူးပေါငျးတိုကျခိုကျ
၂၄။ ကရငျပွညျနယျအတှငျး တရုတျကုမ်ပဏီတှေ မွို့သဈ ၃ မွို့ တညျဆောကျနေ
၂၅။ Covid-19 ကာကှယျရေးအတှကျ အရေးယူမှု ဟားခါးတှငျ စတငျ
၂၆။ ညှနျကွားခကျြမြားလိုကျနာမှုရှိမရှိ စိစဈနစေဉျ မွဝတီမွို့ရှိ စကျရုံအလုပျရုံမြားလုပျငနျးလညျပတျမှုယာယီ ရပျဆိုငျးထား
၂၇။ ပလကျဝမှ စဈဘေးရှောငျမြား ကြောကျတျော ဘကျသို့ ပွေးရ
၂၈။ မိုးညှငျးက ကနျြးမာရေးဝနျထမျးနှငျ့ စတေနာ့ဝနျထမျး ၁၈ ဦးတှငျ COVID-19 ရောဂါပိုးမတှေ့
၂၉။ မူဆယျမွို့တှငျ တရုတျနိုငျငံမှ မွနျမာနိုငျငံအတှငျး ပွနျလညျဝငျရောကျလာသူ မွနျမာလုပျသား နစေ့ဉျ ၁၀ဝ ကြျောရှိ
၃၀။ တောငျကွီး သံသယစောငျ့ကွညျ့လူနာ တဦးသဆေုံး
ရခိုငျမွောကျပိုငျးက အစိုးရနဲ့ ရခိုငျလကျနကျကိုငျ AA အဖှဲ့တို့ကွား တိုကျပှဲတှကွေောငျ့ နရေပျစှနျ့ခှာထှကျပွေးလာကွတဲ့ စဈရှောငျတှဟော ရသတေ့ောငျမွို့ပျေါမှာ ၃၀,ဝ၀ဝ နီးပါးရှိတယျလို့ စဈရှောငျကူညီသူတှကေ ပွောဆိုကွပါတယျ။ လကျရှိ အခြိနျမှာ ရသတေ့ောငျမွို့ပျေါမှာ စဈရှောငျတှေ မြားလာတာကွောငျ့ စားဝတျနရေေးတှေ ခကျခဲလာသလို စဈရှောငျတှေ နထေိုငျဖို့အတှကျ အဆောကျအဦးတှေ မလုံလောကျတာကွောငျ့ လှတျတျောကိုယျစားလှယျတှေ ဦးဆောငျပွီးတော့ အဆောငျ တှေ ဆောကျလုပျနကွေတာဖွဈတယျလို့ ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဒျေါခငျစောဝကေ ပွောပါတယျ။ “အိမျခွကေတော့ ၁၀ဝ၊ ၂၀ဝ လောကျနီးပါး နဖေို့လောကျတော့ ရနပွေီ။ ၁၀ ပကေို တဈခနျးလုပျတာကို အဲတော့ တဈအိမျနဲ့ တဈအိမျခွား တာတော့ မရှိဘူး။ အမိုး မိုးပွီးပွီ၊ အဲလိုအကာလုပျဖို့ပဲ ကနျြတော့တာ။ တကယျလို့ နမေယျဆိုရငျတော့ နလေို့ရတဲ့ အနေ အထားရှိနပေါပွီ။” စဈရှောငျတှအေတှကျ ဆောကျလုပျနတောကို တဈဦးခငျြးဖွဈစေ၊ အဖှဲ့အစညျးနဲ့ ဖွဈစေ ဆကျမဆောကျ လုပျဖို့အတှကျ ရခိုငျပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့က ဒီကနမှေ့ာပဲ စာထုတျပွီးတော့ တားမွဈလိုကျတယျလို့ ဒျေါခငျစောဝကေ ဆကျ ပွောပါတယျ။
ရခိုငျမွောကျပိုငျးမှာ တိုကျပှဲတှကွေောငျ့ နရေပျစှနျ့ခှာထှကျပွေးလာကွသူတှအေတှကျ ပွညျနယျအစိုးရအနနေဲ့ မွို့နယျ ခွောကျ ခုမှာ စဈရှောငျစခနျး ခုနဈခု တညျဆောကျထားပေးပွီးဖွဈသလို လိုအပျတဲ့ စဈရှောငျစခနျးတှေ ထပျဆောကျပေးဖို့ စီစဉျနေ တယျလို့လညျး အဲဒီတားမွဈစာထဲမှာ ဖျောပွထားတာလညျး ဖွဈပါတယျ။ စဈရှောငျစခနျးတှေ ဆောကျလုပျနတောကို တားမွဈ တာနဲ့ ပတျသတျပွီး ရခိုငျပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ ပွောခှငျ့ ရသူတှကေို ဆကျသှယျခဲ့ပမေယျ့လညျး တုံ့ပွနျဖွကွေားမှု မရှိပါဘူး။ အစိုးရက ဆောကျလုပျပေးထားတဲ့ စဈရှောငျစခနျးတှဟော မွို့ပျေါနဲ့ ဝေးလှနျးသလို နယျမွအေနအေထားကို လှတျတျော ကိုယျစားလှယျတှေ ဒသေခံတှနေဲ့ တိုငျပငျပွီးဆောကျလုပျထားတာ မဟုတျတာကွောငျ့ စဈရှောငျတှအေနနေဲ့ အဲဒီ စခနျးတှေ မှာ နထေိုငျဖို့အဆငျမပွဘေူးလို့လညျး စဈရှောငျတှနေဲ့ လှတျတျောကိုယျစားလှယျတှကေ ပွောဆိုကွပါတယျ။
လကျရှိအခြိနျမှာ ရသတေ့ောငျမွို့နယျမှာရှိတဲ့ စဈရှောငျတှဟော မွကွေီးပျေါမှာ ကပျထူးစက်ကူလေးတှေ ခငျးပွီးနထေိုငျနကွေ ရပွီး ဒီရကျပိုငျးအတှငျးမှာ မိုးရှာသှနျးမှုတှေ ရှိနတောကွောငျ့ သူတို့အနနေဲ့ စားဝတျနရေေးအပွငျ ကနျြးမာရေးအတှကျပါ စိုးရိမျ ရတယျလို့ စဈရှောငျကူညီသူတှကေ ပွောဆိုကွပါတယျ။ https://burmese.voanews.com/a/rakhineidpcamp/5398701
၂။ COVID-19 ရောဂါကာကှယျထိနျးခြုပျရေး ညှိနှိုငျးရေးကျောမတီဖှဲ့စညျးခွငျးအပျေါ တိုငျးရငျးသားလကျနကျ ကိုငျအဖှဲ့မြား ကွိုဆို
COVID-19 ရောဂါကာကှယျထိနျးခြုပျရေးအတှကျ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ ညှိနှိုငျးပူး ပေါငျးရေး ကျောမတီဖှဲ့စညျးလိုကျကွောငျး ဧပွီလ ၂၇ နစှေဲ့ဖွငျ့ သမ်မတရုံး၏ ထုတျပွနျလိုကျခွငျး အပျေါ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့ အစညျးမြား(EAOs)က ကွိုဆိုလိုကျသညျ။
လကျရှိကပျရောဂါ ဖွဈစဉျသညျ အားလုံးပါဝငျ၍ ဝိုငျးဝနျးကာကှယျတားဆီးရမညျ့ ကိစ်စရပျဖွဈသညျနှငျ့အညီ ယခုလို သမ်မတရုံးမှ တရားဝငျ ကွညောခကျြ ထုတျပွနျလိုကျခွငျးအပျေါ ကွိုဆိုကွောငျး ကရငျအမြိုးသား အစညျးအရုံး-KNU အတှငျးရေးမှူး (၁) ပဒိုစောဆဲပှယျက ပွောသညျ။ ၎င်းငျးက“ဒီလိုမြိုး ဖှဲ့စညျးပွီးတော့ ဝိုငျးဝနျးပွီး တားဆီးရေးလုပျတဲ့ ကိစ်စရပျအပျေါမှာတော့ ကွိုဆို ရမယျ့ ကိစ်စဖွဈ တာပေါ့။ ဒါပမေဲ့ အဓိကက ပူးပေါငျးလုပျဆောငျရေးနဲ့ပတျသကျပွီး ဘယျလိုပုံစံမြိုးနဲ့ ညှိနှိုငျးကွမလဲ ဘယျလို သဘောတူညီခကျြအပျေါမှ ညှိနှိုငျးလုပျဆောငျကွမလဲဆိုတာတော့ ဒါကတော့ ကနြျောတို့ စောငျ့ကွညျ့ရမယျ ကိစ်စတော့ ဖွဈတာပေါ့”ဟု ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။
COVID-19 ရောဂါ ကာကှယျထိနျးခြုပျကုသရေးကို တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးမြား အခွပွေုရာ နရောဒသေမြား တှငျ ထိထိရောကျရောကျဆောငျရှကျနိုငျရေးအတှကျ ရညျရှယျပွီး COVID-19 ကာကှယျ ထိနျးခြုပျ ကုသရေးနှငျ့စပျလဉျြး၍ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ ညှိနှိုငျးပူးပေါငျးရေးကျောမတီကို ဖှဲ့စညျးလိုကျကွောငျး ဧပွီလ ၂၇ ရကျနေ့ ရကျစှဲဖွငျ့ နိုငျငံတျောသမ်မတရုံးက အမိနျ့ကွောငွာစာထုတျပွနျလိုကျခွငျးဖွဈသညျ။
အဆိုပါ ကျောမတီထဲတှငျ ဥက်ကဋ်ဌအဖွဈ အမြိုးသား ပွနျလညျသငျ့မွတျရေးနှငျ့ ငွိမျးခမျြးရေး ဗဟိုဌာန၏ ဒု-ဥက်ကဋ်ဌ ဒေါကျတာ တငျမြိုးဝငျး၊ ဒုဥက်ကဋ်ဌ ငွိမျးခမျြးရေးကျောမရှငျ အတှငျးရေးမှူး ဒု-ဗိုလျခြုပျကွီး ခငျဇျောဦး(ငွိမျး) ၊ အ တှငျးရေးမှူး တိုငျးရငျးသား လူမြိုးမြားရေးရာ ဝနျကွီး၏ ဒု-ဝနျကွီး ဦးလှမျောဦးနှငျ့ အဖှဲ့ဝငျအဖွဈ ငွိမျးခမျြးရေး ကျောမရှငျ အကွံပေးအဖှဲ့ဝငျ ဦးမိုးဇျောဦး စသညျဖွငျ့ အသီးသီးပါဝငျသညျ။ သြှမျးပွညျပွနျလညျထူထောငျရေး ကောငျစီ/သြှမျးပွညျတပျမတျော(RCSS/SSA)၏ အကွံ ပေး ဦးခှနျစိုငျးက “ ဒီ ကိစ်စကို RCSS ဘကျက တာဝနျရှိတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတှကေို မေးပါတယျ။ သူတို့က ဒီကိစ်စကို ကွိုဆိုပါတယျပေါ့။ ကနြျော တို့ လကျမှတျထိုးထားတဲ့ EAO ဘကျကလညျး ဧပွီလ ၁၇ ရကျနမှေ့ အစညျးအဝေး လုပျပွီးတော့မှ EAO တှအေနနေဲ့ ပူးတှဲပွီးတော့မှ COVID-19 ကို ဘယျလိုလုပျကိုငျသှားမလဲဆိုတာကိုလညျး ဆှေးနှေးသှားခဲ့ပါတယျတဲ့။ ဒီကျောမတီကို ဖှဲ့ဖို့ဆို တာလညျး ကနြျောတို့သဘောရတယျ။ အခုဆိုရငျလညျး ကနြျောတို့အထကျ မှာရှိတဲ့ PPST ခေါငျးဆောငျတှကေို တငျပွထား ပါတယျတဲ့။ မကွာခငျမှာ ဖှဲ့ဖွဈမှာပါ။ ဖှဲ့ဖွဈရငျလညျး ဘယျနညျး နဲ့မဆို အစိုးရဖှဲ့ထားတာနဲ့ပူးတှဲ လုပျသှားမှာပါ လတေဲ့” ဟု ကအေိုငျစီသို့ပွောသညျ။http://kicnews.org/2020/04/covid19%e1%80%b1%e1%80%9b%e1%80%ac%e1%80%82% 1%80%ab%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ (COVID-19 ) ကူးစကျရောဂါ ဖွဈပှားနသေညျ့ကာလအတှငျး စားဝတျနရေေး အခကျအခဲရှိသညျ့ ဒသေခံပွညျ သူမြားအား ဒီမိုကရစေီအကြိုးပွု ကရငျ့တပျမတျော (DKBA-NCA)အဖှဲ့က အခွခေံစားနပျရိက်ခာနှငျ့ ငှကွေေးထောကျပံ့မှုမြား ပွု လုပျခဲ့သညျ သိရသညျ။ ကွာအငျးဆိပျကွီးမွိုနယျ လေးဖာထောကြေးရှာတှငျ ဧပွီ ၂၇ ရကျနကေ့ အိမျထောငျစု ၄ဝဝ ကြျော အား အိမျထောငျစု တဈစုလြှငျ ဆနျ ၁ အိတျ၊ ဆီ ၂ ဗူး၊ ဆား၊ ငါးပိ၊ ကွကျသှနျ၊ ငရုပျခွောကျနှငျ့ အခြိုမှုနျ့စသညျ့အခွခေံ စားနပျ ရိက်ခာမြားအပွငျ အိမျထောငျစု တဈစုကို ကပျြငှေ ၂၀,ဝ၀ဝ စီ ထောကျပံ့ပေးခဲ့သညျဟု DKBA အမှတျ ၉၀၃ တပျရငျးမှူး ဒုဗိုလျမှူးကွီး စောအဝေမျးက ကအေိုငျစီ သို့ ပွောသညျ။
“ စဈပွေးရှောငျတှေ ဒုက်ခသညျကနပွေညျလာနထေိုငျတဲ့လူတှေ တျောတျောမြား အခကျအခဲအမြားကွီးရှိတယျ။ ခုရောဂါဖွဈ တဲ့ကာလမှာ ပိုပွီးဒုက်ခရောကျတယျ။ တဈခြို့ထမငျးပွုတျစာနရေတယျ။ အလုပျလကျမဲ့ဖွဈကုနျတယျ။ ဆနျအိတျ ၆ ထောငျ လောကျ ဝယျထားတယျ။ နောကျလာမယျ့ ဒီဇငျဘာလအထိ နိုငျသလောကျကူညီသှားမယျ”ဟု DKBA အမှတျ ၉ဝ၃ တပျရငျးမှူး ဒုဗိုလျမှူးကွီး စောအဝေမျးက ပွောသညျ။ ထို့အပွငျ ကွာအငျးဆိပျကွီးမွို့နယျ ဘုရားသုံးဆူ၊ လေးဖာထော၊ မဲ့တဖှိး၊ ကွိမျခြောငျး၊ ကြှနျးခြောငျး၊ ပွောငျမထိနျ ကြေးရှာ မြားနှငျ့ အနနျးကှငျးတိုကျနယျရှိ ကြေးရှာအုပျစုမြားကိုလညျး စားဝတျနရေေး ခကျခဲသူမြားအား အခွခေံစားနပျရိက်ခာမြားနှငျ့ ငှေ ကွေးထောကျပံ့မှုမြားကို အစိုးရ၊ KNU -ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံးတို့နှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျသှားမညျဟုလညျး DKBA က ပွောသညျ။
လေးဖာထောရှာနေ စောအုနျးရှငျက “ ဒီမှာက စဈပွေးရှောငျနဲ့ ဒုက်ခသညျစခနျးကနေ ပွနျရောကျလာသူတှမြေားတယျ။ ရောဂါ ကာလမှာ စားဝတျနရေေး အရမျးခကျခဲတယျ။ ဒီမှာက ရာသီအပငျတှစေိုကျတယျ။ တဈရာသီစာပဲ ဖူလှုံတယျ။ အပွငျမှာလညျး အလုပျထှကျလုပျလို့ မရဘူး။ အလုပျတှကေလညျး ပိတျထားကွတယျ။ နိုငျငံတျောက ထောကျပံ့တဲ့ဆနျတှေ ကနြျောတို့ မရခဲ့ ပါဘူး။ DKBA အဖှဲ့က ဆနျတှေ၊ ဆီတှေ လာထောကျပံ့ပေးတော့ ဝမျးသာပါတယျ”ဟု ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။ http://kicne ws.org/2020/04/%e1%80%80%e1%80%af%e1%80%ad%e1%80%97%e1%80%85%e1%80
လကျရှိအခြိနျထိ စဈရေးတငျးမာနတေဲ့ ရခိုငျမွောကျပိုငျးနဲ့ ခငျြးပွညျနယျ ပလကျဝမွို့နယျတှမှော တဈနတေ့ဈခွား နရေပျ စှနျ့ခှာထှကျပွေးနကွေရတဲ့ စဈရှောငျဦးရဟောလညျး ပိုမို မြားပွားလာပွီးစားဝတျနရေေး အဆငျမပွမှေုတှကေို ပိုမိုရငျဆိုငျနေ ကွရတယျလို့ စဈရှောငျစခနျး တာဝနျရှိသူတှကေ ပွောဆိုကွပါတယျ။ ရခိုငျမွောကျပိုငျးက ကြောကျတျောမွို့နယျအတှငျးမှာ ထပျတိုးလာတဲ့ စဈရှောငျတှကေို လကျခံဖို့ နရောမရှိ တော့သလို စဈရှောငျဦးရေ ၂၀,ဝ၀ဝ နီးပါးအထိ ရှိနတေယျလို့ ကြောကျတျောမွို့မိမွို့ဖ ဒေါကျတာ ထှနျးအေးက ပွောပါတယျ။
“ကနြျောတို့ ကြောကျတျောမွို့နယျမှာ မွို့ပျေါမှာ စဈရှောငျစခနျးစုစုပေါငျး ၁၅ နရောလောကျရှိတယျ။ လူဦးရကေတော့ ၇,ဝ၀ဝ နီးပါးလောကျရှိတယျ။ ထပျတိုးလာတဲ့ သူတှကေို လကျရှိအခြိနျမှာ မွို့ပျေါက စခနျးတှမှော လကျခံနိုငျတဲ့ အနအေထား မရှိတော့လို့ ဆှမြေိုးတှေ အိမျမှာ ခိုကပျပွီးနတေဲ့ သူရှိတယျ။ နောကျပွီးတော့ ကြောကျတျောမွို့နယျအတှငျးက တဈခွား ကြေးရှာတှမှောလညျး နကွေတယျ။ အကုနျလုံး ပေါငျးလိုကျ မယျဆိုရငျတော့ တိုကျပှဲဖွဈကတညျးကဆိုရငျ စဈရှောငျ ၂၀,ဝ၀ဝ လောကျရှိမယျလို့ ခနျ့မှနျးရတယျ။” ကြောကျတျောမွို့နယျအတှငျးက ညောငျခြောငျး စဈရှောငျစခနျးမှာလညျး ဒီကနေ့ အထိ စဈရှောငျ ထပျတိုးနတေယျလို့ ညောငျခြောငျးစဈရှောငျစခနျး တာဝနျခံက ပွောပါတယျ။
ရခိုငျမွောကျပိုငျးမှာ တိုကျပှဲတှကွေောငျ့ နရေပျစှနျ့ခှာ ထှကျနကွေသူတှကေတော့ ရသတေ့ောငျမွို့နယျမှာ အမြားဆုံးရှိနတော ဖွဈပွီး လူဦးရအေားဖွငျ့ ၃၀,ဝ၀ဝ နီးပါးရှိနပေါတယျ။ အဲဒီစဈရှောငျစခနျးတှမှော နရောထိုငျခငျးတှေ မလုံလောကျတဲ့ အပွငျ အခုရကျပိုငျးအတှငျးမှာ မိုးရှာသှနျးမှုတှနေဲ့ ရငျဆိုငျနရေတာကွောငျ့ စဈရှောငျတှအေတှကျ အခကျတှနေ့ရေတယျလို့ စဈရှောငျ တှကေို ကူညီပေးနတေဲ့ ကိုဘက်ကာက ပွောပါတယျ။
ရခိုငျမွောကျပိုငျးအပွငျ ခငျြးပွညျနယျ ပလကျဝမွို့နယျဘကျမှာလညျး တိုကျပှဲတှေ ဆကျလကျပွငျးထနျနသေလို စဈရှောငျတှေ ဟာလညျး တနတေ့ခွား မြားပွားလာနပွေီး စားဝတျနရေေး ကိစ်စရပျတှကေို ဖွရှေငျးဖို့ ခကျခဲ့နကွေတယျလို့ ပလကျဝ စဈရှောငျ ကူညီ သူတှကေ ပွောဆိုကွပါတယျ။ COVID-19 ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါအကွပျအတညျးအခြိနျမှာ ရခိုငျမွောကျပိုငျးနဲ့ ခငျြးပွညျနယျ ပလကျဝမွို့နယျတှမှော တိုကျပှဲတှရေပျဖို့ ကုလသမဂ်ဂအပါဝငျ မွနျမာ လူမှုအဖှဲ့အစညျးတှကေ တောငျးဆိုးထားပမေဲ့လညျး ဒီကနအေ့ထိ တိုကျပှဲတှေ ဆကျလကျပွငျးထနျနသေလို ဖမျးဆီးခံရသူတှေ နရေပျစှနျ့ခှာထှကျပွေးနရေသူတှနေဲ့ ထိခိုကျ ဒဏျရာရသူတှဟောလညျး နစေ့ဉျနဲ့အမြှရှိနပေါတယျ။ https://burmese.voanews.com/a/rakhine-chin-people-flee-/5395318.html
မွနျမာနိုငျငံ၊ ရခိုငျပွညျနယျမှာ ဖွဈပှားခဲ့သော လူမြိုးစုသုတျသငျရှငျးလငျးမှုနဲ့ မွနျမာနိုငျငံ၊ ကခငျြပွညျနယျနဲ့ ရှမျးပွညျနယျ တှမှော ဖွဈပှားခဲ့တဲ့ လူ့အခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျမှုတှမှော ပါဝငျပတျသကျခဲ့တဲ့ မွနျမာ့တပျမတျောထိပျတနျးအရာရှိ ၈ ယောကျအပါအဝငျ အရာရှိနဲ့ အခွားအဆငျ့ စုစုပေါငျး ၁၄ ဦးကို ဘဏ်ဍာရေးအရ အရေးယူ ပိတျဆို့ထားတဲ့ စာရငျးကို ဗွိတိနျနိုငျငံ အစိုးရက ထုတျပွနျလိုကျပါတယျ။ ဧပွီလ ၂၈ ရကျနေ့ ရကျစှဲနဲ့ ဗွိတိနျနိုငျငံ ဘဏ်ဍာရေး ဝနျကွီးဌာနက ထုတျပွနျတဲ့ စာရငျးမှာ မွနျမာ့တပျမတျောက ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျကွီး အဆငျ့ ၁ ဦး၊ ဗိုလျခြုပျအဆငျ့ ၂ ဦးနဲ့ ဗိုလျမှူးခြုပျ အဆငျ့ ၅ ဦး ပါဝငျပါတယျ။ သူတို့အားလုံးကို ၂၀၁၈ ခုနှဈကစပွီး ဘဏ်ဍာရေးအရ ပိတျဆို့ အရေးယူထားတာဖွဈပွီး အခုနှဈ ဧပွီလမှာ ထပျမံ စာရငျးပွုစု ထုတျပွနျခဲ့တာလညျး ဖွဈပါတယျ။
ပိတျဆို့အရေးယူခံရတဲ့ စာရငျးထဲ ပါဝငျသူ ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျကွီး အောငျကြျောဇောဟာ ၂၀၁၅ က ၂၀၁၇ ခုနှဈ အတှငျး အမှတျ (၃) စဈဆငျရေး အထူးအဖှဲ့မှူး အဖွဈတာဝနျယူခဲ့သူ ဖွဈပွီး ဗိုလျခြုပျမောငျမောငျစိုးက ၂၀၁၆ က ၂၀၁၇ ခုနှဈ အတှငျး အနောကျပိုငျးတိုငျး စဈဌာနခြုပျ တိုငျးမှူး အဖွဈ တာဝနျထမျးဆောငျခဲ့သူ ဖွဈပါတယျ။ လကျရှိ အနောကျတောငျပိုငျး စဈဌာန ခြုပျ တိုငျးမှူး ဗိုလျခြုပျ ညီညီဆှကေ အရငျ မွောကျပိုငျးတိုငျး စဈဌာနခြုပျ တိုငျးမှူးဖွဈပါတယျ။ ဗိုလျမှူးခြုပျအဆငျ့ အရာရှိတှေ ထဲ တော့ အမှတျ(၃၃)ခွမွေနျတပျမ၊ တပျမမှူး ဗိုလျမှူးခြုပျ အောငျအောငျ၊ အမှတျ (၉၉) တပျမမှူးဖွဈခဲ့ဖူးသူ လကျရှိ အရှမွေ့ောကျပိုငျးတိုငျး စဈဌာနခြုပျတိုငျးမှူး ဗိုလျမှူးခြုပျ ခငျလှိုငျ၊ နယျခွားစောငျ့ ရဲ တပျဖှဲ့ ရဲမှူးခြုပျအဖွဈ တာဝနျယူခဲ့သူ ဗိုလျမှူးခြုပျ သူရ ဆနျးလှငျ၊ အမှတျ (၉၉) ခွမွေနျတပျ တပျမမှူး ဗိုလျမှူးခြုပျ သနျးဦး၊ အမှတျ (၁၅) စဈဆငျရေးဆိုငျရာ ကှပျကဲ ရေးဌာန တပျမှူး ဗိုလျမှူးခြုပျ ခငျစိုး တို့ ဖွဈပါတယျ။
အလားတူပဲ အဲဒီ တပျမတျောထိပျတနျး အရာရှိကွီးတှကေို အမရေိကနျ ဘဏ်ဍာရေးဝနျကွီးဌာန၊ နိုငျငံခွားပိုငျ ပစ်စညျး ထိနျးခြုပျ ရေးရုံး (OFAC) ကလညျး ၂၀၁၈ ကတညျးက အရေးယူ ဒဏျခတျ ပိတျဆို့မှုတှကေိုပွုလုပျထားခဲ့ပါတယျ။ https://burmese.v oanews.com/a/myanmar-sanction-britain-/5396077.html
ရခိုငျပွညျနယျမွောကျပိုငျးမှာ တပျမတျောနဲ့ ရက်ခိုငျ့တပျတျော(AA)တို့ တိုကျပှဲတှေ ဒီနအေ့ထိ ဆကျလကျ ပွငျးထနျနဆေဲ ဖွဈပွီး ဧပွီလ ၂၆ နဲ့ ၂၇ ရကျနတှေ့မှော ကြောငျးသူတဈဦးအပါအဝငျ အရပျသား ၅ ဦး ထိခိုကျဒဏျရာရခဲ့ပါတယျ။ ရခိုငျပွညျနယျ မွောကျဦးမွို့မှာ မနေ့ ညနေ ၄ နာရီကြျောအခြိနျက တပျမတျောစဈကွောငျးတဈခု မိုငျးခှဲတိုကျခိုကျခံရပွီးနောကျ အဲဒီ တပျမတျော စဈကွောငျးက ပဈခတျလို့ ထမငျးဆိုငျမှာရှိနတေဲ့ အရပျသား ၄ ဦး ထိခိုကျဒဏျရာရခဲ့တယျလို့ မွို့ခံ တှကေပွော ပါတယျ။
မိုငျးခှဲတိုကျခိုကျခံရတဲ့နရောဟာ အလယျဈေးတံတားနဲ့ Prince ဟိုတယျကွားမှာဖွဈပွီး အခငျးဖွဈနရောနဲ့ မီတာ ၉၀ဝ ကြျော ဝေးတဲ့ မွောကျဦးစာတိုကျဘေး မွဝါတောငျခွရေငျးက ထမငျးဆိုငျကို လကျနကျကွီးကညျြကရြောကျခဲ့တာပါ။ အခငျးဖွဈနရော အနီးမှာနထေိုငျတဲ့ လုံခွုံရေးအရ အမညျမဖျောလိုတဲ့ မွို့ခံတဈဦးက တပျမတျောစဈကွောငျးကို မိုငျးခှဲသံထှကျပျေါလာပွီး နောကျ တပျမတျောက မွို့တှငျးထဲကို အခြိနျ ၁ နာရီနီးပါးလောကျ ပဈခတျခဲ့တယျလို့ ပွောပါတယျ။ လကျနကျကွီးကွောငျ့ ထမငျးဆိုငျမှာ အလုပျလုပျနတေဲ့ အသကျ ၁၆ နှဈအရှယျ မမိငယျ၊ အသကျ ၁၈ နှဈအရှယျ မမွမွအေး၊ ဆိုငျရှငျဖွဈတဲ့ အသကျ ၄၃ နှဈအရှယျ ဦးညီညီမောငျနဲ့ အသကျ ၆၅ နှဈအရှယျ အဖှားတဈဦး ထိခိုကျဒဏျရာရခဲ့ကွပါတယျ။ ဒဏျရာရသူ ဦးညီညီမောငျက တပျမတျောက မွို့ထဲဘကျကို ပဈခတျနခြေိနျမှာပဲ သူ့ရဲ့ထမငျးဆိုငျကို ထိမှနျခဲ့တယျလို့ပွောပါ တယျ။
မနကေ့ မွောကျဦးမှာ တပျမတျောစဈကွောငျးကို မိုငျးခှဲတိုကျခိုကျတဲ့ကိစ်စအပွငျ ဘူးသီးတောငျမွို့နယျ ကံ့ကျောမွိုငျကြေးရှာက ကြောငျးသူ ထိခိုကျဒဏျရာရတဲ့ကိစ်စနဲ့ ပတျသကျလို့ ရက်ခိုငျ့တပျတျော (AA) ရဲ့ပွောခှငျ့ရသူ ခိုငျသုခကို RFA က မေးမွနျးရာမှာ – မွောကျဦးဘကျမှာ မနကေ့ တိုကျပှဲဖွဈပှားတာမရှိခဲ့ကွောငျး၊ ဘူးသီးတောငျဘကျမှာ နှဈဖကျ ထိတှမှေု့တှရှေိခဲ့သလို ခငျြးပွညျနယျ ပလကျဝနဲ့ ဆမီးအကွားမှာလညျး AA တပျရှိရာကို တပျမတျောဘကျက ဝငျရောကျလာတဲ့အတှကျ အပွနျအလှနျ ပဈခတျမှုတှရှေိခဲ့ကွောငျး RFA ကို ပွောပါတယျ။ မွောကျဦးက ပဈခတျမှုတှနေဲ့ပတျသကျလို့တော့ တိုကျပှဲမရှိဘဲ အကွောငျးမဲ့အရပျသားတှအေပျေါ လူမြိုးရေးအရ အငွိုးအတေးနဲ့ ပဈခတျနတောဖွဈပွီး ဒါဟာစဈရာဇဝတျမှု ကြူးလှနျနတောသာဖွဈတယျ လို့ ခိုငျသုခက ပွောပါတယျ။
RFA က ရရှိထားတဲ့ အခကျြအလကျတှအေရ ရခိုငျပွညျနယျမွောကျပိုငျးနဲ့ ခငျြးပွညျနယျ ပလကျဝမွို့နယျတှမှော ပွီးခဲ့တဲ့ ဖဖေျောဝါရီလ ၂၆ ကနေ မနကေ့ ဧပွီလ ၂၇ ရကျနအေ့ထိ အခြိနျ ၂ လတာ ကာလမှာ သဆေုံးတဲ့ အရပျသား ၁၀ဝ ခနျ့ ရှိနေ သလို ထိခိုကျဒဏျရာရသူဟာလညျး ၂၂၀ ကြျောအထိရှိနပေါတယျ။ https://www.rfa.org/burmese/news/rakhine-aa-army-civilian-deaths-04282020100612.html
၂၀၂၀ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲကို လာမယျ့နိုဝငျဘာလထဲမှာ ကငျြးပနိုငျဖှယျရှိတယျလို့ ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျအဖှဲ့ဝငျ ဦးမွငျ့နိုငျက ခနျ့မှနျးပွောပါတယျ။ မွနျမာ့အသံက မေးမွနျးတဲ့ ရှေးကောကျပှဲဘယျတော့ ကငျြးပမလဲဆိုတာနဲ့ ပတျသကျတဲ့ ဆှေးနှေးခနျးမှာဖွဆေိုထားတာပါ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ပွညျ့နှဈနဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှဈတှမှောကငျြးပခဲ့တဲ့ အထှထှေေ ရှေးကောကျပှဲတှအေတိုငျး လာမယျ့ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲကိုလညျး နိုဝငျဘာ ၈ ရကျ ဒါမှမဟုတျ ၇ ရကျနမှေ့ာ ကငျြးပနိုငျဖှယျ ရှိတယျလို့ဆိုပါတယျ။
လှတျတျောသကျတမျး ၅ နှဈပွညျ့ရငျ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲကငျြးပဖို့ ၂၀ဝ၈ ဖှဲ့စညျးပုံအ‌ခွခေံဥပဒမှော ပွဋ်ဌာနျးထားတဲ့ အတိုငျး ပုံမှနျအတိုငျးဆိုရငျ နိုဝငျဘာလလောကျမှာ ရှေးကောကျပှဲကငျြးပနိုငျဖှယျရှိနတောပါ။ ၂၀၂၀ အထှအေထှေ ရှေး ကောကျပှဲ ရကျကိုတော့ အရငျ ၂၀၁၀ နဲ့ ၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲတှမှော ကွညောခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုငျး ရှေးကောကျပှဲ ရကျမတိုငျခငျ နှဈလအလို ဒါမှမဟုတျ လေးလအလိုမှာ ထုတျပွနျကွညောသှားမယျလို့လညျး ဦးမွငျ့နိုငျကပွောပါတယျ။
အခုကာလဟာ COVID-19 ရောဂါဖွဈပှားနတေဲ့အတှကျ ရှေးကောကျပှဲ စောငျ့ကွညျ့လလေ့ာသူတှနေဲ့ ပွညျသူတှအေကွားမှာ ရှေးကောကျပှဲမလုပျဖွဈမှာ စိုးရိမျသူတှေ ရှိနသေလို ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျကလညျး ကငျြးပမယျ့ရကျကို တိတိ ကကြ မကွညောသေးတာကွောငျ့ ခနျ့မှနျးတာတှေ အမြိုးမြိုးထှကျပျေါနပေါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကပျရောဂါ ဖွဈပှားတာ ဒီထကျပိုမို ကယျြပွနျ့လာမယျဆိုရငျ လာမယျ့ ၂၀၂၀ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲကို ရှဆေို့ငျးရမယျ့ အနအေထားမှာ ရှိတယျလို့ နိုငျငံရေးအသိုငျးအဝိုငျးက သုံးသပျတာတှလေညျးရှိပါတယျ။ http://burmese.dvb.no/archives/384996
ရခိုငျပွညျနယျ၊ မွောကျဦးမွို့ရှိ နယျမွခေံရဲတပျရငျးမှာ တာဝနျထမျးဆောငျနတေဲ့ ရဲတပျသား တဦးကို တုတျ၊ ဓား ကိုငျဆောငျ ထားသူတှကေ ဖမျးဆီးချေါဆောငျသှားတယျလို့ တပျမတျော ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံးက သတငျးထုတျပွနျပါတယျ။ ဧပွီ ၂၆ ရကျ မနကျ ၁၀ နာရီခှဲလောကျက မွောကျဦးမွို့ နယျမွခေံရဲတပျရငျးက ရဲဒုတပျကွပျတဦးနဲ့ ရဲတပျသားနှဈဦးတို့ဟာ မွောကျဦးမွို့သို့ ဈေးသှားဝယျပွီးအပွနျ ရတနာ့မာနျအောငျဘုရားလမျးရှိ သီဟိုဠျခွံအနီး အရောကျမှာ တုတျ၊ ဓား ကိုငျဆောငျ ထားတဲ့ အရပျဝတျနဲ့ အအေေ ၈ ဦးက ဝနျးရံဖမျးဆီးခဲ့လို့ ရဲတပျသားတဈဦး ဖမျးဆီးခံခဲ့ရတယျလို့ တပျမတျောသတငျးမှာ ဖျောပွပါတယျ။
ဖမျးဆီးချေါဆောငျခံရတဲ့ ရဲတပျသား ပွနျလညျရရှိရေးအတှကျ လုံခွုံရေး တပျဖှဲ့ဝငျတှကေ ဒသေခံပွညျသူတှနေဲ့ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျနတေယျလို့လညျး သိရပါတယျ။ ဧပွီ ၂၇ ရကျ ညပိုငျးကလညျး မွောကျဦးမွို့၊ ခရိုငျရဲတပျဖှဲ့မှူးရုံးအနီးရှိ စဈဆေး ရေး ဂိတျဟောငျး အဆောငျကို အအေအေဖှဲ့က ခွငျဆေးဘူးတှနေဲ့ ၆၀ မမ ဗုံးသီး ၁ လုံးတို့ကို အသုံးပွုပွီး မီးရှို့ဖောကျခှဲ ဖကျြဆီးခဲ့လို့ ပကျြစီးမှုရှိခဲ့တယျလို့လညျး တပျမတျောက သတငျး ထုတျပွနျပါတယျ။
အဆိုပါ ဖွဈစဉျတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး ရက်ခိုငျ့တပျမတျော အအေဘေကျကတော့ ပွနျလညျ သတငျးထုတျပွနျတာ မတှရေ့ သေးပါဘူး။ http://burmese.dvb.no/archives/384998
သြှမျးပွညျတောငျပိုငျး လှိုငျလငျမွို့နယျတှငျ တရုတျပွညျတျောပွနျ ၉၇ ဦးရှိပွီး အစားအသောကျပိုငျးကို ကိုယျတိုငျစီမံရကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။ အဆိုပါ တရုတျပွညျတျောပွနျမြားသညျ မူဆယျ – တရုတျနယျစပျ ဂိတျမှ ဧပွီ ၂၄ ရကျနကေ့ ထှကျလာ ကွသူမြားဖွဈပွီး ထိုသူမြားကို Quarantine ၂၁ ရကျ ထားရှိမညျဖွဈကွောငျး လှိုငျလငျမွို့နယျ မဲဆန်ဒနယျ အမှတျ (၂) လှတျတျောအမတျ နနျးမွထှေးက သြှမျးသံတျောဆငျ့ကိုပွောသညျ။
“ခု ပွညျတျောပွနျတှကေို အစိုးရကတော့ နဖေို့ နရောတှပေဲ စီစဉျထားပေးတယျ။ စားသောကျရေးပိုငျးကိုတော့ သူတို့ တတျနိုငျသလောကျ နညျးမြားမဆို ပွနျကူညီနပေါတယျ။ ဒီက သကျဆိုငျရာ တာဝနျရှိသူတှေ ဘကျကလညျး အလှူရှငျတှေ စု ပွီး တတျနိုငျသလောကျ ကူညီသှားမှာပါ” ဟု နနျးမွထှေး ကပွောသညျ။ လကျရှိမှာ ပွညျတျောပွနျ ၉၇ ဦး ကို လှိုငျလငျမွို့ နယျရှိ အစိုးရ နညျးပညာ အထကျတနျးကြောငျး နှငျ့ ပငျလုံမွို့ရှိ နတလ ကြောငျး တှမှော ထားခွငျး ဖွဈသညျ။
ဧပွီ ၂၆ ရကျနကေ့ အရှအေ့လယျပိုငျး တိုငျးမှူးမှလညျး လှိုငျလငျမွို့နယျရှိ တရုတျပွညျတျောပွနျမြားကို ဆနျ၊ ဆီ နှငျ့ ပဲ တို့ လညျးလာရောကျလှူဒါနျးသှားကွောငျး သိရသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/16325
၁၀။ တပျမတျော ဖိအားပေးမှုမြားကွောငျ့ KNU ၏ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကာကှယျရေးဆိုငျရာ ကနျြးမာရေးစဈဆေးရေးဂိတျတဈခု ဖွုတျပိတျလိုကျရ
KNU-ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံး ထိနျးခြုပျနယျမွေ သထုံခရိုငျ (တပျမဟာ ၁) မျောစကိုဒသေ ထောငျမှူးကြေးရှာအုပျစု ဈေးမသှယျရှာတှငျ ဖှငျ့လှဈထားသညျ့ Covid -19 ရောဂါကာကှယျရေး ကနျြးမာရေး စဈဆေးရေးဂိတျတဈခုအား အရှတေ့ောငျ တိုငျးစဈဌာနခြုပျ(ရတခ)မှ ဖိအားပေးမှုမြားကွောငျ့ဖကျြသိမျးလိုကျရကွောငျး KNU သထုံခရိုငျတာဝနျရှိသူမြားထံမှ သိရသညျ။
နှဈဖကျရောနှောအုပျခြုပျသညျ့ ဒသေတှငျ ကနျြးမာရေး စဈဆေးရေးဂိတျမထားရှိရေး ရတခတိုငျးမှူး၏ ညှနျကွားမှုအရ ဟု ဆိုကာ ၎င်းငျးဒသေရှိ အမွောကျတပျ ၅၀၂ ဒုတပျရငျးမှူး ဗိုလျမှူးအောငျကိုကိုက ဧပွီလ ၂၅ရကျမှ ၂၇ ရကျနမြေ့ားတှငျ အကွိမျ ကွိမျ လာရောကျပွောဆိုမှုမြားကွောငျ့ ယခုလိုဖကျြသိမျးလိုကျရခွငျးဖွဈကွောငျး KNU သထုံခရိုငျ အတှငျးရေးမှူး ပဒိုစောစိုးမွငျ့ က ပွောသညျ။ ၎င်းငျးက“ဒုတပျရငျးမှူးပွောတာက ဒီဟာလုပျရငျ ပွညျနယျ၊ တိုငျးခှငျ့ပွုခကျြရမှ လုပျရမယျတဲ့၊ အဲဒီနရောက အစိုးရဘကျ ဘာမှမလုပျတော့ ပွညျသူတှတေောငျးဆိုလို့ ကနြျောတို့လုပျတာပဲ။ အစိုးရအုပျခြုပျရေးအဖှဲ့နဲ့လညျး ပေါငျးပွီး ညှိနှိုငျးတာအပွငျ လှတျတျောအမတျတှလေညျး သိတယျ။ လုပျသငျ့ပါတယျလို့လညျး သူတို့ပွောခဲ့တာရှိတယျ။ ဒါပမေယျ့ တပျဘကျက ခဏခဏလာပွောတော့ အစကဆကျလုပျမယျလို့ စဉျးစားသေးတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဆကျလုပျရငျ နောကျဆကျတှဲ ပွဿနာဖွဈလာမှာ ကနြျောတို့ မလိုလားဘူး ။ ကနြျောတို့ ဒါလုပျတာ အရေးယူလို့တောငျရတယျလို့ တပျဘကျက အဲလောကျ ထိပွေ တယျ”ဟု ကအေိုငျစီသို့ပွောသညျ။
“အစိုးဘကျက လုပျတာရှိရငျ ကနြျောတို့ကလညျး မလုပျပါဘူး။ အခုက ဘယျသူမှမလုပျလို့ ကနြျောတို့ လုပျတာ အမှနျဆိုရငျ ကနြျောတို့နဲ့ညှိနှိုငျးလို့ရတာပဲ။ ဒီရောဂါကို ကာကှယျဖို့ တဈကမ်ဘာလုံးက လုပျဆောငျနတောပဲ နိုငျငံ ရေးအမွတျထုတျဖို့လို့ ကနြျောတို့မှာ စိတျဆန်ဒမရှိဘူး။ ကနြျောတို့ ဒီလိုလုပျတာ မကွိုကျတာဟာ အဲဒီက ကနြျောတို့ ကရငျလူထုတှကေို ရောဂါကူး စတောလားလို့ ကနြျောတို့က သံသယဖွဈမိတယျ” ဟု ခရိုငျအတှငျး ရေးမှူး စောစိုးမွငျ့က ဖွညျ့စှကျပွောသညျ။
လကျရှိဖွဈပျေါနသေညျ့ အဆိုပါကနျ့ကှကျမှုမြားနှငျ့ပတျသကျပွီး အရှတေ့ောငျတိုငျးစဈဌာနခြုပျ ပွောခှငျ့ရ ဗိုလျမှူးကွီး မောငျမောငျလတျကို ဆကျသှယျမေးမွနျးရာ၌ “ အဲဒီနရောကို လကျနကျကိုငျပွီးဝငျလို့မရဘူး။ ယူနီဖောငျးဝတျပွီး ဝငျလို့မရ ဘူး။ အဲဒီအတှကျကွောငျ့ ကနျ့ကှကျတာဖွဈပါလိမျ့မယျ”ဟု ကအေိုငျစီသို့ ယနတှေ့ငျ ပွနျလညျပွောဆိုသညျ။
ထို့အပွငျ COVID-19 ရောဂါကာကှယျထိနျးခြုပျရေးဆိုငျရာ လုပျငနျးမြားကို တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့ အစညျးမြား အခွစေိုကျရာဒသေမြားတှငျ ဆောငျရှကျနိုငျရနျရညျရှယျပွီး “Covid -19 ကာကှယျထိနျးခြုပျကုသရေးနှငျ့ စပျလဉျြး၍ တိုငျးရငျး သားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ ညှိနှိုငျးပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးကျောမတီ”ကို ဖှဲ့စညျးလိုကျကွောငျး မွနျမာအစိုးရ သမ်မတရုံးက ဧပွီလ ၂၇ ရကျနေ့ ရကျစှဲဖွငျ့ ကွညောခကျြ ထုတျပွနျခဲ့သေးသညျ။ http://kicnews.org/2020/04/%e1 %80%90%e1%80%95%e1%80%b9%e1%80%99%e1%80%b1%e1%80
ရခိုငျပွညျနယျ၊ ကြောကျဖွူမွို့နယျ၊ အထှထှေအေုပျခြုပျရေးမှူးခွံဝငျးအတှငျးရှိ ခရိုငျ ရဲတပျဖှဲ့မှူးရုံးအနီးမှာ ဧပွီ ၂၈ ရကျ မနကျက အဝေးထိနျးရီမုမိုငျး တလုံးတှရှေိ့လို့ လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့က ရှငျးလငျးခဲ့ရပါတယျ။ ကြောကျဖွူမွို့ အထှထှေအေုပျခြုပျ ရေးမှူးရုံးမှ တာဝနျရှိသူတဦးက “တှတေ့ာကတော့ မနကျ ၁၁ နာရီခှဲမှာပါ။ အဲဒီဟာကို ကြောကျဖွူမွို့မှာရှိတဲ့ လုံခွုံရေး ဆောငျ ရှကျနတေဲ့ တပျကနပွေီးတော့ ၁၂ နာရီဝနျးကငျြလောကျမှာ လာပွီးတော့ရှငျးလငျးရေးလုပျဆောငျခဲ့တယျ။ သူတို့ ပွောတာက တော့ အဝေးထိနျးရီမုမိုငျးအမြိုးအစားဖွဈတယျ လို့ပွောတယျ။ PPC ပိုကျနဲ့လုပျထားတဲ့ အခငျြး ၅ လက်မ၊ အရှညျ ၆ လက်မ လောကျတော့ရှိတယျ”လို့ ပွောပါတယျ။
ဒီကိစ်စအသေးစိတျသိရှိနိုငျဖို့ ကြောကျဖွူမွို့နယျရဲတပျဖှဲ့မှူး ရဲမှူးအောငျမျောကို ဆကျသှယျမေးမွနျးခဲ့ပမေဲ့ ဖုနျးကိုငျဖွဆေိုခွငျး မရှိခဲ့ပါဘူး။ ကြောကျဖွူမွို့နယျ အထှထှေအေုပျခြုပျရေးမှူးရုံးခွံဝငျးအတှငျးမှာ ၂၀၁၉ ခုနှဈ ဖဖေျောဝါရီ ၂၆ ရကျကလညျး အမှိုကျပုံးမီးရှို့ရာက ဗုံးပေါကျကှဲမှုဖွဈပှားခဲ့ကာ ဝနျထမျး ၈ ဦးဒဏျရာရခဲ့ပါတယျ။ အလားတူ ၂၀၁၉ ခုနှဈ ဧပွီလ ၂၄ ရကျနေ့ ကလညျး ဒုခရိုငျအုပျခြုပျရေးမှူးနအေိမျအနီးမှာ ထောငျထားတဲ့ရီမုမိုငျး ၁ လုံး တှရှေိ့ခဲ့ပွီး မိုငျးရှငျးလငျးရေးအဖှဲ့က လာရောကျ ရှငျးလငျးပေးခဲ့ရပါတယျ။ http://burmese.dvb.no/archives/385002
စဈဘေးရှောငျမြားနှငျ့ ပလကျဝဒသေခံမြားအတှကျ အထောကျအပံ့ပစ်စညျးမြားအဖွဈ ဆနျအိတျနှငျ့ အခွားစားသောကျကုနျ ပစ်စညျးမြား ပလကျဝမွို့သို့ ဧပွီ ၂၈ ရကျနကေ့ ထပျမံရောကျရှိသှားခဲ့ကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။ အဆိုပါရောကျရှိလာသညျ့ ပစ်စညျးမြားမှာ ဆနျအိတျ ၂၀ဝဝ နှငျ့ အခွားစားသောကျကုနျပစ်စညျးမြားဖွဈပွီး ယငျးနတှေ့ငျပငျ တပျမတျောရဟတျယာဉျနှငျ့ ကွကျဥနှငျ့ကွကျသှနျနီမြားကို ပလကျဝသို့ ပို့ဆောငျပေးခဲ့သညျဟု တပျမတျော ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဗိုလျမှူးခြုပျဇျောမငျးထှနျး က ပွောသညျ။“နောကျထပျပို့ဖို့လညျးရှိသေးတယျ။ WFP ရဲ့ဟာတှထေပျပို့မယျ။ မနကေ့ ညနကေ ပို့ရငျးတောငျမှပဲ WFP ကား အပဈခံရ တာရှိသေးတယျ။ ယာဉျတနျးနဲ့ပို့တာမှာ WFP ကားတှလေညျးပါတယျ” ဟု ၎င်းငျးကပွောသညျ။
ယခု ရိက်ခာနှငျ့အသုံးအဆောငျပစ်စညျးမြားတငျဆောငျလာသော ယာဉျတနျးသညျ ဧပွီလ ၂၅ ရကျနကေ့ မတူပီမွို့မှ စတငျ ထှကျခှာလာရာ ဆမီးသို့ ရောကျရှိပွီးနောကျ ရာသီဥတုဆိုးရှားပွီး မိုးသညျးထနျစှာရှာသှနျးမှု အခွအေနမြေားအပွငျ ပဈခတျမှု မြားလညျး ဖွဈခဲ့ပျေါခဲ့၍ ဆမီးတှငျ ရပျနားနခေဲ့ရသေးသညျ။ ပလကျဝမွို့အနီးတဝိုကျတှငျ တပျမတျောနှငျ့ AA တို့ ဖွဈပှား သောတိုကျပှဲမြားကွောငျ့လညျး ကုနျစညျစီးဆငျးမှုမရှိသဖွငျ့ ဈေးနှုနျးမြား အဆမတနျမွငျ့တကျပွီး ဒသေခံပွညျသူ၊ အစိုးရ ဝနျထမျးမြားနှငျ့ စဈဘေးရှောငျမြားမှာ စားသောကျရေး အခကျအခဲမြားကွုံတှနေ့ရေသညျမှာ လအတနျကွာပွီဖွဈသညျ။
ခငျြးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ လြှပျစဈဝနျကွီး ဦးစိုးထကျက “အခုက အားလုံးက ဝယျစရာလညျးမရှိ၊ စားစရာလညျး မရှိ ဖွဈနတော လေ၊ အဲတာကွောငျ့ ကနြျောတို့က IDP Camp မှာတငျရှိတဲ့သူတှတေငျ အဆငျမပွတေော့ဘူး။ မွို့ပျေါ ရပျကှကျလေးခုရှိတယျ၊ နောကျတခါ ဝနျထမျးတှရှေိတယျ။ အဲဒါတှကေိုပါ ဒီတခေါကျပို့တဲ့ဟာကတော့ ပွညျသူတှေ လှူဒါနျးတာဖွဈတဲ့အတှကျ အခမဲ့ တပတျစာပေးခိုငျးထားပါတယျ။ ဒီနစေ့ပေးနပွေီခငျဗြ”ဟုပွောသညျ။
ပလကျဝမွို့နယျသညျ ရပျကှကျနှငျ့ကြေးရှာပေါငျး ၄၀ဝ ကြျောဖွငျ့ ဖှဲ့စညျးထားပွီး ခငျြးတိုငျးရငျးသားမြားအပွငျ ရခိုငျတိုငျးရငျး သားမြားအခြို့ပါ နထေိုငျပွီး လူဦးရေ ၁ သိနျးကြျောရှိကွောငျး သိရသညျ။ တပျမတျောနှငျ့ AA တို့အကွား တိုကျပှဲမြားကွောငျ့ ပလကျဝမွို့ပျေါတှငျ လာရောကျခိုလှုံနသေော စဈဘေးရှောငျပွညျသူ ၃၆၀ဝ ခနျ့ရှိကွောငျး သိရသညျ။ https://burma.irraw addy.com/news/2020/04/30/221771.html
တရုတျနိုငျငံမှ မွနျမာနိုငျငံတှငျးသို့ ပွနျလညျဝငျရောကျလာသညျ့ မွနျမာနိုငျငံသားအရအေတှကျသညျ ဧပွီ ၁၆ မှ ၂၇ နထေိ့ စုစုပေါငျး ၃၇၉၁ ဦးရှိပွီဖွဈကွောငျး ကခငျြပွညျနယျလူဝငျမူကွီးကွပျရေးနှငျ့လူ့စှမျးအငျဝနျကွီး ဦးဇျောဝငျးထံမှ သိရသညျ။ လှယျဂယျြနှငျ့ ကနျပိုငျတီ နယျစပျဂိတျမြားမှ ဝငျရောကျလာသော အဆိုပါ ပွညျတျောပွနျမြားတှငျ ကခငျြပွညျနယျ ဒသေခံဦးရေ ၂၈၉၇ ဦးဖွဈပွီး ကခငျြပွညျနယျ ပွငျပဦးရေ ၈၉၄ ဦးဖွဈကွောငျး ကခငျြပွညျနယျလူဝငျမှုကွီးကွပျရေးနှငျ့ လူ့စှမျးအားဝနျကွီး ဦးဇျောဝငျး ပွောသညျ။
“ကခငျြပွညျနယျပွငျပကလူတှကေိုတော့ လှယျဂယျြမှာဘဲ Q လုပျထားတာဖွဈတယျ။ အဲလိုလုပျထားတဲ့နရောမှာ ၂ ပိုငျးရှိ တယျ။ လှယျဂယျြမှာတော့ လှယျဂယျြဒသေခံတှေ နောကျပွီးတော့ ကခငျြပွညျနယျပွငျပကလူတှကေို လုပျထားတာဖွဈတယျ။ ဒါပမေယျ့ လှယျဂယျြမှာလုပျထားတဲ့ Q နရောကလညျး အမြားဆုံး လူဦးရေ ၅၀ဝ လောကျဘဲဆနျ့တယျ။” ဟု ပွောသညျ။
သို့သျောလညျး စဈကိုငျးတိုငျးအစိုးရ၏ဆကျသှယျလာမှုကွောငျ့ လူဦးရေ ၂၀ဝ ခနျ့ကို ပွညျနယျကြျောကာ ပို့ဆောငျလိုကျပွီဟု သိရသညျ။ လှယျဂယျြတှငျ Q နရောမလောကျမညျကို စိုးရိမျသဖွငျ့ ဗနျးမျောခရိုငျမှ အခွားနရောတှငျ ပွနျလညျပွငျဆငျနေ သညျဟုလညျး သိရသညျ။ ကခငျြပွညျနယျ နယျစပျဂိတျမြားဖွဈသညျ့ လှယျဂယျြ နှငျ့ ကနျပိုငျတီဂိတျမြားတှငျ ဧပွီလ ၁၆ ရကျ နမှေ့ ဧပွီလ ၂၇ ရကျနထေိ့ လှယျဂယျြဂိတျမှဝငျရောကျလာသူ ကခငျြပွညျနယျ ပွငျပ စုစုပေါငျး ၈၃၄ ဦး၊ ကခငျြပွညျနယျ ပွညျတှငျး ၂၆၈၅၊ စုစုပေါငျး ၃၅၁၉ ရှိပွီး၊ ကနျပိုငျတီဂိတျမှ ဝငျလာသူ ကခငျြပွညျနယျပွငျပ ၆၂ ဦး၊ ကခငျြပွညျနယျ ပွညျတှငျး ၂၁၂ ဦး စုစုပေါငျး၂၇၄ ဦးရှိကွောငျး သကျဆိုငျရာဌာနမှသိရသညျ။
“ကနြျောတို့ Covid-19 နှငျ့ တိုကျရိုကျသကျဆိုငျတဲ့ ကိစ်စကတြော့သင်ျကွနျကာလအတှငျး Home Stay လုပျဖို့ဆိုတဲ့ကိစ်စမှာ ပွညျထောငျစုကနညှေနျကွားလာတဲ့တိုငျး မိသားစုကိုဘယျလောကျထောကျပံ့ပါဆိုပွီး ပွောလာတဲ့ခါမှာ ကခငျြပွညျနယျ တဈခုလုံးမှာတော့ သိနျးပေါငျး ၁ သောငျး ၆ ထောငျလောကျကူညီခဲ့တယျ။ တဈဖကျမှာလညျး Covid-19 နဲ့ပတျသကျပွီးတော့ ကုသရေးမှာကောထိနျးခြုပျရေးမှာကော ကာကှယျရေးမှာကော ကနြျောတို့ ပွညျနယျအတှငျးမှာ ကြောကျမကျြအဖှဲ့ကလညျးသိနျး ၂ ထောငျ လှူထားတာလညျးရှိပါတယျ။ နောကျထပျလှူတဲ့သူတှလေညျး ရှိတော့ ပွညျထောငျစုက နညှေနျကွားလာလို့ ရှိရငျတော့ ဆကျပွီးစီမံဆောငျရှကျသှားဖို့တှရှေိပါတယျ။” ၎င်းငျးကဆိုသညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2020/04 /28/%e1%80%9c%e1%80%bd%e1%80%9a%e1%80%ba%e1%
ထိုငျး-မွနျမာနယျစပျ ကရငျပွညျနယျမွဝတီ မွို့အမှတျ ၅ ရပျကှကျတှငျ နိုငျငံတျောအစိုးရမှ အခွခေံလူ တနျးစားမြားအတှကျ ထောကျပံ့သညျ့ ဆနျအပါအဝငျ စားနပျရိက်ခာ ၅ မြိုးမရရှိသူ အိမျထောငျ ၅,ဝ၀ဝ ကြျောကနျြရဈခဲ့သဖွငျ့ ရပျကှကျ အုပျခြုပျ ရေးမှူးရုံးရှတှေ့ငျ ယမနျနေ့ (ဧပွီ ၂၉ ရကျ)က လူဦးရေ ၂၀ဝ ခနျ့ လူစုလူဝေးဖွငျ့ရောကျရှိလာပွီး ရပျကှကျတာဝနျရှိသူထံ လာရောကျအသိပေးမှု ဖွဈပှားခဲ့သညျဟု သိရသညျ။ Covid -19 အရေးပျေါကာလ သင်ျကွနျပိတျရကျအတှငျး ပုံမှနျဝငျငှမေရှိသူ အခွခေံလူတနျးစားမြားအား နိုငျငံတျောမှ ဆနျ၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ၊ ကွကျသှနျ စသညျ့ စားနပျရိက်ခာမြားပေးနိုငျရနျအတှကျ ရာအိမျမှူး ၊ ဆယျအိမျမှူးမြားက ရပျကှကျအလိုကျ စာရငျးကောကျယူကွရာ မွဝတီမွို့ အမှတျ ၅ ရပျကှကျအတှငျး အိမျထောငျစု ၇,၂၀၂ စာရငျးကောကျယူရရှိခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
သို့သျောလညျး နိုငျငံတျောအစိုးရ၏ထောကျပံ့မှုမြား ရောကျရှိပွီး ဖွနျ့ဝသေောအခါ အိမျထောငျစု ၁,၂၀ဝ အတှကျသာပါဝငျပွီး ကနျြအိမျထောငျစုမြားမှာ မရရှိကွသညျ့အတှကျ ရပျကှကျရုံးသို့ ယခုလို လာရောကျ တငျပွကွခွငျးဖွဈကွောငျး ထောကျပံ့မှု ရိက်ခာမရရှိသညျ့ အိမျထောငျစုမြားက ပွောသညျ။ အမှတျ ၅ ရပျကှကျ ဆငျးရှလေီလမျးတှငျနထေိုငျပွီး မုနျ့ဟငျးခါးရောငျးခြ နသေူ မဖွူဝငျးက “အစိုးရက ပေးတာတော့ လိုခငျြတာပေါ့။ ယောကျြား အလုပျရပျနားထားရ လို့ဝငျငှမေရှိခြိနျမှာ အထောကျ အကူဖွဈတာပေါ့။ ခုတော့ မိသားစုတှအေခကျအခဲဖွဈနရေပါတယျ”ဟု ပွောသညျ။
ယခုကိစ်စနှငျ့ပတျသကျ၍ အမှတျ ၅ ရပျကှကျ အုပျခြုပျရေးမှူးဦး အောငျဝငျးက“ကနြျောတို့ ရပျကှကျ ရာ အိမျမှူးတှကေို ဧပွီ ၇ ရကျနကေ့ ညတှငျးခငျြးစာရငျးကောကျခိုငျးပါတယျ။ ၈ ရကျနေ့ မနကျ ၅နာ ရီထိ စာရငျးလကျခံ၊ အပွီးသတျပွီးမှရုံး စာရေး ကိုအပျကာ အိမျပွနျခဲ့ပါတယျ။ ၈ ရကျနမေ့နကျ ၁၁ နာရီခှဲ အမှီ ရုံးစာရေးက ဒီစာရငျးတှကေို မွို့နယျကိုတငျနိုငျမယျလို့ မြှျောလငျ့ခဲ့တာပါ။ အခုတော့ စာရေး က မွို့နယျကို မတငျထားတော့ တကယျ့တကယျမှာ မွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူး ခနျ့မှနျး တငျလိုကျတဲ့ စာရငျး အရသာ ရရှိခဲ့တာပါ။ ကနြျောတို့ကောကျယူထားတဲ့ စာရငျးတှကေ ပွညျထောငျစုအဆငျ့ကို မရောကျသှား ဘူး လို့သိရပါတယျ” ဟု ပွောသညျ။ http://kicnews.org/2020/04/%e1%80%b1%e1%80%91%e1%80%ac%e 1%80%80%e1%80%b9%e1%80
ကခငျြပွညျနယျ တရုတျတဈသြှူးငှကျပြောခွံတဈခုတှငျ အလုပျလုပျကိုငျနကွေသညျ့အလုပျသမားအခြို့ လုပျခလစာ ရရှိရနျ သကျဆိုငျရာသို့ တိုငျကွားသှားမညျဖွဈကွောငျး အလုပျသမားမြားထံမှ သိရသညျ။
ကခငျြပွညျနယျ ဝိုငျးမျောမွို့နယျ၊ ဒိနျဂနျြယနျအတှငျးရှိ ပါဝါဖိုကျစတားကုမ်မဏီတှငျ အလုပျလုပျကိုငျနကွေသညျ့ အလုပျသမား အခြို့ တဈသြှူးငှကျပြောခုတျပွီးသှားသျောလညျး ကုမ်မဏီမြားနှငျ့ လုပျခလစာညှိနှိုငျးရာတှငျ ယနခြေိ့နျထိ အဆငျမပွသေညျ့ တှကျ လုပျခလစာရရှိရနျ ဝိုငျးမျော အထှထှေအေုပျခြုပျရေးရုံးသို့ စာတငျမညျဖွဈကွောငျး အလုပျသမားမြားအဖှဲ့မှ ဦးဆနျးထှေး က ပွောသညျ။
“ကငျြစားသမားတှကေ ကငျြနဲ့လိုခငျြတယျ လောပနျးတှကေတော့ ကီလိုနဲ့ပေးမယျဆိုကွတော့ လုပျခလစာညှိပေးနတော ခုခြိနျထိတော့အဆငျမပွဘေူး။ လောပနျးတှကေ ခုဆိုပွနျတော့မယျပွောလို့ ကနြျောတို့ဒါဆိုရငျမဖွဈဘူး ညှိနှိုငျး ဆောငျရှကျပေး မှဘဲဖွဈတော့မယျလို့ ညှိပေးနတောအဆငျမပွဘေူး။ လောပနျးတှကေိုလညျးပွောထားတယျ ခငျမြားတို့လုပျအားခတှကေို ရှငျးပေးပွီးမှပွနျကွပါလို့ပွောတော့ သူတို့က ကနြျောတို့လညျး ကိုယျ့လမျးကိုပွနျရမှာဘဲ မရှငျပေးတာမဟုတျဘူး။ ရှငျးပေး တာကို သူတို့လကျမခံမှတော့ ကနြျောတို့က ပွနျစရာရှိတာပွနျရမှာဘဲဆိုပွီး ပွနျပွောလာကွတယျ။” ဟု ဒိနျဂနျြကြေးရှာအုပျခြုပျ ရေးမှူး ဦးနျောဆနျ့ ပွောသညျ။
အဆိုပါလုပျခလစာညှိနှိုငျးဆောငျရှကျမူနဲ့ ပတျသကျပွီး ဒိနျဂနျြအုပျခြုပျရေးဘကျမှ ညှိနှိုငျးဆောငျရှကျပေးနသေညျမှာ သုံးကွိမျ တိုငျတိုငျညှိနှိုငျးပေးပွီးဖွဈသျောလညျး ဆကျလကျ ညှိနှိုငျးမညျ့အကွိမျတှငျ အဆငျပွမေူမရှိပါက အုပျခြုပျရေးဘကျမှ သကျဆိုငျ ရာ ဝိုငျးမျောမွို့နယျ အထှထှေအေုပျခြုပျရေးဦးစီးဌာနသို့သာ လှဲပွောငျးပေးတော့မညျဖွဈကွောငျး ဒိနျဂနျြအုပျခြုပျရေးမှူး ဦးနျောဆနျ့ကပွောသညျ။
ဒိနျဂနျြကြေးရှာတှငျး တရုတျတဈသြှူးငှကျပြောစိုကျသညျ့ ကုမ်မဏီစုစုပေါငျး ၄ ခုရှိပွီး စိုကျပြိုးထားသညျ့မွဧေက ၇၀ဝ၀ ကြျော ခနျ့ရှိသညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2020/04/29/%e1%80%9d%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80
သမ်မတ၏ လှတျငွိမျးခမျြးသာခှငျ့ဖွငျ့ မကွာသေးခငျက လှတျမွောကျလာသညျ့ နာဂ အမြိုးသား ဆိုရှယျလဈ ကောငျစီ-ကပ်ပလနျ (NSCN-K) အဖှဲ့မှ ခေါငျးဆောငျဟောငျးမြားက COVID-19 ကာကှယျ ထိနျးခြုပျရေးနှငျ့ ပတျသကျပွီး လိုအပျပါက အစိုးရကို ကူညီဆောငျရှကျပေးမညျဖွဈကွောငျး ပွောသညျ။ ပွနျလညျလှတျမွောကျလာသော NSCN-K အဖှဲ့မှ ခေါငျးဆောငျဟောငျး ၅ ဦးအနကျ တဦးဖွဈသူ ဦးကြျောဝမျ့စိနျက ပွောဆိုခွငျး ဖွဈသညျ။ ၎င်းငျးက“အရပျသားပွညျသူလူထု တယောကျအနနေဲ့ ပွောရ မယျဆိုရငျတော့ အစိုးရကနေ ဘယျလိုလမျးညှနျပေးလဲ။ အဲ့ဒီအတိုငျးပဲ ကိုဗဈ ကာကှယျရေးအတှကျ လိုကျနာရမှာပဲ။ လိုအပျ ရငျတော့ ကူညီပေးမှာပေါ့။ ကိုဗဈ ကာလအတှငျးမှာ အခုအခြိနျအထိတော့ အခကျအခဲက မရှိသေးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ နောကျ ကွာလာရငျတော့ မပွောတတျဘူး”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။
အဆိုပါ ၅ ဦးကို မတရားအသငျး အဖှဲ့ပုဒျမ ၁၇(၁)ဖွငျ့ ခနီ်းတမွို့နယျတရားရုံးက ၂၀၁၉ ခုနှဈ နိုဝငျဘာ ၆ ရကျနကေ့ ထောငျဒဏျ ၂ နှဈစီ ခမြှတျခဲ့ခွငျးဖွဈပွီး ဧပွီလ ၁၇ ရကျတှငျ ပွနျလညျလှတျမွောကျလာခွငျးဖွဈသညျ။ ထို NSCN-K အဖှဲ့၏ ခေါငျးဆောငျ ဟောငျးမြားမှာ သာသနာရေး ဝနျကွီးဟောငျး ဦးကြျောဝမျ့စိနျ၊ သဈတောရေးရာဝနျကွီးဟောငျး ဦးအနျ့ကနျ၊ ပွညျထဲရေး ဝနျကွီးဟောငျး ဦးအောငျမိုငျး၊ NSCN-K အဖှဲ့ဝငျ ဒုဗိုလျမှူးကွီး အောငျစိုငျးနှငျ့ ဦးစောထိနျ တို့ဖွဈသညျ။ ပွနျလညျ လှတျမွောကျလာသူမြားတှငျ အထကျပါ ခေါငျးဆောငျ ၅ ဦးနှငျ့ အတူ ဗိုလျမှူး ကြှားရနျ၊ ဒုဗိုလျ စိုငျးအောငျ၊ အရာခံ ဗိုလျ ဝမျးလတျ၊ တပျကွပျ ထှနျးမွငျ့၊ တပျကွပျ စိုငျးဝမျ၊ တပျသား လနျကျော တို့လညျး ပါဝငျကွောငျး သိရသညျ။
NSCN-K အဖှဲ့ဝငျဟောငျး တဦးဖွဈခဲ့သညျ့ ဦးစောထိနျကလညျး“ဘာမှလုပျလို့ မရတော့ဘူးလေ။ အဖှဲ့အစညျးကလညျး ထုတျပဈလိုကျတယျ။ ထောငျလညျးကတြယျ ဆိုတော့။ ကနြျောတို့က ပွီးသှားပွီလေ။ ကနြျောတို့က ငွိမျးခမျြးရေး သှားခငျြတာ။ သူတို့ကမှ မသှားခငျြတာဆိုတော့ အဖှဲ့တှကှေဲ။ အဲဒီတော့ ကနြျောတို့ကို အဖှဲ့အစညျးကို ဆနျ့ကငျြတယျဆိုပွီး ထုတျပဈ လိုကျတယျ”ဟု ပွောသညျ။ နာဂ ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရဒသေ ဦးစီးဥက်ကဋ်ဌ ဦးကဆေိုငျက“Quarntine ၄၄ ယောကျရှိတယျ။ အမြားအားဖွငျ့ကတော့ အိန်ဒိယ ဘကျက လာတာမြားပါတယျ။ ပွညျတှငျးကလညျးရှိပါတယျ။ လရှေီးနဲ့ နနျးယှနျးမှာရှိတဲ့ ကြောငျးတှမှော Quarantine ထားပါတယျ။ လပာယျမှာတော့ ကြောငျးတှလေညျး ရှိတယျ။ ဆေးရုံမှာလညျး ရှိတယျ”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/30/221775.html
သာသနာညှိးနှမျးစမှေုပုဒျမ ၂၉၅(က)ဖွငျ့ တရားစှဲဆိုခံထားရသော မွဈကွီးနားမွို့ ဘူတာတိုကျတနျးတှငျ Covid-19 ပညာပေး ပနျခြီရေးဆှဲခဲ့ကွသညျ့ လူငယျသုံးဦး၏အမှု ပထမဆုံးရုံးခြိနျးတှငျ တဈဦးလြှငျငှကေပျြသိနျး (၁၀ဝ)စီဖွငျ့ အာမခံရရှိခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
အဆိုပါအမူတှငျ ပွညျနယျသာသနာရေးဦးစီးဌာနမှ ဒုညှနျကွားရေးမှူး တရားလိုပွုလုပျကာ Covid-19ကာကှယျရေး စုပေါငျး ပညာပေးအဖှဲ့မှ မစီစီလြာဂြာဆိုငျး၊ ကိုနျောထှနျးအောငျနှငျ့ ပနျးခြီရေးဆှဲသူ ကိုဇယြောနောငျတို့ သုံးဦးအား စှဲဆိုထားခွငျးဖွဈ သညျ။ “ဒီနကေ့တော့ ရာဇဝတျဆိုငျရာကငျြ့ထုံးနဲ့အညီ အာမခံလြှောကျတာဖွဈတယျ။ အမှုကတော့ ပွဈမူဆိုငျရာဥပဒပေုဒျမ ၂၉၅(က)နဲ့ စှဲထားတာဖွဈတယျ။ ၂၉၅(က)ကတော့ အမှုရုပျသိမျးလို့မရဘူး။ ကအြေေးလို့မရဘူး ရုတျသိမျးလို့မရဘူး။ ဒါပမေယျ့ ကမြတို့က ရာဇဝတျကငျြ့ထုံးဥပဒကေငျြ့ထုံးဥပဒေ ၄၉၇(၁)အရကတော့ အာမခံလြှောကျထားလို့ရတယျ။ ကမြတို့ အပိုငျး ကလညျး မဂြာဆိုငျး ဆိုလို့ရှိရငျ ငယျရှယျတဲ့အမြိုးသမီးတဈဦးဖွဈတယျ။ မိခငျအို၊ဖခငျအိုကို ပွုစုနရေတဲ့သူဖွဈတယျ။ ဇယြောနောငျလညျး အစာအိမျရောဂါခံစားနရေသူဖွဈတယျ ဆေးစာတှလေညျး တငျပွထားတယျ။ နောကျတဈခါ နျောထှနျးအောငျကလညျး သူငယျငယျကတညျးကနေ ရငျကပျြရောဂါရှိတယျ လကျရှိလညျး ဆေးရုံနဲ့ကုသနရေတာဖွဈတယျ။ သူတို့ဘကျကလညျး အထောကျအထားအပွညျ့အစုံတငျပေးတယျ။ တဈဖကျကလညျး ကမြတို့ကို ဒီအာမခံနဲ့ပတျသကျပွီး ဥပဒအေရာရှိ ဆုံးဖွတျခကျြဘဲလို့ပွောတယျ။ ဥပဒအေရာရှိဘကျကလညျး ဒီပုဒျမက သဒေဏျ၊ တဈသကျတဈကြှနျး ခမြှတျ လို့ရတဲ့ ဥပဒမေဟုတျဘူး။ သကျသအေထောကျထားခိုငျလုံတဲ့တှကျ အာမခံပေးခွငျးဖွဈတယျ။” ဟု တရားလှတျတျောရှနေ့ေ ဒျေါဒှဲဘူက ပွောသညျ။
အဆိုပါအမှုသညျ ဧပွီလ ၃ရကျနေ့ Covid-19 အန်တာရယျကာကှယျရေးတှငျ ပူးပေါငျးပါဝငျရနျရညျရှယျခကျြဖွငျ့ မွဈကွီးနား ဘူတာတိုကျတနျးတှငျ ပနျးခြီရေးဆှဲခဲ့ရာ ပနျးခြီတှငျ သမေငျးတမနျပုံရေးဆှဲရာတှငျ သမေငျးတမနျ၏ဝတျရုံသညျ ဗုဒ်ဓဘာသာ ရဟနျး၏ သင်ျကနျးနဲ့တူညီမှုရှိသညျဟုဝဖေနျမူမြားစှာ ရှိခဲ့ပွီးနောကျ ပွညျနယျသာသနာရေးဦးစီးဌာနမှ ဒုညှနျကွားရေးမှူး ဦးထှနျးမွငျ့မှ တရားလိုပွုလုပျကာ စှဲဆိုခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ သာသာနာညိုးနှမျးစမေူပုဒျမ ၂၉၅(က)ပွဈမှုသညျ ထောငျဒဏျ ၂ နှဈ ဖွဈစေ၊ ငှဒေဏျဖွဈစေ၊ ဒဏျနှဈရပျစလုံးဖွဈစေ ခမြှတျနိုငျကွောငျး ဥပဒတှေငျ ဖျောပွထားသညျ။ https://burmese.kachinn ews.com/2020/04/30/covid19%e1%80%95%e1%80%8a%e1%80%ac%e1%80%9
Covid – 19 လူနာ စတငျတှရှေိ့ရာ တီးတိနျမွို့နယျ ကပျတဲလျကြေးရှာကို သှားလာမှု ကနျ့သတျ (Lock Down ခြ)လိုကျသဖွငျ့ ယငျးရှာမှ စားသောကျကုနျ ဝယျယူနရေသညျ့ ဟီးရနျအှယျကြေးရှာအဖို့ ကုနျပွတျလပျမညျ့ အနအေထားဖွဈနကွေောငျး သိရ သညျ။ ကပျတဲလျတှငျ စတေနာ့ဝနျထမျးအဖွဈ ရောကျရှိနသေူ ဒေါကျတာ ဘှလေနျြမာနျက“ဒီရှာလေးက လော့ဒေါငျးခြ ထားတဲ့ ကပျတဲလျကနေ နှဈမိုငျသာသာပဲ ဝေးပါတယျ။ ရှာကို အဓိကသှားတဲ့လမျး နှဈကွောငျးရှိပါတယျ။ တဈခုက တီးတိနျ ကနေ ကပျတဲလျကို ဖွတျပွီးသှားတဲ့ကားလမျး၊ နောကျတဈခုက တီးတိနျကနေ လိုငျတှီး (၁၆ မိုငျခနျ့)၊ ပွီးတော့ လိုငျတှီး ဆိုတဲ့ ရှာကွီးကနဆေို ၁၂ မိုငျလောကျ ထပျသှားရပါတယျ။ ဆိုလိုတာကတော့ ဒီဟီးရနျအှနျရှာရဲ့ အဓိက ကုနျစညျက ကပျတဲလျက ဝယျယူရတာပါ” ဟု ဆိုသညျ။
ယခုအခါ ဟီးရနျအှယျကြေးရှာ စားသောကျကုနျပွတျလပျမှုမှာ နှဈပတျကြျောကွာရှိပွီ ဖွဈကွောငျး ဒေါကျတာဘှလေနျြမာနျက ပွောသညျ။ “သူတို့စားသောကျကုနျ ပွတျလပျတာက အရငျနှဈပတျတညျးက၊ဆိုတော့ သူတို့က ကပျတဲလျရှာ အုပျခြုပျရေးမှူး ကို ပစ်စညျးလာဝယျမယျဆိုပွီး ဖုနျးဆကျလာတယျ။ သူတို့က ရှာဆိုငျတှနေဲ့ နီးကပျပွီးလာဝယျမှာဆိုတော့ မဖွဈဘူး။ ဒီကိုလှူတဲ့
ပစ်စညျးတှကေို ခှဲပေးလိုကျတယျ။ ဒါပမေယျ့ လော့ဒေါငျးပွီးခါနီးဆိုတော့ အပိုထညျ့ပေးတာပေါ့။ အခု လော့ဒေါငျး ရကျတိုးလိုကျ တော့ စားသောကျကုနျတှေ ပွတျလောကျပွီ” ဟုပွောသညျ။
ဟီးရနျအှယျကြေးရှာအုပျခြုပျရေးမှူး ဦးဒိုခနျတှောငျက “ကပျတဲလျကို လာဝယျမယျဆိုရငျလညျး လော့ဒေါငျးဆိုတော့ အတား အဆီး တှရှေိတယျ၊ ဘယျလိုနညျးနဲ့မှ သှားလို့မရဘူး၊ အခကျအခဲတှရှေိတယျ။ ပွီးတော့ ကြေးရှာပွညျသူတှကေလညျး အစိုးရ ကို အကွောငျးကွားတဲ့အပိုငျးမှာ အားနညျးတယျထငျတယျ၊ တာဝနျရှိတဲ့လူကွီးတှကေလညျး ဂရုမစိုကျတာတော့ မဟုတျပမေဲ့ အလေးမထားဘူးဖွဈနတေယျ၊ ဒီခြိနျဆိုတောငျပျေါမှာက ငှကွေေးပွတျလပျတဲ့အ ခြိနျလညျးဖွဈတယျ၊ ကြှနျတျောတို့ရှာက ကပျတဲလျရှာကို ကုနျစညျဝယျလရှေိ့တယျ။ ခုက ငှရှေိရငျတောငျ ဖွတျသှားလို့မရဘူးဆိုတော့ အခကျအခဲအမြားကွီး ကွုံနေ ကွတယျ” ဟု ပွောသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-72470
၁၉။ ခငျြးပွညျနယျ တီးတိနျမွို့နယျ ကပျတဲလျကြေးရှာကို Lockdown ဖွရေနျ ပွညျထောငျစုသို့ တငျပွထားပွီး Case 1 လူနာ မှာလညျး ယနေ့ ဆေးရုံမှ ဆငျးမညျ
ခငျြးပွညျနယျ တီးတိနျမွို့နယျကပျတဲလျ ကြေးရှာကို Lockdown ဖွရေနျ ပွညျထောငျစုသို့ တငျပွထားပွီး Case 1 လူနာမှာ လညျး ယနဆေ့ေးရုံမှ ဆငျးမညျဟု ခငျြးပွညျနယျ လူမှုရေးဝနျကွီး ပေါငျလှနျမငျ့ထနျက ပွောကွားသညျ။
“ အခုလညျး ရှာမှာ ကနျ့သတျပွီးနတောပါ။ တဈရှာလုံးပိတျတာက တဈပိုငျးပါ။ Poairicw တှတေဲ့အိမျက သူ့အိမျနဲ့သူပေါ့။ တဈရှာလုံး ဖွလြှေော့ လိုကျတော့မယျ။ အမြိုးသားကျောမတီက အကွောငျးပွနျမှပဲ အဖွရေမယျ။ ပွညျထောငျစုကို တငျပွထားတယျ။ Case 1 က နှဈခါ Negative ဆိုရငျ ထှကျလို့ ရပွီလေ။ ထှကျပွီးရငျ Home Qaurantine အနနေဲ့ တဈပတျလောကျနရေငျနပေေါ့။ သူ ကတော့ ပွီးသှားပွီ။ သူက Negative က နှဈ ကွိမျရှိသှားပါပွီ။
“ဟားခါးမှာ တှတေဲ့တဈယောကျကလညျး ကနျြးမာရေးကောငျးပါတယျ။ ဟားခါး က တဈယောကျကိုလညျး အခနျးမှာပဲ ထား လိုကျပါတယျ။ သူနဲ့ နောကျဆကျတှဲ ထိတှခေဲ့တဲ့ ရှဈယောကျလောကျတော့ရ ထားတယျ။ အဲဒီ ရှဈယောကျကို Quarantine ထားဖို့လုပျထားတယျ။ တီးတိနျကိစ်စနဲ့ ပတျသကျပွီး ဗဟုသုတရသှာတာပေါ့။ Case 1 က ခွောကျကွိမျမွောကျအထိ ဘာမှ မဖွဈဘဲ ဖြားလညျးမဖြားနာဘဲနဲ့ Positive ဖွဈတယျ။ https://news-eleven.com/article/171425
တိုကျပှဲတှပွေငျးထနျနတေဲ့ ရခိုငျပွညျနယျအပါအဝငျ ပွညျနယျ ငါးခုက ဒုက်ခသညျစခနျး ၁၇၀ ကြျောမှာ ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈ အသိ ပညာပေးရေးနဲ့ ကာကှယျရေးလုပျငနျးတှအေတှကျ ပွညျထောငျစုအစိုးရအဖှဲ့က ငှကေပျြ ၂ ဒဿမ ၄ ဘီလီယံ သုံးစှဲဖို့ စီစဉျ ထားပါတယျ။ ရခိုငျ၊ ရှမျး၊ ကခငျြ၊ ကရငျနဲ့ ခငျြး ပွညျနယျက စဈဘေးဒုက်ခသညျစခနျးတှမှော ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ အသိပညာပေး ရေးနဲ့ ကာကှယျရေးလုပျငနျးတှဆေောငျရှကျဖို့ အစိုးရက ကနဦး ကပျြ ၂.၄ ဘီလီယံ ခထြားပေးတယျလို့ လူမှုဝနျထမျး ကယျဆယျရေးနဲ့ ပွနျလညျနရောခထြားရေး ဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒေါကျတာ ဝငျးမွတျအေးက RFA ကိုပွောပါ တယျ။
ဗိုငျးရပျဈပိုးအန်တရာယျ ကာကှယျဖို့ လကျမကွာခဏ ဆေးဖို့လိုအပျတာကွောငျ့ ဒီငှတှေနေဲ့ ရအေခကျအခဲရှိနတေဲ့ စခနျးတှမှော ရရှေိရေးကို အထူး ဦးစားပေး ဆောငျရှကျသှားမယျလို့ ဝနျကွီး ဒေါကျတာဝငျးမွတျအေး က ပွောပါတယျ။“စီမံခကျြထဲမှာ ရေ က အရေးကွီးဆုံးပဲ ဒီကိစ်စက လကျဆေးရမှာလေ။ တကိုယျရေ သနျ့ရှငျးရေး အရေးကွီးတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ ရရေရှိရေးကို ဒီစီမံ ခကျြထဲမှာအဓိကပါတယျ။ အကောငျအထညျစဖျောနပွေီ ရအေတှကျလုပျနပေါတယျ။ နောကျပွီးတော့ သတငျးစကား အတှကျလညျး Hand Speaker တှနေဲ့ရအောငျ လိုကျအျောနတေယျ။”ရခိုငျပွညျနယျက ဒုက်ခသညျစခနျးတှမှောဆိုရငျ ရရှေားပါးနလေို့ လကျမကွာခဏဆေးဖို့ ခကျခဲနတောကွောငျ့ ရောဂါပိုး ကူးစကျပွနျ့ပှားမှာကို လှတျတျောကိုယျစားလှယျတှနေဲ့ အရပျဘကျအဖှဲ့ တှကေ စိုးရိမျနကွေပါတယျ။
ဒီနညျးလမျးတှကေ အငျတာနကျ ပွနျဖှငျ့ပေးတာလောကျ ထိရောကျမှာ မဟုတျဘူးလို့ ပုဏ်ဏားကြှနျးနဲ့ ရသတေ့ောငျမွို့နယျ အမြိုးသားလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးခငျမောငျလတျက ပွောပါတယျ။“စာမြားမြားရိုကျလို့ ရတာလညျး မဟုတျဘူး။ ဆနျ့ တာလညျး မဟုတျဘူး။ အငျတာနကျနဲ့ ဆိုတော့ လူတိုငျးဆီကို ရောကျတယျလေ။ အငျတာနကျက အထိရောကျဆုံးပဲ။ အစိုးရ က ကူညီထောကျပံ့မှုတှေ မပွောနဲ့ အရပျသား အခငျြးခငျြးတောငျ တခြို့နရောတှသှေားလို့ လာလို့မရဘူး။”အစိုးရက သုံးစှဲ မယျ့ ၂.၄ ဘီလီယံဟာ အမရေိကနျဒျေါလာ ၁၇ သိနျးနီးပါး ရှိပါတယျ။ ဒီငှဟော ဒုက်ခသညျစခနျးတှကေို အသိပညာပေးရေးနဲ့ ရေ ရရှိရေးအပါအဝငျ ကာကှယျရေးလုပျငနျး လုပျဆောငျဖို့အတှကျ လုံလောကျတဲ့ ပမာဏ မဟုတျဘူးလို့ ဦးခငျမောငျလတျက ထောကျပွပါတယျ။
ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျးမှာတော့ တိုကျပှဲတှေ ငွိမျနတောကွောငျ့ ဒုက်ခသညျစခနျးတှေ ပိတျသိမျးထားလို့ ခှဲတမျးရတဲ့ အသုံး စရိတျနဲ့ ဒသေခံတှကေို နှာခေါငျးစညျးတှေ ဈေးပေါပေါနဲ့ ပေးတာမြိုးတှေ လုပျဆောငျဖို့ တိုကျတှနျးတယျလို့ ဇီဝိတ လူမှုကူညီ ရေးအသငျး ဥက်ကဋ်ဌ ဦးတငျမောငျသိနျးက ပွောပါတယျ။ အစိုးရက ခထြားပေးတဲ့ ငှနေဲ့ဆောငျရှကျမယျ့ လုပျငနျးစဉျတှေ ပွညျနယျအသီးသီးက ဒုက်ခသညျစခနျးတှကေို အမွနျဆုံးရောကျရှိနိုငျရေးနဲ့ ထိရောကျတဲ့ အစီအမံတှဖွေဈရေး လိုတယျလို့ စဈဘေးဒုက်ခသညျအရေး ကူညီဆောငျရှကျပေးသူတှကေ တိုကျတှနျးကွပါတယျ။ https://www.rfa.org/burmese/news/ covid-19-donate-refugees-camps-04282020035346.html
Covid-19 ရောဂါ ကာကှယျထိနျးခြုပျကုသရေး ဆောငျရှကျလကျြရှိရာ ထိုငျးပွနျ မွနျမာရှပွေ့ောငျးအလုပျသမားမြားကို ထိုငျး-မွနျမာနယျစပျ ဘုရားသုံးဆူရှိ မှနျပွညျသဈပါတီ ထိနျးခြုပျနယျမွသေို့ ဝငျရောကျခှငျ့မပွုကွောငျး မှနျပွညျသဈပါတီ ဗဟို ဌာနခြုပျက ဧပွီလ ၂၅ ရကျနတှေ့ငျ အမိနျ့ထုတျပွနျထားသညျ။ မှနျပွညျသဈပါတီ ပွညျတှငျးရေးရာဌာနတာဝနျခံ နိုငျဗညားလယျက “အစိုးရက ကနြျောတို့ကို အသိပေးလာတယျ၊ ဧပွီ ၃၀ လကုနျပွီးရငျ နရေပျပွနျလာမယျ့ ရှပွေ့ောငျး အလုပျ သမားတှကေို မွဝတီလမျးကွောငျးကနကွေိုဖို့ အစိုးရအစီအစဉျတှေ ခမြှတျထားပွီးပွီ၊ အဲဒါကွောငျ့ ဘုရားသုံးဆူ လမျးဘကျ ကနေ ပွနျမလာကဖို့၊ ကနြျောတို့ပါတီကိုလညျး ဝိုငျးဝနျးတားမွဈပေးဖို့ အကွောငျးကွားလာတယျ၊ အကယျ၍ နယျစပျ နရော အနှံ့ကနေ သူ့ပုံစံနဲ့သူ ဝငျလာခဲ့ရငျ ကိုဗဈရောဂါကာကှယျရေးအတှကျ ထိရောကျမှာမဟုတျဘူး၊ ထိနျးရလညျး ခကျပါလိမျ့မယျ”ဟု မှနျပွညျသဈ Facebook လူမှုကှနျရကျတှငျ မှနျဘာသာဖွငျ့ ရေးသားဖျောပွခဲ့သညျ။
မှနျပွညျနယျမှ ထိုငျးနိုငျငံသို့ ဆကျသှယျသှားလာရာတှငျ ခရီးအကှာအဝေး အတိုဆုံးလမျးဖွဈသညျ့ ဘုရားသုံးဆူနယျစပျသညျ တရားမဝငျ လမျးကွောငျးဖွဈသညျ့အားလြျောစှာ စာရှကျစာတမျး အထောကျအထားမဲ့သူမြားက ပှဲစားဖွငျ့ ဝငျထှကျသှားရာ လမျးကွောငျးတဈခုဖွဈနကွေောငျး သိရသညျ။ “ဒါကွောငျ့ မွဝတီလမျးကွောငျးတဈခုတညျးကနပေဲ ပွနျလာကွဖို့၊ မွဝတီ ရောကျရငျ အစိုးရအစီအစဉျနဲ့ ကွိုပေးမှာဖွဈပါတယျ၊ ပွီးတော့ သကျဆိုငျရာ ပွညျနယျတိုငျးတှမှောရှိတဲ့ Quarantine စခနျး တှကေို ဆကျလကျပို့ပေးမယျ” ဟု နိုငျဗညားလယျက ဆကျပွောသညျ။
ဘုရားသုံးဆူနယျစပျဂိတျမှပွနျလညျဝငျရောကျပါကလညျး တရားဝငျပွနျလညျဝငျရောကျခွငျးဖွဈစရေေးအတှကျ မွဝတီ နယျစပျ ဂိတျမှသာ ဝငျ/ထှကျစရေေး ပူးပေါငျး ကူညီဆောငျရှကျသှားရနျ မှနျပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ဝငျ လုံခွုံရေးနှငျ့ နယျစပျရေးရာဝနျကွီး ဗိုလျမှူးကွီးနထှေဋျဦးက ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျကိုယျစား လကျမှတျရေးထိုး၍ ဧပွီလ(၂၁) ရကျစှဲဖွငျ့ မှနျပွညျသဈပါတီသို့ အကွောငျးကွားစာပေးပိုခဲ့သညျ။ မွနျမာနိုငျငံသို့ ပွနျလိုသညျ့ ထိုငျးနိုငျငံရောကျ မွနျမာရှပွေ့ောငျးအလုပျသမားမြားအနဖွေငျ့ထိုငျးနိုငျငံဆိုငျရာ အလုပျသမားသံအရာရှိရုံး၏ Website ပျေါတှငျ တရားဝငျစာရှကျစာတမျး အထောကျအထားမရှိသူမြား လညျး စာရငျးပေးသှငျးထားနိုငျကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-72519
မွနျမာနိုငျငံ ရခိုငျပွညျနယျနဲ့ ခငျြးပွညျနယျတှမှော ဆကျဖွဈနတေဲ့ စဈရာဇဝတျမှုတှနေဲ့ လူသားထုအပျေါ ကြူးလှနျတဲ့ ရာဇဝတျမှုဆိုငျရာ စှပျစှဲခကျြတှကေို စုံစမျးစဈဆေးဖို့ ကုလသမဂ်ဂ အထူးကိုယျစားလှယျ ယနျဟီးလီက တောငျးဆိုလိုကျပါတယျ။ တကမ်ဘာလုံး COVID-19 ကပျရောဂါဘေး ရငျဆိုငျဖွရှေငျးနရေခြိနျမှာ မွနျမာစဈတပျကတော့ ရခိုငျပွညျနယျထဲက အရပျသား တှအေပျေါ ပဈမှတျထားတိုကျခိုကျမှုတှေ တိုးလုပျလာနတေယျလို့ မစ်စယနျဟီးလီက ဧပွီလ ၂၉ ရကျနမှေ့ာပဲ ပွောဆိုခဲ့တာပါ။
မွနျမာ့ လူ့အခှငျ့အရေးအခွအေနဆေိုငျရာ ကုလသမဂ်ဂ အထူးစုံစမျးစဈဆေးသူအဖွဈ သူ့ရဲ့တာဝနျ ပွီးဆုံးတော့မှာဖွဈတဲ့ ပါမောက်ခယနျဟီးလီက ရခိုငျ့တပျမတျော AA အပါအဝငျ လကျနကျကိုငျတပျဖှဲ့တှအေနနေဲ့ အပဈအခတျရပျစဲရေး တောငျးဆို ခကျြကိုလညျး အလေးမထားကွတဲ့အပွငျ မွနျမာတပျမတျောရဲ့လကျခကျြကွောငျ့ ရခိုငျနဲ့ ခငျြးပွညျနယျထဲက ပွညျသူတှေ အကွီးအကယျြ ထိခိုကျနရေတယျလို့လညျး ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။ လူသားခငျြးစာနာမှုနဲ့ ပတျသကျပွီး နိုငျငံတကာက စောငျ့ထိနျး ရမယျ့ အခွခေံပွဌာနျးခကျြတှနေဲ့ လူ့အခှငျ့အရေးတှကေို တပျမတျောက စနဈတကြ ခြိုးဖောကျနတေဲ့အတှကျ ရခိုငျနဲ့ ခငျြးပွညျနယျထဲက အရပျသားတှအေပျေါ ကြူးလှနျတဲ့ စဈရာဇဝတျမှုတှနေဲ့ လူသားထုအပျေါကြူးလှနျတဲ့ ရာဇဝတျမှုတှေ တိုးလာနတေယျလို့လညျး အထူးကိုယျစားလှယျ ယနျဟီးလီက ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
AA အပါအဝငျ လကျနကျကိုငျတပျဖှဲ့အားလုံး အရပျသားတှကေို ကာကှယျပေးဖို့လညျး သူက တိုကျတှနျးသှားပါတယျ။ ပဋိပက်ခ အဆုံးသတျရေးအတှကျ တာဝနျခံမှု တာဝနျယူမှုရှိဖို့ အလှနျအရေးကွီးတယျလို့လညျးပွောပါတယျ။ တာဝနျခံမှု၊ တာဝနျယူမှု မရှိတဲ့ မွနျမာတပျမတျောအနနေဲ့ ပွဈဒဏျကနေ ကငျးလှတျခှငျ့ရနတေဲ့အတှကျကွောငျ့လညျး မွနျမာအရပျသားတှအေနနေဲ့ တပျမတျောရဲ့ရညျရှယျခကျြနဲ့ ကြူးလှနျတဲ့ ရာဇဝတျမှုတှကေို ဆယျစုနှဈတှနေဲ့ခြီ ရငျဆိုငျခံစားနရေတယျလိုလညျး ပါမောက်ခ ယနျဟီးလီရဲ့ဒီကနထေု့တျပွနျခကျြမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။ ကုလသမဂ်ဂအဖှဲ့အစညျးတှအေနနေဲ့ ရခိုငျနဲ့ ခငျြးပွညျနယျထဲက အရပျသားတှကေို အကာအကှယျတိုးပေးဖို့လညျး မစ်စယနျဟီးလီက တိုကျတှနျးတောငျးဆိုထားပါတယျ။ https://burmese .voanews.com/a/myanmar-un/5397045.html
ရခိုငျပွညျနယျ၊ မငျးပွားမွို့နယျမှာ တပျမတျောနဲ့ ရက်ခိုငျ့တပျတျော (အအေေ)တို့ ဧပွီ ၂၈ ရကျနမှေ့ာ တိုကျပှဲပွငျးထနျဖွဈပှား ပွီးနောကျ တပျမတျောက တိုကျလယောဉျနဲ့ရော ရတေပျသင်ျဘောနဲ့ပါ ပူးပေါငျးတိုကျခိုကျခဲ့တယျလို့ ဒသေခံတှနေဲ့ လှတျတျော ကိုယျစားလှယျက ပွောပါတယျ။ မငျးပွားပွားမွို့နယျ တောငျပုတျကကြေေးရှာအနား ဖုံသာခြောငျးမှာ ဧပွီ ၂၈ ရကျ နလေ့ယျ ပိုငျးက တိုကျပှဲတှေ ပွငျးပွငျးထနျထနျဖွဈပှားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီနောကျပိုငျးမှာ တပျမတျောက င/စိုငျးရိုငျးတောငျတနျး တလြှောကျ တိုကျလယောဉျ ၂ စီးနဲ့ ပဈခတျတိုကျခိုကျခဲ့သလို ရတေပျကလညျး မငျးပွားမွို့ ကြိနျးတောငျတနျးကနေ အမွောကျနဲ့ ပဈခတျခဲ့တယျလို့ အမျးသားရှာက ကိုအမျးသားကွီးက ပွောပါတယျ။
“တိုကျပှဲဖွဈတာက ဖုံသာခြောငျးထဲက တောငျပုတျကကြေေးရှာအနားမှာဖွဈတာ။ မနကေ့ နလေ့ယျ ၂ နာရီ လောကျမှာဖွဈ တယျ။ တိုကျပှဲဖွဈလို့အပွီးမှာ ဖိုကျတာဂကျြတှနေဲ့ ဟတျစကီးတှနေဲ့ပဈတယျ။ ပွီးတော့ ရာမောငျတံတား အနားက ရတေပျကနပွေီးတော့လညျး ပဈခတျတယျ။ မငျးပွား ကြိနျးတောငျတနျးကနပွေီးတော့ အမွောကျကွီးတှနေဲ့ ဆကျတိုကျပဈခတျမှုတှေ လုပျတယျ။ အဲဒီမှာ မနကေ့ ကားသမား တယောကျ လကျနကျကညျြကလြို့ ဒဏျရာရတယျ” လို့ပွောပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ဧပွီ ၂၁ ရကျနကေ့ မငျးပွားမွို့နယျ ရာမောငျတံတားနားမှာ ပဈခတျမှုဖွဈလို့ CPS ပိုးသတျဆေးကုမ်ပဏီက ဆေး ပစ်စညျးတှေ သယျဆောငျလာတဲ့ မျောတျောယာဉျတစီး ပဈခတျခံရပွီး ယာဉျမောငျးတဦး သဆေုံးခဲ့ကာ တဦးကတော့ စဈတှေ ဆေးရုံမှာ သဆေုံးသှားခဲ့ပါတယျ။ http://burmese.dvb.no/archives/385109
နောကျကွောငျးမရှငျးတဲ့ တရုတျကုမ်ပဏီတှကေ ကရငျပွညျနယျအတှငျး ရှကေုက်ကိုမွို့သဈအပွငျ နောကျထပျ အလားတူ မွို့သဈ ၂ ခုကို တညျဆောကျနတေဲ့အတှကျ စိုးရိမျစရာဖွဈတယျဆိုတဲ့ စမျးစဈခကျြ စာတမျးတစောငျကို USIP လို့ချေါတဲ့ အမရေိကနျ ငွိမျးခမျြးရေး အငျစတီကြူက ဧပွီလ ၂၀ ရကျနကေ့ ထုတျပွနျပါတယျ။ မကွာသေးခငျ ကာလအထိ မွနျမာနိုငျငံ အစိုးရနဲ့ ကရငျအမြိုးသားလကျနကျကိုငျ အငျအားစုတို့အကွား တိုကျပှဲ ပွငျးထနျတဲ့ ထိုငျးမွနျမာနယျစပျ သောငျးရငျးမွဈ တလြှောကျမှာ အခုအခါ ဟိုတယျတှေ၊ ကာစီနို လောငျးကစားတှေ၊ ကှနျဒိုတိုကျခနျးတှေ အပွိုငျအဆိုငျပျေါထှကျလာနပေါ တယျ။ ဒီနရောတှဟော ရာဇဝတျနောကျကြောငျးမကငျးတဲ့ တရုတျကုမ်ပဏီတှကေ အဓိက ပါဝငျလုပျဆောငျနတေဲ့ လုပျငနျး တှဖွေဈပွီး နယျခွားစောငျ့ တပျဖှဲ့အဖွဈ မွနျမာစဈတပျရဲ့ လကျအောကျခံဖွဈနတေဲ့ ယခငျ DKBA နဲ့လညျး ညှိနှိုငျးဆောငျရှကျ နတောလို့လညျး ဆိုပါတယျ။
စိုးရိမျစရာကောငျးတာက ဒီမွို့သဈ တညျဆောကျနတေဲ့ တရုတျလူမြိုးတှဟော ဥပဒနေဲ့ မကိုကျညီတဲ့ လုပျငနျးတှနေဲ့ ပတျသကျနတေဲ့ လူဆိုးဂိုဏျးတှေ ဖွဈနပွေီး အဲဒီအထဲက အကွီးအကဲ တဦးရဲ့ နောကျကြောငျးကိုတော့ စာတမျးပါဝငျ ရေးသားသူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အမရေိကနျ အကွီးတနျး သံတမနျဟောငျး တဦးဖွဈတဲ့ Priscilla Clapp က VOA ကို အခုလို ရှငျးပွပါတယျ။ “ကမ်ဘောဒီးယားနိုငျငံမှာ သီဟာနုမွို့သဈထောငျတုနျးက သူခေါငျးဆောငျပွီး ရာဇဝတျမှုမြိုးစုံ ကြူးလှနျခဲ့ဖူးပါ တယျ။ နောကျဆုံး ဝနျကွီးခြုပျ ဟှနျဆနျက တရုတျရဲတပျဖှဲ့အကူအညီနဲ့ နှိမျနငျး ခဲ့ရတဲ့အထိပါဘဲ။ တရုတျရာဇဝတျဂိုဏျးတှေ လကျခကျြနဲ့ ကမ်ဘောဒီးယားရဲတှေ လမျးမတှပေျေါမှာ သဆေုံးခဲ့ရတဲ့ပုံတှေ အငျတာနကျ မှာတှနေို့ငျပါတယျ။ ကမ်ဘောဒီးယား ကနေ တပျခေါကျပွေးလာတဲ့ တရုတျတှကေ အခု ကရငျပွညျနယျမှာ မွို့သဈထောငျနကွေတာပေါ့။” ဒီအထဲက မွို့သဈတခု ဟာဆိုရငျ မွဝတီမွို့နယျက KNU ထိနျးခြုပျတဲ့ နယျမွထေဲမှာ ရှိပမေယျ့ KNU က ဘာကွောငျ့ ဒါကို မဟနျ့တားရသလဲဆိုတာ ဟာ ဝစေုရနလေို့လား စတဲ့ မေးခှနျးတှအေမြားကွီး မေးစရာရှိနသေလို တရုတျစီးပှားရေး သမားတှနေောကျကွောငျးကို KNU မသိလို့လညျး ဖွဈနိုငျတယျလို့ ရေးထားပါတယျ။
“ ဒီစီမံကိနျးတှဟော နိုငျငံတညျငွိမျရေးအတှကျ အကြိုးမရှိသလို ဒီမိုကရစေီရေးအတှကျလညျး အသုံးမကပြါဘူး။ လကျနကျနဲ့ ဗိုလျကစြိုးမိုးတဲ့ အာဏာရှငျစနဈကို အားဖွညျ့ပေးနတေဲ့ သဘောပါဘဲ။ အမရေိကနျအနနေဲ့လညျး ဒီကိစ်စကို သူ့အကြိုးစီးပှားလို့ သဘောထားစရာ အကွောငျးမရှိပါဘူး။ နောကျတခကျြက မွနျမာပွညျထဲမှာ တရုတျရာဇဝတျဂိုဏျးတှေ အခွစေိုကျပွီး လှုပျရှား မှာကို အမရေိကနျက စိုးရိမျနတောပါ။ အဲဒီလို တရုတျရာဇဝတျဂိုဏျး လှုပျရှားမှုတှကေ အမရေိကနျပွညျထောငျစု မှာလညျး ရှိနလေို့ဖွဈပါတယျ။ နိုငျငံတကာမှာ ကြူးလှနျတဲ့ ရာဇဝတျမှု တျောတျောမြားမြားဟာ သူတို့လကျခကျြပါ။” တရုတျတို့က ဒီ မွို့သဈတှဟော တရုတျပွညျရဲ့ ခါးပတျလမျး စီမံကိနျးနဲ့ ဆကျစပျနတေယျလို့ ပွောထားပွီး ဒီလုပျရပျဟာ မွနျမာနိုငျငံတှငျးနဲ့ နိုငျငံတကာမှာပါ တရုတျအစိုးရရဲ့ ဂုဏျသိက်ခာကို ထိခိုကျစမှောဖွဈပါတယျ။
တရုတျတို့ရဲ့ BRI ခါးပတျလမျး စီမံကိနျးအပျေါ ရာဇဝတျမှုအရိပျ ထငျဟပျလာနိုငျပွီး မွနျမာနိုငျငံက ဒီစီမံကိနျးတှကေို အခု မဟနျ့တားနိုငျဘူးဆိုရငျတော့ တရုတျအစိုးရသညျ မွနျမာနိုငျငံမှာ အနောကျနိုငျငံတှေ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှု မလုပျနိုငျတဲ့ အခွအေနေ မြိုးဖွဈအောငျ တမငျဖနျတီးနတေယျလို့ ယူဆစရာဖွဈနကွေောငျး အစီရငျခံစာမှာ ရေးသားထားပါတယျ။ https://burmese. voanews.com/a/chinese-building-up-new-town-in-karen/5398492.html
ခငျြးပွညျနယျ၏ မွို့တျော ဟားခါးမွို့တှငျ ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါ Covid-19 ကာကှယျရေးအစီအစဉျအဖွဈ နှာခေါငျးစညျး (Mask) မတပျဘဲ အပွငျထှကျသူမြားကို ဥပဒနှေငျ့အညီ အရေးယူဆောငျရှကျမှု ဧပွီ (၂၇) ရကျတှငျ စတငျလိုကျပွီဟုသိရသညျ။
ခငျြးပွညျနယျ Covid-19 ထိနျးခြုပျရေးနှငျ့ အရေးပျေါတုနျ့ပွနျရေးကျောမတီ၏ ကွီးကွပျမှုဖွငျ့ မွို့တှငျးနရော(၆)ခုတှငျ အဖှဲ့ခှဲ၍ စောငျ့ကွညျ့စဈဆေးခဲ့ကွသညျ။ ကနျြးမာရေးနှငျ့အားကစားဝနျကွီးဌာနနှငျ့ ပွညျနယျအစိုးရ အမိနျ့ထုတျပွနျခကျြအတိုငျး အိမျပွငျသို့ မလိုအပျဘဲ မထှကျကွရနျ၊ မဖွဈမနထှေကျမညျဆိုပါက နှာခေါငျးစညျး (Mask) တပျရနျ အသိပေးထားသညျ။ မလိုကျနာသူမြားကို ကူးစကျရောဂါထိနျးခြုပျရေးဥပဒဖွေငျ့ အရေးယူသှားမညျဟု ခငျြးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ လမျးပနျးဆကျ သှယျရေးဝနျကွီး ဦးရှထေီးအိုကပွောသညျ။
ဟားခါးလူငယျအဖှဲ့ခေါငျးဆောငျ ဆလိုငျးဗနျကငျြးထနျက “သူတို့ ကွိုတငျလညျးလုပျတာဆိုတော့လေ၊ အခုအစိုးရဖကျက ထုတျပွနျခကျြထုတျတာကလညျး ကွိုပွီးတော့ (၂) ရကျကို အသိပညာပေးမှုတှလေုပျပွီးမှ အရေးယူရမယျ့အပိုငျးမြိုးနဲ့ ဆောငျ ရှကျတဲ့အခါကတြော့ ပွညျသူအတှကျက အဲလောကျထိ အခကျအခဲမဖွဈလောကျပါဘူးလို့။ ကောငျးပါတယျ’’ဟုပွောသညျ။ မညျသူမဆို ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာန၏ ညှနျကွားခကျြမြား လိုကျနာရနျပကျြကှကျကွောငျး ပွဈမှုထငျရှားပါက ၁၉၉၅ ခုနှဈ ကူးစကျရောဂါမြားကာကှယျနှိမျနငျးရေး ဥပဒအေရအရေးယူခံရမညျဖွဈပွီး ထောငျဒဏျ (၆)လ ဖွဈစေ၊ ဒဏျငှေ (၅၀ဝဝဝ) ထိဖွဈစေ၊ ဒဏျနှဈရပျလုံးဖွဈစေ ခမြှတျနိုငျသညျဟုသိရသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-72473
၂၆။ ညှနျကွားခကျြမြား လိုကျနာမှုရှိမရှိ စိစဈနစေဉျ မွဝတီမွို့ရှိ စကျရုံအလုပျရုံမြား လုပျငနျးလညျပတျမှု ယာယီ ရပျဆိုငျးထား
ထိုငျး-မွနျမာ နယျစပျ ကရငျပွညျနယျ မွဝတီမွို့တှငျ အသေးစား၊ အလတျစားစကျရုံအလုပျရုံမြားကို ကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာန၏ ထုတျပွနျခကျြမြားအား လိုကျနာမှုရှိမရှိ စိစဈဆောငျရှကျနစေဉျကာလအတှငျး လုပျငနျးလညျပတျမှု ယာယီရပျဆိုငျးထားရမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
အဆိုပါ စကျရုံအလုပျရုံမြားတှငျ Covid-19 ကာကှယျထိနျးခြုပျရေးကာလ ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာန၏ ညှနျကွား ခကျြမြား အတိုငျး လိုကျနာမှုရှိစရေနျ မွဝတီမွို့နယျ ကနျြမာရေးဦးစီးဌာနနှငျ့ မွို့နယျအလုပျသမားညှနျကွားရေး ဦးစီးဌာနတို့မှ ပူးပေါငျး ၍ လိုကျလံစဈဆေးမှုမြားပွုလုပျလကျြရှိရာ ထိုသို့ စဈဆေးနစေဉျကာလအတှငျး ဧပွီလ ၃၀ ရကျနထေိ့ အဆိုပါ စကျရုံအလုပျရုံ မြားအား ယာယီပိတျထားခိုငျးသညျဟု မွဝတီမွို့နယျအလုပျသမားညှနျ ကွားရေးဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရှိ ဦးနိုငျဝငျးထှနျး က ပွောသညျ။
ယခုလိုစဈဆေးရာတှငျ အပူခြိနျတိုငျးကိရိယာမြားဖွငျ့ တိုငျးတာ၍ ကနျြးမာရေးစဈဆေးမှုမြားပွုလုပျခွငျး၊ လကျ ဆေးခွငျး ၊ Mask မြားတပျဆငျခွငျး၊ အလုပျသမားမြား၏ အမညျစာရငျးနှငျ့ နရေပျလိပျစာကို မှတျတမျး ထားရှိ ခွငျး၊ ကနျြးမာရေးဝနျကွီး ဌာနမှ ထုတျပွနျထားသညျ့ Covid-19 အသိပညာပေး ဗီနိုငျးပိုစတာမြားကို လုပျငနျးခှငျ နှငျ့ အမြားမွငျသာသညျ့နရောတှငျ ထားရှိခွငျးအစရှိသညျ့ စညျးကမျးခကျြမြားကို လိုကျနာဆောငျရှကျ ထားမှုရှိမရှိ စဈဆေးထားမှုအပွငျ အလုပျသမားမြား ဖြားနာ ပါက ပွငျပဆေးခနျးမြားတှငျ မပွဘဲဆေးရုံသို့တကျ ရောကျ၍ ဆေးဝါးကုသမှုခံယူရနျနှငျ့ လိုအပျသညျမြားကိုမှာကွားခဲ့သညျ ဟုလညျး ဦးနိုငျဝငျးထှနျး က ဆကျပွောသညျ။
၎င်းငျးအပွငျ ထိုငျးနိုငျငံဘကျခွမျးကုမ်ပဏီမှအထညျအျောဒါကိုယူပွီး ခြုပျနရေသညျ့အတှကျ ယခုလို စကျရုံ ပိတျထားရ၍ သတျမှတျရကျအတှငျး အထညျမြားမအပျနိုငျရငျ တဖကျက ယုံကွညျမှုမရှိတော့ဘဲ လုပျငနျးအတှကျ ထိခိုကျလာမညျကို စိုးရိမျမှု ရှိနကွေောငျးလညျး အထညျခြုပျစကျရုံ လုပျငနျးရှငျ မနှငျးသီတာက ဖွညျ့စှကျပွောသညျ။ ထိုငျး-မွနျမာနယျစပျ မွို့တဈမွို့ဖွဈသော မွဝတီမွို့တှငျ လုပျငနျးလိုငျစငျတငျ၍ လုပျကိုငျဆောငျရှကျနသေော အသေးစား၊ အလတျစား စကျရုံအလုပျရုံ ၁၀ဝ ကြျောရှိသညျဟု သိရသညျ။ http://kicnews.org/2020/04/%e1%81%ab%e1%82%8a%e1%80%94%e1%80%b 9%e1%81%be%e1%80
ခငျြးပွညျနယျ ပလကျဝမွို့နယျ၌ တပျမတျောနှငျ့ ရက်ခိုငျ စဈတပျ (AA) တို့ တိုကျပှဲကွောငျ့ ထှကျပွေးလာသော စဈဘေးရှောငျ ဒုက်ခသညျမြား ရခိုငျပွညျနယျ ကြောကျတျောမွို့ရှိ အစိုးရ အသိအမှတျပွု ဒုက်ခသညျစခနျးသို့ လာရောကျလကျြရှိကွောငျး အဆိုပါ ဒုက်ခသညျမြားထံမှ သိရသညျ။ ပလကျဝမွို့နယျ မှနျထောငျးရှာဘကျမှ အမြားစုဖွဈပွီး ကြောကျတျောမွို့နယျ ကနျစောကျရှာရှိ ဒုက်ခသညျ စခနျးသို့ ရောကျရှိ လာသညျ့လူဦးရေ ၁၂ဝ ကြျောရှိနကော လကျရှိအခြိနျအထိ လူဦးရေ ရာနှငျ့ခြီ ဆကျလကျလာရောကျနကွေောငျး၊ လယောဉျမြားဖွငျ့ နအေိမျမြားကို ပဈခတျမှုမြား ပွုလုပျနေ၍ ယခုကဲ့သို့ တိမျးရှောငျ ထှကျပွေးလာရခွငျး ဖွဈကွောငျး စဈဘေးရှောငျ ဒုက်ခသညျဖွဈသူ ပလကျဝမွို့နယျ စိမျးစမျးရှာမှ ဦးဇျောဇျောက ပွောသညျ။ ဦးဇျောဇျောက“ကနြျောတို့ရှာမှာတော့ အိမျတှကေို လယောဉျတှနေဲ့ ပဈနတော။ အိမျတျောတျောမြားမြားက မီးလောငျကုနျပွီ။ ရှိတဲ့ အိမျတှပေျေါလညျး တပျမတျောသားတှကေ တကျနတေော့ ကနြျောတို့ ဘယျလိုမှ မနနေိုငျတော့ဘူး။ ပထမ ဗုံးကြဲတုနျး က အိမျက ၉ လုံး။ နောကျထပျလညျး စဈဖွဈနတေော့ ကနြျောတို့ ပွေးလာတာ”ဟု ပွောပွသညျ။
ထို့ပွငျ ပလကျဝမွို့နယျ မှနျထောငျးရှာ၊ စိမျးစမျးရှာအနီးဝနျးကငျြရှိ ကြေးရှာမြားမှ စဈဘေးရှောငျ ဒုက်ခသညျ ၄ဝဝ ကြျော လညျး လမျးတှငျပငျ ရှိနသေေးကွောငျး စဈဘေးရှောငျ ဒုက်ခသညျမြားက ပွောသညျ။ ထိုသို့ ကြောကျတျောမွို့နယျ အပေါကျဝရှာရှိ ဒုက်ခသညျမြားခိုလှုံရာ စခနျးမြားကို မညျသညျ့ အတှကျကွောငျ့ ပွညျနယျအစိုးရအနဖွေငျ့ ဒုက်ခသညျစခနျးအဖွဈ အသိအမှတျ မပွုရခွငျး အကွောငျးရငျးကို ရခိုငျပွညျနယျ နယျစပျရေးရာနှငျ့ လုံခွုံရေးဝနျကွီး ဗိုလျမှူးကွီး မငျးသိုကျထံသို့ အကွိမျကွိမျ ဆကျသှယျမေးမွနျးခဲ့သျောလညျး ပွနျလညျ ဖွကွေားခွငျး မရှိပေ။
ထို့ပွငျ တပျမတျော သတငျးမှနျပွနျကွားရေးအဖှဲ့မှ တာဝနျရှိသူ ဗိုလျမှူးခြုပျ ဇျောမငျးထှနျး ထံသို့လညျး ရခိုငျပွညျနယျရှိ စဈဘေးရှောငျ ဒုက်ခသညျစခနျးမြားကို အသိအမှတျမပွုရခွငျးနှငျ့ ပတျသကျပွီး ၂ ရကျဆကျ၍ ဖုနျးဖွငျ့ ဆကျသှယျ မေးမွနျး သျောလညျး လကျခံဖွကွေားခွငျး မရှိပေ။ ထိုကဲ့သို့ အစိုးရအဖှဲ့မှ တရားဝငျ အသိအမှတျပွုထားခွငျးမရှိသညျ့ ဒုက်ခသညျစခနျး မြားရှိနသေညျ့အတှကျ စဈဘေးရှောငျမြားကို အစိုးရ၏အထောကျအပံ့မြား၊ လူမှုရေးအဖှဲ့၏ အကူအညီမြားနှငျ့ ပွညျတှငျးပွညျပ NGO အဖှဲ့အစညျးမြား၏ အကူအညီမြားပေးရနျ အခကျအခဲရှိကွောငျး ရခိုငျပွညျနယျရှိ လှတျတျော ကိုယျစားလှယျမြားက ပွော သညျ။
၂ဝ၂ဝ ပွညျ့နှဈအတှငျး နှဈဆနျးပိုငျးမှစတငျပွီး ယခုလအထိ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး အနယျနယျ အရပျရပျမှ စဈဘေးရှောငျ လာ သော ဒုက်ခသညျမြား ၁ သိနျး ၇ သောငျးကြျောအထိ ရောကျရှိလာနပွေီဖွဈပွီး ရခိုငျပွညျနယျ မွောကျပိုငျးအတှငျး ဒုက်ခသညျ စခနျးပေါငျး ၁၄ဝ ကြျောအထိရှိနသေညျဟု ရခိုငျတိုငျးရငျးသား မြိုးနှယျစုအစညျးအရုံး (Rakhine Ethnic Congress ) ၏ စာရငျးမြားအရ သိရသညျ။ တပျမတျောနှငျ့ AA တို့၏ တိုကျပှဲမြားကွောငျ့ ပလကျဝမွို့ပျေါတှငျ လာရောကျ ခိုလှုံနသေညျ့ စဈဘေးရှောငျ ဒုက်ခသညျ စုစုပေါငျး ၃ သောငျး ၆ ထောငျကြျော ရှိနသေညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020 /04/29/221696.html
COVID-19 အတညျပွုလူနာ နံပတျ ၁၄၄ နဲ့ ထိတှခေဲ့တဲ့ ကခငျြပွညျနယျ မိုးညှငျးဆေးရုံက ကနျြးမာရေးဝနျထမျးတှနေဲ့ စတေနာ့ဝနျထမျးတှေ စုစုပေါငျး ၁၈ ဦးစလုံးမှာ COVID-19 ရောဂါပိုး မတှရှေိ့ရဘူးလို့ မိုးညှငျးဆေးရုံမှ ဆရာဝနျတဦးက ပွော ပါတယျ။ မိုးညှငျးမွို့ quaratine စငျတာမှတဆငျ့ မိုးညှငျးခရိုငျဆေးရုံကွီး ကွပျမတျဆောငျသို့ ပွောငျးရှကေု့သခဲ့တဲ့ လူနာ အမှတျ ၁၄၄ နဲ့ ထိတှခေဲ့သူတှကေို ဧပွီ ၂၇ ရကျက နှာခေါငျး အာခေါငျတို့ဖတျ ပေးပို့စဈဆေးထားတာဖွဈပါတယျ။
မိုးညှငျးဆေးရုံမှ ဆရာဝနျ ဒေါကျတာဖွူလေးဝကေ “၁၈ ဦးစလုံး ပိုးမတှေ့ အဖွရေပါတယျ။ ဒုတိယအကွိမျ မလေ ၄ ရကျနေ့ ပွနျစဈဆေးဖို့ တို့ဖတျပွနျယူမှာပါ။ ဒုတိယအကွိမျစဈဆေးလို့ ပိုးမတှေ့ Negative အဖွထှေကျလာရငျ ၂၁ ရကျ quarantine စောငျ့ကွညျ့ခံရတဲ့ နအေိမျ ၃၈ လုံးနဲ့ မိသားစုတှေ ထှကျလို့ရပါပွီ”လို့ ပွောပါတယျ။ COVID-19 လူနာ ၁၄၄ ကတော့ “ကနြျောနဲ့ထိတှခေဲ့သူ ရနျကုနျခနျြးရိစကျရုံကရော မိုးညှငျးကတှရေော အားလုံးပိုးမတှလေို့ ဝမျးသာပါတယျ။ ကနြျော မွဈကွီးနား ဆေးရုံမှာပဲ ကနျြးမာရေးအခွအေနေ တဖွညျးဖွညျး ကောငျးလာပါပွီ”လို့ ဖုနျးနဲ့ဖွကွေားပါတယျ။ http://burme se.dvb.no/archives/385294
မူဆယျမွို့တှငျ တရုတျနိုငျငံမှ မွနျမာနိုငျငံအတှငျး ပွနျလညျဝငျရောကျလာသူ မွနျမာလုပျသား နစေ့ဉျ ၁၀ဝ ကြျောရှိကွောငျး သိရှိရသညျ။ “ရှမျးပွညျနယျ အစိုးရအဖှဲ့ကလညျး လမျးညှနျထားတာဆိုတော့ ဒီအဖှဲ့တှေ စာရငျးရတာနဲ့ ထိနျးခြုပျဗဟိုကို ပို့ မယျ။ ပွီးတော့ ရှမျးမွောကျအဆုံး ဧရိယာဖွဈတဲ့ နောငျခြိုမွို့နယျ ဘနျ့ဘှေးမှာရှိတဲ့ ခွမွေဈပငျ မန်တလေးတိုငျး ဒသေကွီးအစပျ ပွငျဦးလှငျ ဝကျဝံကွားမှာ Lockdown လုပျထားတဲ့ အနအေထားမှာ တရုတျနိုငျငံက ပွနျလာတဲ့ နိုငျငံသားတှကေို သကျဆိုငျ ရာနရောသှားနိုငျအောငျ ကြှနျတျောတို့စီမံ ဆောငျရှကျနပေါတယျ”ဟု ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျး ဒုတိယပွညျနယျ အုပျခြုပျရေး မှူး ဦးကြျောသူဇျောက ပွောကွားသညျ။
အဆိုပါ တရုတျနိုငျငံမှ ပွနျလညျ ဝငျရောကျလာသူ မွနျမာနိုငျငံသားမြားအား နရေပျဒသေသို့ ပွနျလညျစလှေတျ လကျြရှိရာ ၎င်းငျးတို့ကို ပွငျဦးလှငျရှိ COVID-19 ရောဂါ ကာကှယျထိနျးခြုပျ ကုသရေးကျောမတီမှ ခရိုငျရဲတပျဖှဲ့မှူးမှ ကွီးကွပျ၍ ယာဉျတနျးဖွငျ့ မန်တလေးတိုငျးနှငျ့ အခွားဒသေ အသီးသီးသို့ သှားနိုငျရနျ စီစဉျဆောငျရှကျ ပေးလကျြရှိကွောငျး သိရသညျ။ ယငျးအပွငျ ပွနျလညျဝငျရောကျ လာသူမြားအား သယျယူပို့ဆောငျပေးနသေော ယာဉျမောငျးမြား အနဖွေငျ့ ကနျြးမာရေး ဝနျကွီးဌာန၏ သကျမှတျခကျြမြားနှငျ့အညီ တငျဆောငျပို့ဆောငျပွီး ယာဉျမောငျသူမြား COVID-19 ရောဂါ သယျယူသူမြား မဖွဈရေး အသိပညာမြား ရရှိထားရနျလိုအပျ‌နသေေးကွောငျး ဒသေခံမြားက ပွောကွားသညျ။
မူဆယျမွို့တှငျ တရုတျနိုငျငံ အကဉျြးထောငျအသီးသီးက လှဲပွောငျးလာသူမြား အပါအဝငျ စုစုပေါငျး ၉၆ ဦးအား မူဆယျမွို့ရှိ တရုတျစာသငျကြောငျး၌ ၂၁ ရကျ Facility Quarantine ထားရှိကွောငျး သိရှိရသညျ။ https://newseleven.com/articl e/171253
သြှမျးပွညျတောငျပိုငျး တောငျကွီး စဝျစံထှနျးဆေးရုံတှငျ ဆေးကုသမှုခံယူနသေညျ့ Covid-19 သံသယလူနာအမြိုးသမီးတဈဦး သဆေုံးသှားကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။
အဆိုပါ စောငျ့ကွညျ့လူနာသညျ ယမနျနေ့ (ဧပွီ ၂၈) ရကျမနကျပိုငျးက စဝျစံထှနျးဆေးရုံတှငျ ဆေးကုသခံယူနဆေဲလူနာဖွဈ ပွီး၊ ထိုလူနာ၏ ဓာတျခှဲခနျးကို ရနျကုနျအမြိုးသား ဓာတျခှဲခနျးသို့ပို့ဆောငျနစေဉျ သဆေုံးသှားကွောငျး ပွညျနယျ အထူးရောဂါနိမျနငျးရေးဌာန လကျထောကျညှနျကွားရေးမှူးဒေါကျတာ နှငျးအိဖွူက သြှမျးသံတျောဆငျ့သို့ ပွောသညျ။ သဆေုံးသှားသညျ စောငျ့ကွညျ့သူသညျ သြှမျးပွညျတောငျပိုငျး ရပျစောကျမွို့နယျ(အငျတော) က အသကျ ၅၀ အမြိုးသမီး ဖွဈပွီး၊ ဧပွီ ၂၃ ရကျနေ့ က စဝျစံထှနျးဆေးရုံ မှာ Covid-19 စောငျ့ကွညျ့လူနာအဖွဈ တကျရောကျ ဆေးကုသမှု ခံယူခဲ့ကွောငျး ဒေါကျတာနှငျးအိဖွူက ပွောသညျ။
“ပွငျးထနျ အဆုတျရောငျ လက်ခဏာ နဲ့ ဆေးရုံတကျနတော။ သံသယ လူနာ အနနေဲ့ကုထားတာ။ သူ့ရဲ့ ဓါတျခှဲနမူနာကိုတော့ ၂၇ ရကျနကေ့ NHL ကိုတော့ ပို့ထားတယျ။ ဓါတျခှဲ အဖွတေော့ မရသေးဘူး” ဟု ဒေါကျတာနှငျးအိဖွူ က ဆိုသညျ။ ၎င်းငျး အမြိုးသမီးသညျ ရောဂါပိုး ရှိသူနှငျ့ ထိတှမှေု့ မရှိ၊ နိုငျငံခွားခရီးသှား ရာဇဝငျမရှိ။ သို့သျောသားဖွဈသူမှာ မတျလ ၁၅ ရကျနကေ့ ထိုငျးနိုငျငံမှ ပွနျလာသူ ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
“သူ့ ဓါတျခှဲအဖွေ မထှကျသေးတော့ Covid-19 ပိုးရှိသူလို့တော့ ပွောလို့မရသေးဘူး။ ဓါတျခှဲ အဖွကေ ၃ ရကျလောကျထပျ စောငျ့ရမယျ။ သူက နိုငျငံခွားသှားထားတဲ့ ရာဇဝငျ တော့မရှိဘူး” ဟု ဒေါကျတာနှငျးအိဖွူ ကပွောသညျ။ https://burmese. shannews.org/archives/16336